နိုင်ငံခြားမှာ ကြီးတဲ့မြန်မာကလေး အများစုက ဘာကြောင့် မြန်မာလိုမပြော မြန်မာလို မပြုမူကြလဲ ~ Nge Naing
Tuesday, February 08, 2011 Nge Naing 104 comments
"သားသား အိမ်စာမလုပ်ရသေးဘူး မဟုတ်လား"
"ဒါဆို သားလေးကစားတာ တော်တော့ အိမ်စာလုပ်လို့ရပြီ ကွန်ပြူတာပေါ်က အခုထတော့ ပြီးရင် ထမင်းစားလို့ရအောင် သားသားစားဖို့ မေမေ စားစရာ သွားလုပ်လိုက်တော့မယ်"
"Yes I will. Don't worry May May I don't have much homework because our class teachre did not come to work today. I can finish my homework inashort time" ထိုင်ရာက မထသေးဘဲ နောက်ထပ်ဂိမ်းတခုကို ထပ်စဖို့ လုပ်ရင်း ပြောလိုက်တယ်။
" သားသား မေမေ့ကို ဆင်ခြေမပေးနဲ့ နင်ဂိမ်းကစားနေတာ ဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲ အခု ထရင်ထ မထရင် နင့်ကိုငါ ရိုက်တော့မယ်"
"May May don't threat me I'm not paying ဆင်ခြေ Just one more game please"
"မောင်တိုး နင်အတွန့်မတက်လာနဲ့နော့် နင့်ကိုငါ ခြိမ်းချောက်နေတာ မဟုတ်ဘူး တကယ်ရိုက်ဖို့ ပြောနေတာ နင့်ကိုပါးစပ်နဲ့ ပြောလို့မရရင် အင်္ကျီချိတ်နဲ့ လာမယ် နင်ဘယ်လိုကလေးလဲ အခုထဆိုထ" လို့ ကျွန်မဒေါသထွက်ပြီး အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ ပြောလိုက်တော့ သူထလာတယ်။ ပြီးတော့ အိမ်စာမလုပ်သေးဘဲ စာအုပ်ကို ကိုင်ပြီးသူပြောချင်တာ ဆက်ပြောနေတယ်။
"May May it's nothing to be angry about. I don't like shouting and screaming don't treat me like that I am not that stupid"
"အော်.. နင်က အော်တာတော့ မကြိုက်ဘူး အေးအေးဆေးဆေး ပြောတာလည်း နားမထောင်ဘူး နင် အခုပါးစပ်ပိတ်ထားစမ်း လူကြီးကို ပြန်မပြောနဲ့ နင်ဆက်ပြောရင် နင်နာပြီသာမှတ်တော့ ငါအင်္ကျီချိတ်နဲ့ကိုလာမယ်"
"I can't shut up May May. I don't care your အင်္ကျီချိတ်. I need to say what I have to. You Burmese adults have no idea with problem solving and the only way what you do is screaming shouting and hurting children. I hate aggressive behabiour I wonder why our Burmese adults are that aggressive. You should go to the training to learn how to bring up children.
သားက အဲလို ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ကျွန်မဟာ ဆတ်ဆတ်တုန်အောင် နာပြီး ဘာပြောလို့ ပြောရမှန်းမသိနဲ့ "နင်ပြောလေကဲလေပါလား" လို့ ပြောပြီး ကျွန်မ အိမ်ခန်းထဲက အင်္ကျီချိတ်သွားယူလာပြီး သူ့ကိုရိုက်ဖို့ ချိန်ရင်း "ဆက်ပြော ခုနက ပြောနေတာတွေ နင်ဆက်ပြောစမ်း ဒီလောက်ပြောချင်တဲ့ကလေး" နင့်ကိုဝအောင် ပေးပြောမယ်" လို့ ပြောပြီး ရိုက်ဖို့ရွယ်ထားတော့ "That's all" တဲ့ ဘာမှ ဆက်မပြောတော့ဘူး ကြောက်တဲ့ပုံလည်း လုံးဝမပြဘူး။
ကျွန်မ တော်တော်ကို ဒေါသထွက်နေပေမဲ့ သူဆက်မပြောတော့ ရိုက်ဖို့ရွယ်ထားတဲ့ လက်ကိုချလိုက်ပြီး မရိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ "ဒီနိုင်ငံကို ရောက်လာတာ နင့်အတွက်ရောက်လာတာ ဒီလို အချိုးမျိုးလုပ်နေရင် နင်ငါ့သား မဟုတ်တော့ဘူး၊ နင့်ကိုငါ မချစ်တော့ဘူး မချစ်တော့ နင့်ကိုငါ ရိုက်စရာလည်း မလိုဘူး နင့်ကိုဒီမှာ မိဘမဲ့ဂေဟာမှာ ထားခဲ့ပြီး နင့်အဖေနဲ့ငါ နယ်စပ်ကိုပြန်မယ် နင်ဒီနိုင်ငံမှာ တယောက်တည်း နေခဲ့" လို့ ကျွန်မ စိတ်တိုပြီးပြောလိုက်တော့ သားက ကျွန်မ မျက်နှာကို စူးစိုက်ကြည့်ပြီး မျက်နှာ နည်းနည်းညို့လာတာ "Don't leave me alone May May" "Don't leave me alone May May"လို့ ပြောပြီး ကျွန်မရင်ခွင်ထဲကို တိုးဝင်လာတာနဲ့ ကျွန်မလည်း မအောင့်နိုင်တော့ဘဲ သားကို ရင်ခွင်ထဲမှာ ပွေ့ဖက်မိတဲ့အချိန်မှာ သားက ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုချလိုက်တယ်။ " May May, please don't say me that again, never ever say me that again. If you want me to do somethings, don't yell at me, tell me nicely, I'll listen to you" လို့ ပြောပြီး ဆက်ငိုနေလို့ ကျွန်မကပဲ ရင်ခွင်ထဲမှာ ပွေ့ချီထားပြီး မေမေ သားကို ကောင်းစေချင်လို့ ပြောတာ ဒေါသနည်းနည်း ပါသွားတယ် နောက်အဲလို ဒေါသနဲ့ မဆူတော့ဘူးလို့ ပြောပြီးပြန်ချော့လိုက်ရတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်တွေက လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ် သားသား လေးတန်းနှစ်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အပြစ်အပျက်လေး တခုဖြစ်တယ်။ ကျွန်မလည်း အဲဒီအချိန်ကစပြီး ကျွန်မသားကို ကျွန်မ ဘယ်တော့မှ မရိုက်တော့ဘူး သူမလုပ်ချင်တာကိုလည်း အတင်း ဘယ်တော့မှ မလုပ်ခိုင်းတော့ဘူးလို့ စိတ်ထဲမှာ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို လေ့လာကြည့်ရင် ကျွန်မတို့ သားအမိရဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံရာမှာ ကလေးတွေရဲ့ သဘောထားနဲ့ ဘာသာစကား သုံးစွဲထားပုံကို သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ ကြီးတဲ့မြန်မာကလေးတွေ မြန်မာလို အပြောနည်းပြီး မိခင်ယဉ်ကျေးမှု အလေ့အထတွေကို ကျင့်သုံးမှု နည်းတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပို့စ်တချို့ကို ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ဖတ်ရသလောက်တော့ အကောင်းဘက်က မြင်ခြင်း (သို့) ပကတိအတိုင်း မြင်ခြင်းထက် အဆိုးဘက်က မြင်တာက ပိုများတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအချက်တွေကလည်း တချိန်က ကျွန်မကိုယ်တိုင်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ တူတဲ့ အမြင်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ အကြောင်းရင်းကိုတော့ ကျွန်မတို့ ဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။
ကလေးတွေ ဗမာလို မပြောတာ ဗမာလိုပြောရမှာ ရှက်လို့၊ မိမိလူမျိုးကို အထင်သေးလို့ မိဘတွေကိုယ်တိုင်က ဗိုလ်ရူးရူးနေပြီး သားသမီးကို ဗမာလို မသင်ပေးလို့ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး အပြစ်တင်ဝေဖန်ကြတာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ တကယ်တော့ လေ့လာကြည့်ရင် အဲဒါတခုမှ မဟုတ်ဘူး၊ မိမိကိုယ်တိုင် ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီလိုဘ၀ကို ဖြတ်သန်းဖူးမှ ဒီအခြေအနေကို ခံစားနားလည်နိုင်မှာ အမှန်ပဲဖြစ်တယ်။ သားကို ခပ်ငယ်ငယ်က ဗမာနဲ့တွေ့ရင်ဖြစ်စေ၊ မိဘနဲ့ အိမ်မှာ စကားပြောရင်ဖြစ်စေ ဗမာလိုပဲ ပြောရမယ်လို့ ပြောထားတယ်။ သားက လည်း သူငယ်တန်းပထမနှစ်ဝက်အထိ ဗမာလိုကို ကောင်းကောင်း ပြောပါတယ်။ ဒုတိယနှစ်ဝက်ကစပြီး အင်္ဂလိပ်လို ညှပ်ညှပ်ပြီး ပြောလာရာကနေ နောက်တော့ အင်္ဂလိပ်လို ပြောပြီးဆက်ဆံရတဲ့ အချိန်က ပိုများနေလို့ အင်္ဂလိပ်လိုကိုပဲ လုံးဝ အားသန်သွားတယ်။ မြန်မာကျောင်းတွေ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေလည်း တပတ်တခါ သွားပို့ပေမဲ့ ဟိုမှာလည်း မြန်မာကလေးတွေအချင်းချင်း ဗမာလို မပြောဘဲ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပြောကြတာ တွေ့ရတယ်။
ဒါက ကျွန်မသား တယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါဟာ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာကလေးတိုင်းနီးပါး ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်တယ်။ ဒီဒေသ ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြီးပြင်းတဲ့ ကလေးတွေအားလုံးအတွက် အင်္ဂလိပ်လိုကို ပိုသန်သွားတာဟာ တကယ်တော့ ဘာမှ မထူးဆန်းပါဘူး၊ သဘာဝအတိုင်း ပုံမှန်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗမာလိုကောင်းကောင်း ကျွမ်းကျင်ဖို့ဆိုရင် ဒီနိုင်ငံမှာ ကလေးစိတ်မပါဘဲနဲ့ အတင်းတွန်းလို့ မရတဲ့အတွက် ကလေးကလည်း စိတ်ပါဝင်စားမှ မိဘကလည်း အချိန်ပေးကာ အထူးကြပ်ကြပ်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်နိုင်မှသာ ကလေးတွေက ဗမာလိုကို ကောင်းကောင်း ပြောနိုင်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ ဖေါ်ပြတဲ့ အဖြစ်အပျက် ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း သားနဲ့ ကျွန်မဟာ ပိုပြီး ရင်းနှီးပွင့်လင်းသွားတော့ ကလေးတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို ကျွန်မအရင်ကထက် ပိုနားလည်လာတယ်။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကိုပဲ အတင်းတွန်းပြီး ဦးစားမပေးတော့ဘူး။ ဒီနှစ် နွေရာသီမှာ ကျွန်မ အလုပ်ပါးတော့ သားနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး မကြာခဏ စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ ဗမာကလေးတွေဟာ သူများထင်သလိုပဲ မိမိလူမျိုးကို အထင်သေးလို့ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကို ပြောတာတကယ်များ ဖြစ်နေပြီလားတွေးပြီး ကလေးစိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာ သိချင်လို့ ကျွန်မသားကို မေးကြည့်တယ်။ သားဆီက သိရသမျှ ဗမာလို မပြောတာကတော့ တချို့ထင်နေသလို လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာလူမျိုး လူကြီးတွေရဲ့ အမူအကျင့်မှာ ကလေးတွေ မကြိုက်တာ အထင်သေးနေတာတွေ အများကြီး ရှိတာကို သားဆီက ကျွန်မ သိလိုက်ရတယ်။ "ဗမာလို မပြောချင်တဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းက ဗမာလိုဟာ အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ စာရင် သိပ်ကိုခက်ခဲတယ် ဒါက ပထမအချက် ဖြစ်တယ်" လို့ ဆိုတယ်။ နောက်တချက်က "ဗမာလိုကို ဗမာလိုတကယ်တတ်တဲ့ ဗမာတွေနဲ့ ပြောမှဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့ ဗမာလူကြီးတွေဟာ သိပ်ကိုရိုင်းတယ်၊ ကလေးတွေ စကားပြောလို့ မပီရင် (သို့) မှားနေရင် မပြင်ပေးတဲ့အပြင် သူတို့ ပြောတဲ့အတိုင်း ပုံစံတူ လိုက်ပြောပြီး တဟီးဟီး တဟားဟားနဲ့ ရယ်ကြတယ်။ ဒါဟာ သိပ်ရိုင်းတဲ့ အပြုအမူဖြစ်ပြီး သားတို့ကို နောက်ထပ် ဗမာလို ထပ်မပြောချင်လောက်အောင် အရှက်ရစေတယ်" လို့ ပြောပြတယ်။ ဒါဟာ သူတယောက်တည်းရဲ့ သဘောထား မဟုတ်ဘူး ကလေးအတော်များများရဲ့ သဘောထား ဖြစ်တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ တခြားကလေးတွေက သူတို့မိဘနဲ့ သူတို့ကြားမှာ သားနဲ့ ကျွန်မလောက် ရင်းနှီးပွင့်လင်းမှု မရှိတဲ့အတွက် သူတို့စိတ်ထဲမှာ ဒီလိုရှိနေတယ်ဆိုတာ မိဘကို ဘယ်တော့မှ ပြောမယ် မထင်ဘူး။ မြန်မာလူကြီးတွေက ရိုင်းတယ်လို့ ပြောတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့ထင်တဲ့ အချက်အလက်တွေက ကျွန်မတို့ လူကြီးတွေအတွက် ဘာမှမဟုတ် ပျော်သည်ပျက်သည်ပြောတာ ဖြစ်ပေမဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ ကြီးတဲ့သူတို့ကလေးတွေအတွက် တကယ်ကို ဆင်ခြင်သင့်တာကို ကျွန်မသတိထားမိပါတယ်။
သူတို့ ရိုင်းတယ်ထင်တဲ့ အချက်အဲတွေကတော့ ကျွန်မတို့အချင်းချင်း တွေ့ကြရင် အဖြူတွေလို ဖက်လဲတကင်း နှုတ်ဆက်ပြီး ကောင်းတဲ့အချက်တွေကို ရှာပြီး ချီးကျူးတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ၀မ်းသာအားရနဲ့ ဟေး.. နေကောင်းလား မင်းပိန်ပြီး မဲသွားလိုက်တာ ကုလား/ကုလားမပုံပေါက်နေတာပဲ၊ ၀နေတဲ့သူဆိုရင်လည်း ဗိုက်ကြီးက တွဲနေတာပဲ ဘီယာလား ကလေးလား ဘယ်နှစ်လ ရှိပြီလဲ ဘယ်တော့မွေးမလဲ၊ ဆံပင်တွေဖြူလာလိုက်တာ တော်တော် အရွယ်ကျသွားတယ်နော့် အိုပြီးကိုး စသည်ဖြင့် လူကြီးတွေက တယောက်နဲ့တယောက် ရင်းရင်းနှီးနှီးစနှောက်ပြီး နှုတ်ဆက်ကြတာကို သူတို့မျက်စိနဲ့ နားမှာ အားနည်းချက်တွေကိုမှ ရှာပြီး ရီစလုပ်ရတယ်ဆိုပြီး သိပ်ကိုရိုင်းတယ်ဆိုတာ သားပြောမှ ကျွန်မသတိထားမိတယ်။ ကျွန်မတို့အတွက်တော့ တယောက်နဲ့တယောက် ရင်းနှီးလို့ ပြောတာ ဘာမှမခံစားရပေမဲ့ သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့ လူတယောက်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို ကြည့်ပြီး အပျော်လုပ်ကြတာဟာ အဲဒီအလုပ်ခံရတဲ့သူကို စိတ်ဓါတ်ရေးရာအရ သိမ်ငယ်စေလုိ့ Bully လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်၊ အဲလို Bully လုပ်ပြီး ပျော်ကြတာကို ဘယ်လိုမှ ခံစားနားလည်လို့ ရမှာမဟုတ်ဘူး။
အတွေ့အကြုံတခုကို ဥပမာပေးရရင် ခရစ်စမတ်တုန်းက ကမ်းခြေမှာ ရေသွားကူးကြတော့ ကျွန်မတို့မိတ်ဆွေထဲက အသားခပ်ညိုညို သားသူငယ်ချင်း ကလေးတယောက်က ရေကူးတာ Sun cream လုံလောက်အောင် လိမ်းခဲ့ပုံမရဘူး ရေထဲမှာ အကြာကြီးနေပြီး အပေါ်တက်လာတော့ မဲတူးနေတာကို လူကြီးတွေက ၀ိုင်းရယ်ပြီးတော့ မင်းကကုလားလား၊ ကပ္ပလီလားနဲ့ လိုက်စကြတယ်။ ပြီးတော့ မိတ်ဆွေတယောက်ကလည်း သူ့အမေကို နင်ဆေးရှုံမှာ ဒီကောင်ကိုမွေးတုန်းက ကပ္ပလီကလေးနဲ့ မှားပြီးပါလာလားမှ မသိတာလို့ စလိုက်တော့ သူ့အမေအပါအ၀င် လူကြီးတွေက ဒါကို သဘောကျပြီး တ၀ါးဝါး တဟားဟားနဲ့ ဟားတိုက်ပြီး အကုန်ရယ်ကြတယ်။ ကလေးတွေကတော့ တယောက်မှ မရီတာ ကျွန်မသတိထားမိလိုက်တယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်ပြီး နောက်ပိုင်း သားသားနဲ့ ကျွန်မနဲ့ ဒီအကြောင်း စကားစပ်မိတော့ ကမ်းခြေမှာတုန်းက အဲဒီကလေးကို bully လုပ်တာတင်မကဘူး သူများလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ ကုလားတွေ၊ ကပ္ပလီတွေကိုပါ သွားပြီး ထိခိုက်စေတယ်လို့ သားက မကျေမနပ်နဲ့ ပြောနေတယ်။ ပြီးတော့ ဗမာလူမျိုးတွေလောက် လူသားအချင်းချင်းခွဲခြားတတ်တာ ကမ္ဘာာမှာ မြန်မာလူမျိုးပဲ ရှိမယ်ထင်လို့ ပြောပြီး မြန်မာလူကြီးတွေဟာ လူကြီးအချင်းချင်းတွေ့ရင်လည်း တယောက်ကိုတယောက် အားနည်းချက်ကို ရှာပြီး Bully လုပ်ကြတယ်။ ကလေးတွေ ဗမာလို ပြောတာ စကားပြောမပီရင်လည်း ရီစရာမဟုတ်တာကို ရယ်စရာလုပ်တယ်၊ ကလေးတွေကို ငိုအောင် လိုက်စပြီး ကလေးတွေငိုရင်လည်း ဟားတိုက်ပြီး ရယ်စရာ လုပ်ကြတယ်၊ တခြားလူမျိုးတွေကိုလည်း လူသားအချင်းချင်းလည်း ထိခိုက်စော်ကားပြီး သိပ်ခွဲခြားတတ်တယ် ဘယ်လိုမှ နားလည်လို့ကို မရဘူးလို့ ပြောတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ ကောင်းတဲ့အတုယူစရာဆိုလို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတာနဲ့ အလှူအတန်း ရက်ရောတာပဲ တွေ့တယ် ကျန်တဲ့အတူယူစရာ ကောင်းတဲ့အချက်ဆိုလို့ မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ သူဘာမှမတွေ့ကြောင်းလည်း ပြောလိုက်တယ်။ ဒါဟာ သူ့တယောက်တည်းရဲ့ သဘောထားမဟုတ် ကလေးတော်တော်များများက ဒီလိုပဲခံစားရပြီး သူတို့မိဘတွေကို မပြောပြရဲလို့ (သို့) ပြောလို့ အကျိုးမရှိဘူး ထင်လို့သာ မပြောကြောင်း သားက ကျွန်မကို ပြောပြပါတယ်။
ကျွန်မလည်း ကလေးတွေကို လုပ်တဲ့အပြုအမူတွေ ဖြစ်တဲ့ စကားမပီရင် ရယ်တာ၊ လိုက်စပြီး ရယ်တာနဲ့ ကုလားလိုပဲ ကပ္ပလီလိုပဲလို့ ကလေးတွေကို ပြောတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဲဒါကိုတော့ ရိုင်းတယ်ဆိုတာ ကျွန်မလက်ခံပေးလိုက်တယ်။ ကလေးစကားမပီလို့ ရီတာဟာ ကျွန်မတို့အတွက် ရည်ရွယ်ချက် မပါပေမဲ့ တဘက်သားကို ခံစားမှု ဖြစ်စေတာ အမှန်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ လူကြီးအချင်းချင်း တယောက်နဲ့တယောက် ခင်မင်ရင်းနှီးလို့ ပိန်တာ၊ ၀တာ အရွယ်ကျလာတာကို ပြောကြတာကတော့ တစိမ်းတွေကို ဘယ်တော့မှ မပြောဘဲ တယောက်နဲ့တယောက် အင်မတန်ကို ခင်မင်ရင်းနှီးမှသာ ပြောကြတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါကိုရိုင်းတယ်လို့ ပြောလို့မရကြောင်း သားကိုရော သားသူငယ်ချင်းတွကိုပါ ကျွန်မ ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ ကာရကံရှင် ကျေနပ်သည်ဖြစ်စေ မကျေနပ်သည်ဖြစ်စေ ဒါဟာ အားနည်းချက်ကို အခွင့်ကောင်းယူတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ယဉ်ကျေးတဲ့အပြုအမူတခု မဟုတ်ဘူးလို့ပဲ သူတို့သဘောထားကြတယ်။
မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတာနဲ့ အပေးအကမ်းလှူဒါန်း ရက်ရောတဲ့အပြေင် ကြီးသူရိုသေ၊ ငယ်သူသနား ရွယ်သူလေးစားတယ်။ အကြင်နာတရား ရှိတယ်စသည်ဖြင့် အတုယူစရာအဖြစ် ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေ ပြောပြတော့ ကြီးသူရိုသေတာပဲ သူတို့လက်ခံပေမဲ့ ကျန်တာကိုတော့ သူတို့လက်မခံဘူး။ ကြီးသူကိုရိုသေတာ တခုတော့ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲတို့ နှစ်စဉ်လုပ်ပြီး အသက်ကြီးသူတွေကို တလေးတစား ဆက်ဆံတာ သူအမြဲတွေ့နေရလို့ သူကိုသက်သေပြလို့ရသွားတယ်။ အကြင်နာတရား ရှိတယ်ဆိုတာလည်း မြန်မာရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ အမြဲတမ်း ဒေါသထွက်ကြ၊ ရန်ဖြစ်ကြတာ မကြာခဏတွေ့ရလို့ အကြင်နာတရားမှာ တခြားလူမျိုးတွေထက်တောင် နည်းသေးတယ်လို့ ထင်နေကြတယ်။
နိုင်ငံခြားမှာ ကြီးပြင်းတဲ့ ကျွန်မတို့သားသမီးတွေ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုကိုကိုယ် နားလည်ဖို့ဆိုတာ မိဘတွေမှာပဲ အများဆုံး တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျင့်သုံးဖို့ကိုကျတော့ အတင်းလုပ်လို့ရတဲ့အရာ မဟုတ်တဲ့အတွက် သူစိတ်ဝင်စားပြီး လက်ခံသဘောကျ ဆန္ဒရှိမှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ပုံဟာ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်တာနဲ့ မတူသလို ဒီကကလေးတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကလည်း မြန်မာနိုင်ငံက ကလေးတွေရဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ မတူပါဘူး။ ဒါကြောင့် မိဘပြောတာကို သူတို့လက်ခံဖို့ဆိုတာကလည်း လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်က သူတို့ရဲ့ခံစားမှုကို နားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဇီဝသိပ္ပံအရ သက်ရှိသတ္တ၀ါတိုင်းက သဘာဝ (Natural Selection) အရ သူရှင်သန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူနဲ့ Adaptation (လိုက်လျောညီထွေမှု) အံဝင်ခွင်ကျ ရှိပြီးသား ဖြစ်နေပါတယ်။ သူရှင်သန်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က မဟုတ်တဲ့ အလေ့အထတခုကို မိတ်ဆက်ချင်ရင် သူ့သဘာဝနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အထူး ပြုပြင်စီမံပြီး လုပ်ယူမှရပါတယ်။ ဒါကို Artificial Selection လို့ခေါ်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့သားသမီးတွေအတွက် ကျွန်မတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အလေ့အထက ဒီအတိုင်း သဘာဝအလျှောက် အလိုလျှောက် မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ သဘာဝကို လွန်ဆန်ပြီး လုပ်ယူ သွတ်သွင်းယူမှရတဲ့ Artificial Selection ဖြစ်သွားပြီ။ ဒီလို လုပ်ရာမှာလည်း သဘာဝလျောက် ပူတဲ့ရာသီဥတုကို Artificial Selection ဖြစ်တဲ့ Aircon နဲ့ အေးအောင် လုပ်ရင် တချို့က နှာစေးအအေးမိသွားတတ်သူ ရှိသလိုမျိုးပဲ Artificial Selection ကို လက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ ကလေးတွေလည်း အများကြီး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနစ်ကို ကျွန်မတို့ သွတ်သွင်းနိုင်မှုနဲ့ သူတို့ လက်ခံနိုင်မှု နှစ်ခုစလုံးအပေါ် မူတည်ပြီးပဲ ကျွန်မတို့ရဲ့ အမွေအနစ် သူတို့ဆီမှာ လက်ဆက်ကမ်း ကျန်မှာဖြစ်တယ်။ လက်မခံနိုင်ရင်လည်း ဒါဟာ အပြစ်တင်စရာလည်းမဟုတ်ဘူး ၀မ်းနည်းစရာလည်း မဟုတ်ဘူး ဒါဟာ သဘာဝကို လွန်ဆန်သွားတာမဟုတ် သူကြီးပြင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ သဘာဝတိုင်းသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မတို့က လက်ခံပေးရမှာ ဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်မသားလေးကို ကျွန်မ ဒီလိုလုပ်ပါလို့ လမ်းပဲလမ်းညွန်ပါတယ် အတင်းဘယ်တော့မှ မလုပ်ခိုင်းဘူး။ အခု အထက်တန်းစတက်တဲ့အချိန်မှာ တခြားကလေးတွေ သူတို့ဘာသာစကားကို ကောင်းစွာပြောတတ်တာကို ကြည့်ပြီး သားက ဗမာလို ပြန်ပြောလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ မူလတန်းတုန်းကရော အခုအထက်တန်းစတက်ချိန်မှာပါ Culture Diversity ဆိုတာကို သင်ရပြီး Culture တခုမှာ ဘာသာစကားနဲ့ အလေ့အထ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာတွေ ပျောက်ရင် Natural Selection ရဲ့ Convergent Evolution Process အတိုင်း လူမျိုးဆိုတာလည်း တခြားလူမျိုးတွေကြားမှာ တိမ်ကော ပျောက်ပျက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သားစကားပြောရင် ပုံတူလိုက်တုပြီး သူ့ကိုအမြဲတမ်း ရီတတ်တဲ့ သူ့အဖေကို သားဗမာလိုပြောလို့ အသံဝဲရင် ဗမာပီပီ မရီနဲ့နော့်လို့ သတိပေးထားရတယ်။ သူဗမာလို ပြန်ပြောအောင် ကျွန်မအတင်းတိုက်တွန်းတာ မဟုတ်ဘူး။ Multi-cultural ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မိမိ Culture ကို မျိုးဆက်တိုင်းက ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ သူ့ဖါသာသူ ဗမာလို ပြန်ပြောတာ ဖြစ်တယ်။
တကယ်တော့ ဘာသာစကား၊ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု၊ ယဉ်ကျေးမှု ထုံးတမ်းအစဉ်အလာတွေဆိုတာ အခြေအနေ၊ အချိန်အခါ ကာလံဒေသံ အရသာ ဖြစ်ပြီး ဒါကို ကျွန်မတို့ လွန်ဆန်လို့မရ၊ မျက်ကွယ်ပြုလို့ မရပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်းပဲ တံငါနားနီးတံငါ မုဆိုးနားနီး မုဆိုး ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားပုံနဲ့ ရောမရောက်ရောမ ဆိုတဲ့ နိုင်ငံခြား စကားပုံတွေ ပေါ်လာတယ် မဟုတ်လား။ နိုင်ငံခြားမှာ ကြီးပြင်းတဲ့ မြန်မာကလေးတွေ မြန်မာလို အားမသန်တာ မြန်မာအမှုအမူ နည်းတာဟာ သူတို့ဘာမှ မမှားပါဘူး မိခင်ဘာသာစကားကို အထင်သေးလို့လည်း မဟုတ်ဘူး ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြီးတဲ့ ကလေးတွေအတွက် ဒါဟာ ပုံမှန်သာဖြစ်ကြောင်းကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Posted in: သားသား,ဆောင်းပါး
February 8, 2011 at 2:22 PM Reply
very good post especially for parents outside Myanmar ..
February 8, 2011 at 2:42 PM Reply
Once, I was told that you burmese have no sense of appreciation.
After that, I started to notice the burmese people & it is real, they have no sense of appreciation.
Moreover, there will be more trouble if there is too much burmese people in the work place especially in higher position.
February 8, 2011 at 2:46 PM Reply
ကျွန်မဒီနေ့ စူးနွယ်ရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုတွေ့လိုက်လို့လာဖတ်တာပါ။
ကျွန်မတို့တောင် အသက်ရပြီး သူများနိုင်ငံရောက်တာတောင် ဘာသာစကားနဲ့ အယူအဆတွေအများကြီး ကူးစက်ပါတယ်။
ကောင်းတာကိုရွေးချယ်တတ်ဘို့နဲ့ လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ဘို့က အရေးကြီးတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
February 8, 2011 at 4:07 PM Reply
Thanks for sharing your thoughts. One of my friend's son wants to know how to read and write Burmese because he wanted to read "Tut Pi" cartoons. :-)
February 8, 2011 at 4:10 PM Reply
မိဘနဲ့ သားသမီး ဆက်ဆံရေးအတွက် သတိထားသင့်တဲ့ အကြောင်းတွေကို အခုလို ရေးပြထားတာ သိပ်ကောင်းပါတယ်...
ကိုယ်က မိဘပဲ ဆိုပြီး ကလေးတွေကို တဖက်သတ် အမိန့်ပေးတာ၊ ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တာ တခုထဲကို လိုက်နာခိုင်းတာ စတဲ့ မတရားသဖြင့် အပြုအမူ အပြောအဆိုမျိုးနဲ့ သားသမီးကို ဆက်ဆံဖို့ ဘယ်တော့မှ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ သူတို့ကို အတတ်နိုင်ဆုံး နားလည် စာနာပေး၊ သူတို့ ဆန္ဒလေးတွေ သူတို့ရဲ့ သဘောထားလေးတွေကိုလည်း အလေးပေး ရှေ့တန်းတင်ပြီး သင့်တော်သလို ဆုံးမတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ... သူတို့ကြီးပြင်းလာရတဲ့ နေရာဒေသကြောင့် Culture မတူတော့တဲ့အပြင် ကိုယ်နဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် Generation Gap ကလဲ ရှိနေတယ် ဆိုတော့ တော်တော်တော့ သတိထားပြီး ထိန်းသိမ်းရမယ့် အနေအထားမှာ ရှိတယ်...
နောက်ကိုလဲ ကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို ရေးပါအုံးနော်...
အမတို့ အရင်က စကားပြောခန်းလေးကို ဖတ်ပြီး တော်တော် ၀မ်းနည်းသွားတယ်။ မျက်ရည်တောင် ကျတယ်။ ညီမအဖြစ်နဲ့ တူလို့ ပါ။ ညီမ အိမ်မှာလည်း အဖေနဲ့ အမေကဆို အဲ့ဒီ့အတိုင်းဘဲ။ အမေဆို အမြဲတမ်းလိုလို အကောင်းမမြင်တာက များတယ်။ အဖေဆို သူတို့ မှားနေလို့ ရှင်းပြရင်တောင် ဘယ်တော့ မှ လက်မခံ ဘူး။ ဘာမှ မဟုတ် တာလေးနဲ့ လည်း ပြသ၁နာရှာ တယ်။ နင်ကငါ့ကို ဘာပြန်ပြောတာလဲ ဆိုပြီး ရိုက်မောင်း ပုတ်မောင်း က အိမ်ထောင်မကျခင် လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်လောက် အချိန်ထိဘဲ။ တစ်ခုခုဆို ပြန်ရှင်းပြမိရင် နင့်ပါးစပ် ပိတ်ထား၊ နင်ဘာနားလည်လို့ လဲ၊ နင့်အသံ မကြားချင်ဘူး ဆိုတာ ချည်းဘဲ။ နောက်ဆုံးတော့ အခန်းထဲမှာ တစ်ယောက် တည်း ငိုရတာနဲ့ ဘဲ ပြီးခဲ့ရတာ။ အခုတော့ အိမ်ထောင်ကျလို့ သူတို့ တွေနဲ့ အဝေးမှာနေရတာ တော်တော့်ကို စိတ်ချမ်းသာတယ်။ နောက်ဆုံး ဘယ်လောက်ထိလည်း ဆို သတိရလို့မိဘဓါတ်ပုံ ကြည့်မိရင်တောင် ကြောက် နေရတဲ့စိတ်ကို ပြန်ရတုန်းဘဲ။ စည်းကမ်းတွေ ကတော့ အများသား။ ဧည့်သည်လာရင် အနားမလာရဘူး။ သူတို့ ခေါ်လို့ လာရင်တောင် စကားပြောရင် ၀င်မပြောရဘူး။ ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ရမယ် ဆိုတာကစပြီး၊ အပြင်ထွက်ရင် ညနေ6နာရီ နောက်ဆုံးထားအိမ်ပြန်ရမယ်။ မိုးချုပ်မှ အိမ်ပြန်တာ မိန်းမကောင်းမဟုတ်ဘူး။ ငါ့အိမ်မှာ နေရင် ငါ့စကားနားထောင်ရမယ်။ နားမထောင်ချင် ငါ့အိမ်မှာ မနေနဲ့ တဲ့။ အဲ့ဒါနော် အိမ်ထောင်မကျခင် ရက်ပိုင်း အလိုအထိ အဖေက အာဏာပြနေတုန်းဘဲ။ သူတို့အိမ်မှာ မနေလို့ ဘယ်သွားနေရမလဲ။ အဲ့ဒီ့တော့ သူတို့ အရိပ်ကို ခိုရတော့ နားကိုထောင်ရ တော့တာပေါ့။ ယောက်ျားလေးဆို သူငယ်ချင်းလား ဘာလား နားမလည်ဘူး။ အိမ်ကို ယောကျာ်းလေး လုံးဝ ဖုန်းဆက် ခွင့်မရှိဘူး။ ဟန်းဖုန်းက နံပါတ်တွေကို လည်း ဆက်သွယ်ရေးမှာ စာရင်းထုတ်ပြီး လတိုင်း ပြန်စစ်တယ်။ ဘယ်သူတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိလဲ ဆိုပြီး၊ သူတို့ မသိတဲ့နံပါတ်ဆိုရင် ပြန်ဆက်ပြီး ယောကျာ်းလေး ဖြစ်နေလို့ ကတော့ သေဖို့ သာ ပြင်ထား ဆိုတာက စတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မျက်နှာပျက်ရပေါင်း ကတော့ အကြိမ်ပေါင်းကို မနည်းတော့ဘူး။ ငိုရတာလည်း မရေတွက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ စဉ်းစားတာ ကြည့်ပါတော့ အမရယ်... ဘယ်လို အကြောက်တရား မျိုးနဲ့ နေခဲ့ရသလဲဆိုတာ.... ဒါတွေကို ပြန်ခံစားမိပြီး ၀မ်းနည်းလို့ မျက်ရည် ကျတာပါ။ သူတို့ ကောင်းတာလေးတွေကတော့ ညီမအပေါ် ပိုက်ဆံကိုတော့ ငြိုငြင်ခဲ့တာမရှိဘူး။ ပညာရေးကို အားပေးတယ်။ ဒီကျေးဇူးတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ထိ ကြောက်နေရတဲ့စိတ်က အရိုးစွဲနေတုန်းပါဘဲ။ ဆောရီးဘဲအမရေ.. ကွန်မန့် က မလိုအပ်ဘဲရှည်သွားလားမသိဘူး
February 8, 2011 at 7:46 PM Reply
ပြည်ပမှာ ကြီးတဲ့ ကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော် အတော်လေး စိတ်ဝင်စားမိတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်မှာ ကလေးလည်း မရှိပါဘူး အိမ်ထောင်လည်း မရှိဘူး ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အမြင်က ဗမာပြည်ရဲ့ ရိုးသားမှုကို လိုက်ရှာပြီး အရည်အချင်းရှိတဲ့ ဗမာ အတော်များများက ပြည်ပ ရောက်ကုန်ကြတယ်(အကုန်မဆိုလိုပါ အချို့ ဖောသောရောသောတွေလည်း ရှိပါတယ်)။
မိသားစုတိုင်းက မဖြစ်ခါမှ မဖြစ် အရည်အချင်းကို တိုးတက်အောင်ပဲ ကြိုးစားကြတယ် ဆုတ်ယုတ်အောင်မလုပ်ကြဘူး။ အဲသည့်တော့ အရည်အချင်းရှိတဲ့ အဖေအမေရဲ့ ပြည်ပမှာ မွေးတဲ့သားငယ်တွေက ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုတော်နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများတယ်။ အဲသည့်သူတို့လေးတွေကို နိုင်ငံက ဆုံးရှုံးသွားမှာ စိုးတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာမျိုးကလည်း တန်ဖိုးမြင့်အောင် လုပ်နိုင်မယ့် အရည်အချင်းရှိသူတွေဆီရောက်မှ ပိုတန်ဖိုးတက်မယ်။
နိုင်ငံရေးစကားကိုဆိုတာ မဟုတ်ပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒေါ်ခင်ကြည် ထိန်းကျောင်းခဲ့သလိုမျိုး ပြည်ပမှာပဲ တကယ်ကြီးပြင်းခဲ့သူတယောက်ပေမယ့် ဗမာ့မြေကို ချစ်တတ်စေချင်တယ်၊ ဗမာစကားကို တန်ဖိုးထားတတ်စေချင်တယ်၊ ဗမာ့ယဉ်ကျေးမှုကို မြတ်နိုးတတ်စေချင်တယ်။
ပြည်ပမှာ ကြီးပြင်းကြရပေမယ့် သူတို့လေးတွေက နိုင်ငံရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်မလာဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ.........
February 8, 2011 at 7:49 PM Reply
ဟုတ်တယ်စစ်.... ကလေးတွေက သူတို့ကျင်လည်ရာ ဘ၀မှာ သူတို့အသိစိတ်နဲ့ သူတို့အပြည့်ရှိတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့က ၀န်းကျင်နဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မဟုတ်လို့ မြန်မာစကားကို အပြည့်အ၀ မသုံးမချတာ ကလေးအပြစ် မဟုတ်ပါဘူး။ ရောမရောက်ရင် ရောမလို ကျင့်ရမှာပေါ...့.. နော့်။
သားလေး အတွေးအခေါ်နဲ့ ပြောဆိုပုံက မြင့်ပါတယ်။ Nice Post.. sis
February 8, 2011 at 7:57 PM Reply
မငယ်ရေ မိဘတစ်ဦးအနေနဲ့ ခံစားနားလည်သွားပါတယ်။ ကျမ ကလေးနဲ့လဲ အဲဒီလိုပြသနာမျိုး ကိုယ်တိုင်ခံစား ကြုံတွေ့နေရလို့ပါ။ ကျမတို့အိမ်မှာ ဗမာလိုဘဲပြော ဗမာလိုဘဲနေတာပါ။ ကျမကလေးက ကျမတို့ဗမာလိုပြောတာကို နားလည်ပေမဲ့ သူကတော့အင်္ဂလိပ်လိုဘဲပြန်ပြောပါတယ်။ ကျမတို့က အတင်းအကျပ် ဗမာလိုပြောခိုင်းရင် သူ့အတွက်အတော် ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ သူပြန်ပြောတာကလဲ အတော်ကိုဝဲတဲ့လေသံနဲ့ ကဘောက်တိကဘောက်ချာ တောင်တစ်လုံး မြောက်တစ်လုံးဘဲပြန်ပြောနိုင်ပါတယ်။ မိဘနှစ်ပါးစလုံးက ဗမာလိုပြော ဗမာလိုပြုမူနေထိုင်ပေမဲ့ ကလေးအနေနဲ့က ကျတော့ သူနေ့စဉ်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်း အနေအထားအရ အင်္ဂလိပ်လိုမဖြစ်မနေပြောဆို ဆက်ဆံနေရတဲ့အခါကျတော့ ဗမာစကားကသူတို့အတွက် ပထမဦးစားပေးဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တာကို လူကြီးတွေက နားလည်ပေးနိုင်ဖို့ အတော်ကိုလိုပါတယ်။ ကျမနေတဲ့နေရာကို ကွန်မန့် source ကိုကြည့်ပြီးမငယ်သိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီမှာနေရတာ ဘာသာစကားနဲ့တစ်ချို့အလေ့အထ အနည်းငယ်ကလွဲလို့ မြန်မာနဲ့ အားလုံးနီးပါး ထပ်တူပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းတော့နည်းပါတယ်။ သိပ်မရှိသလောက်ပါဘဲ။ ကိုယ့်မိသားစုလေးနဲ့ကိုယ်ဘဲနေရတာမျိုးပေါ့။ကျမကလေးက မြန်မာပြည်မှာမွေးတာပေမဲ့ အတော်ငယ်ငယ်လေးကတဲကဒီကိုရောက်ပြီး ဒီမှာကြီးပြင်းလာတာပါ။ အခု ၈နှစ်အရွယ်ရောက်နေပါပြီ။
ကလေးက ကျောင်းမထားခင်အထိ ဗမာလိုကလွဲလို့အင်္ဂလိပ်လိုကော ဒီကဘာသာစကားကိုပါလုံးဝမတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းထားပြီးတဲ့နောက်မှာ သူ့ရဲ့နေ့စဉ်ထိတွေ့ဆက်ဆံ ကျင်လည်ရတဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက လုံးဝပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက် သူ့အနေနဲ့ နေ့စဉ်အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ မဖြစ်မနေ သင်ကြားပြောဆိုဆက်ဆံရတဲ့ အနေအထားကိုရောက်သွားပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကလေးသဘာဝအရ အဲဒီအနေအထားမှာ သူကျင်လည်ဝင်ဆန့်နိုင်ဖို့ သူ့ကိုယ်သူ Adapt လုပ်ယူရပါတော့တယ်။ အဲဒီလိုကနေပြီး ဗမာစကားကို ပြောရတာသူ့အတွက်ခက်ခဲလာတာပါ။ ပြောတာကိုနားလည်ပေမဲ့ သူပြန်ပြောဖို့အတွက်ကျတော့ အင်္ဂလိပ်လိုက သူ့အတွက် ပိုလွယ်ကူနေတဲ့အတွက် အဲဒီဟာကိုဘဲသူရွေးချယ်မိသွားတယ်ထင်ပါတယ်။
February 8, 2011 at 8:18 PM Reply
It is actually upon the parents and how to observe them. Yes, Burmese is not their first language and the point to teach first to them is that not to teach the literature, to learn how to speak, everyday, the parents need to monitor at home.... Parents need to take time, and find interesting things, and explain differences. There are differences between Asian and Western cultures depending on where you take from- there are advantages and disadvantages. You do not need to rush the time, need to take time and explain them especially when they start school that time they are more keen to communicate English. However, if the parents monitor and balanced them to speak own language at home that will give them opportunity to learn. I asked some of my friends who are Chinese and Korean, Vietnamese whom use the same principle. The point is that to take time, explain them conceptual level, monitor them, also parents treat Burmese language with respect themselves. I also see some Burmese children at the meditation center who fluently speak Burmese even with their friends- that implies that there is the possibility, but it is not easy like us for we grow up in Burma.
Pe Ti says:
February 8, 2011 at 8:33 PM Reply
အမပြောထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက ကျွန်တော်ပြောချင်နေတာတွေပဲ။ အမရေးထားတာ ပိုပြည့်စုံပြီးကိုယ်တွေ့တွေလည်းပါတော့ ပိုကောင်းတယ်။ စင်ကာပူမှာလည်း မိတ်ဆွေတွေရဲ့ကလေးတွေကို မြန်မာလိုပဲပြောတယ်။ သူတို့က နားလည်ကြပေမယ့် ပြန်ပြောတဲ့အခါ အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြန်ပြောကြတ...ယ်။ စိတ်ထဲမှ သိပ်မကောင်းပေမယ့် ရောက်နေတဲ့ ပတ်ဝန်ကျင်အရ ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုတော့ နားလည်ပါတယ်။ အဲလိုကြုံနေရတဲ့ မိဘတွေကို တစ်ခုတော့ အကြံပေးပါရစေ။ အထူးသဖြင့် စင်ကာပူကမိဘတွေကိုပါ၊ ကျောင်းမထားမီ အချိန်အထိ ကလေးကို မြန်မာလိုပဲ ပြောစေချင်ပါတယ်။ ကလေးတွေက ငယ်တုန်းမှာ ဘာသာစကား တော်တော်များများကို လက်ခံသင်ယူနိုင်တယ်လို့ မှတ်ဖူးထားလို့ပါ။ နောက်ပြီး အင်္ဂလိပ်လို ပြောမယ်ဆိုရင်တောင် အဆင့်မီ အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ ကလေးတွေကို ပြောဆိုဆက်ဆံပါ။ ကလေးလည်း မှန်ကန်တဲ့ အလေ့အကျင့်ရ ကိုယ်တိုင်လည်း ပြုပြင်ပြီးသားဖြစ်လို့ပါ။
အခွင့်အရေးပေးတိုင်း ကလေးကို မြန်မာ့ရိုးရာ အစဉ်အလာတွေကို ပြောပြသင်ကြားပေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါ။
တခါတလေတွေးတိုင်း ၀မ်းနည်းမိတယ်။ ကိုယ်တိုင် တိုင်းပြည်မှာ မနေနိုင်လို့ထွက်လာတော့ မိဘတွေနဲ့ ခွဲခဲ့ရတယ်။
နောင်တချိန်ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ ပြန်နေမယ်ဆိုပြန်တော့ ကလေးတွေက မြန်မာလို မရေးတတ် မဖတ်တတ် မပြောတတ်နဲ့ ပြည်ပမှာပဲ အခြေကျသွားတော့၊ ကိုယ်နဲ့ ပြန်မလိုက်နိုင်ဘူးဆို၊ သားသမီးတွေနဲ့ ခွဲရပြန်ဦးမယ်။
February 8, 2011 at 9:05 PM Reply
တကယ့်ကို ပြည့်စုံ၊ ကောင်းမွန်လှတဲ့ ပို့စ်လေးပါ မငယ်နိုင်...၊
ဒီလို မြန်မာစကားပြော ကိစ္စကို ကျနော်တို့ မိသားစုလည်း ကြုံတွေ့ရပါတယ်၊ ကျနော့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လေ့လာမိ သလောက်လည်း မိခင်ဘာသာစကားကို မပြောတဲ့ နိုင်ငံခြားရောက် ကလေးတွေက မြန်မာသားသမီးတွေတင် မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျနော့်မိတ်ဆွေ အီတာလျံမိသားစု၊ စပိန်မိသားစု အားလုံးမှာလည်း ဒီလိုပဲ၊ မိဘက အီတာလျံလို၊ စပန်းနဲနစ်ရ်ှလို ပြော၊ ကလေးက (ဒီမှာတော့)ပြင်သစ် လိုပဲ ပြန်ဖြေတယ်၊ ဒါတောင် ဒီစကားတွေက အခြေခံ ရင်းမြစ်တူကြတဲ့ စကားတွေနော်၊ ဘာမှလည်းမတူ၊ ပိုပြီးလည်း ခက်ခဲရှုပ်ထွေးတဲ့ မြန်မာစကားက ကျနော်တို့ မြန်မာကလေးငယ်တွေ အတွက် မလွယ်လှတာ သဘာဝကျပါတယ်၊ ပြီးတော့ ကလေးတိုင်းဟာ သူနေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်း၊ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ ပြောတဲ့စကားအတိုင်း လိုက်ပြောခြင်းအားဖြင့် သူတို့လူလားမြောက်တာကို၊ ဒီလူတွေနဲ့ သူဟာ တသားတည်းဖြစ်ကြောင်းကို သင်ယူတတ်ကြတယ် မဟုတ်လား...၊
ထပ်ပြောပါ့မယ်၊ အချက်အလက် စုံစုံလင်လင်နဲ့ ထောင့်စုံတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။
Htay Than Htwe Kyu says:
February 8, 2011 at 11:20 PM Reply
ကိုးနှစ်သားကလေးတစ်ယောက်က မိဘကိုဒီလောက်အထိ စီကာပတ်ကုံးပြီး အခြေအတင်ပြန်လည်ငြင်းဆိုတတ် တုန့်ပြန်တတ် ပုတ်ခတ်တတ်တာကတော့ သိပ်မကောင်းဘူးမငယ် မိဘကဆုံးမရာမှာ အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ ရှင်းပြသင့်သလို ကလေးအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ရှင်းပြီးပြန်ပြောရာမှာလည်း နည...်းနည်းတော့ ယဉ်ကျေးစေရင်တော့ပိုကောင်းမယ် မောင်တိုးက သိပ် ဘရိုက်ဖြစ်တာမှန်ပေမယ့် သူမှန်တယ်ထင်တာ သူကမခံနိုင်တာကို ပြောထုတ်လိုက်တာတွေက ဖတ်ရသူတွေအဖို့ နည်းနည်းရိုင်းသလိုဖြစ်သွားတယ် အဲလိုစကားတွေဟာ ၁၈ နှစ်ရှိနေတဲ့သူတစ်ယောက်က လိုဒီအမေကိုပြန်ပြောနေတယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့ ကိုးနှစ်သားတစ်ယောက်က ဒီလောက်အထိ မိဘခိုင်းနေတာကို ပြန်ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ မိဘကနည်းနည်းအထိန်းအသိမ်းမတတ်လို့ဆိုတာ မသက်ရောက်နေဘူးလား သားသမီးနဲ့မိဘ အပြန်အလှန်လေးစားမှူရှိကြပါစေ။
February 8, 2011 at 11:21 PM Reply
I agree with Htay Thanhtwaykyu, and it needs to explain to the children that for instance- not all Burmese are aggressive- that is universal behavior for humans; we can see in other nationalities, and correct at that point, and sometimes, p...arents need to admit that it is not the right way and apologize to them. It does not matter that who makes the mistake but it does matter that who owns up the mistake. Burmese people are the most kindest and respectful in this world especially in Buddhist countries, and need to correct them not to be confused with movies. We can see more notorious actions in western movies.Also, if parents speak own languages at home, and motivate them why they need to learn, take time, explain, and learn from other communities how they develop their children to be bilingual, then we can find the way out.
I am not presenting this issue to "Mg Toe's, it is the way of thinking and actual practice we need to be done, not the short term, not in "push" management style, it has to be educational, respect to the children, spare your own time, and be optimistic. I am sure that it can bring up the children this is also based on my experience as the teacher, and asaparent. As all we say that how much time we have spent with them to develop for their future. If we speak not our own language at home, it is good for us to be improved in English but not good to them, but they need to understand the reason behind. If you thoroughly explain with reasons and facts to them, they will absorb and follow your way. If you give up early, you are losing them in long term. As I said before, it is not an easy issue, it is more educational, understanding, mutual obligation and commitment is needed.
February 8, 2011 at 11:25 PM Reply
ကိုးနှစ်မဟုတ်ဘူး ရှစ်နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ်အဲဒါ ပြောတုန်းက။ သားပြောတဲ့ ဗမာလူကြီးတွေဟာ Aggressive ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ရှစ်နှစ်တုန်းက ပြောခဲ့တယ်၊ ဗမာလူမျိုးတွေမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတာ လှူတာတန်းတာကလွဲရင် သူ့အတွက် အတုယူစရာ ဘာမှမရှ...ိဘူး ဆိုတာက အခုပြောတာ။ အဲဒါတွေကို သူတွေ့ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ သူကြည့်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်၊ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ Discussion တွေကို ကြည့်ပြီး ပြောတာဖြစ်လို့ အကုန်လုံးကို မလွမ်းခြုံနိုင်ပေမဲ့ ပျမ်းမျှ အနေနဲ့ ကိုနိုင်အောင်တို့ ဌေးငယ်တို့ ငြင်းနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ ကျွန်မလည်းကျွန်မသားကို မငြင်းနိုင်ဘူး။ ဒါဟာ အမှန်ပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်မတို့ မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ Child Rights တို့ Child Psychology ကို လေ့လာဖူးသူ နည်းတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးရှေ့မှာ ပြုမူသင့်မသင့်ဆိုတာ စဉ်းစားတဲ့သူ နည်းတယ်။ အဲဒီတော့ ကလေးတွေရဲ့ အထင်သေးမှုကို ဖြစ်စေတယ်။ ကလေးကို တောင်းပန်စရာ မလိုဘူးဆိုတာ ကိုနိုင်အောင် ပြောတာ အဲဒါတော့ ကျွန်မလက်ခံလို့မရဘူး။ လူကြီးက မှားနေတာကြီးကို မှားမှန်းသိလျက်နဲ့ မတောင်းပန်ရင် ဒီကလေးရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ဘယ်ရတော့မလဲ။ သားနဲ့ ကျွန်မ ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာ သားက Game ကစားနေတာ ကြာပြီမို့ ကျွန်မက ဒေါသတွေ အရမ်းထွက်နေတယ်။ အဲဒီလို ဒေါသနဲ့ ပြောနေတာဟာ ပုံမှန်မဟုတ်ဘူး မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာ သားက သူ့အသက်အရွယ်အရ သူသိတယ်။ သူ့အမေဒေါသဖြစ်တာကို မြန်မာလူကြီးတွေ ဒေါသဖြစ်တယ်လို့ ပြောရကောင်းလား စောတက တက်စရာ ရှိတယ်။ မြန်မာလူကြီးတွေထဲမှာ ကလေးကို ရိုက်သတ်ပစ်လိုက်မယ်၊ ကန်ထည့်လိုက်မယ်၊ နားရင်းပိတ်တီးလိုက်မယ် ဆိုတာတွေကလည်း တခြားကလေးတွေရဲ့ မိဘတွေ ပြောနေတာကိုလည်း အမြဲကြားနေရတယ်။ မွေးနေ့ပွဲတို့ အခမ်းအနားတို့မှာ လူကြီးတွေ ရန်ဖြစ်လို့ ခေါင်းကွဲသွေးထွက် ဖြစ်ထာကိုလည်း ဒီကလေးတွေ တွေ့ဖူးထားတယ်။ ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာလည်း ပို့စ်တွေတင်ရင် အမြင်မတူတဲ့သူတွေက လာပြီး ဒေါသအသံနဲ့ စော်ကားတာတွေ သူအမြဲတွေ့နေရတယ်။ ဒီတော့ အဲဒါကို ဖုံးနေရင် ဆင်သေကို ဆိတ်သားရေနဲ့ ဖုံးသလို ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ဒေါသထွက်တာဟာ မှားတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိသလို ဘုရားဟောထားတယ်ဆိုတာလည်း ကျွန်မသားက သိတယ်။ ဆက်ရန်
February 8, 2011 at 11:26 PM Reply
ကိုနိုင်အောင်နဲ့ ဌေးငယ် အဆက်
ဒီပြဿနာမှာ ဒေါသဖြစ်တဲ့သူက ကလေးမဟုတ်ဘဲ လူကြီးဖြစ်နေတာ လူကြီးမှားတာ တောင်းပန်စရာ မလိုဘူးဆိုတာ လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ ကိုနိုင်အောင် ပြောတဲ့အတိုင်း ကျွန်မ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ရှင်းပြခဲ့လို့ လူကြီးအချင်းချင်း ဒီလိုအားနည်းချက်က...ို ရှာပြီးစကြတာ မရိုင်းဘူးဆိုတာ သူတို့ သဘောပေါက်သွားတယ်။ ဒါပမဲ့ အားနည်းချက်ကို ထုတ်ပြောပြီးစတာဟာ တယောက်နဲ့တယောက် ဘယ်လောက်ပဲခင်ခင် ဥပမာ ရုပ်ဆိုးတဲ့သူကို ရုပ်ဆိုးလိုက်တာလို့ သွားပြောတာမျိုးကို ကောင်းတဲ့အလေ့အထ မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ Ethical အရ အားလုံးသိနိုင်ပါတယ်။ ဌေးငယ်ကို ပြောချင်တာက ပို့စ်ကို သေသေချာချာ ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။ သားနဲ့ ငါနဲ့ အပြန်အလှန် ပြောထားတဲ့အထဲမှာ သားပြောတာ ဘာမှအမှားမပါဘူး ပုတ်ခတ်တာလည်း ဘာမှမပါဘူး။ ငါပြောတာပဲ ရိုက်မယ်ထုမယ် တကဲကဲနဲ့ ဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်ကလေးမှ Physically, mentally, emotionally abuse ခံပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာ ဒီအသက်အရွယ် ကလေးတွေ သိရှိပြီးဖြစ်တယ်။ Child Development ကိုလေ့လာရင် ရှစ်နှစ်သားကလေးတယောက်ရဲ့ Developmnetal Stage က Cognitive function တွေ သိပ်ကို ဖွံ့ဖြိုးနေပြီ၊ ပြီးတော့ အကျိုးနဲ့အကြောင်းဆက်စပ်မှုကို စတင်လေ့လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ကျောင်းတွေမှာ Problem Solving တို့ Responsibility တို့ဆိုတာတွေကို မိတ်ဆက်သင်နေပြီ။ အဲဒါကြောင့်မို့ သူပြောတဲ့စကားတွေက ၁၈ သား ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူး။ သူ့အရွယ်နဲ့ သူ့ဖွံ့ဖြိုးမှု အဆင့်အတိုင်း ပြောတာသာ ဖြစ်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလို ပြန်ဆွေးနွေးခွင့်ရတာ နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
P.S ဌေးငယ် နင်အခု အဘိဓမ္မာ သင်တန်းတက်နေတယ်မဟုတ်လား ငါ့ကိုငါ့သားမေးလို့ ငါမဖြေနိုင်တဲ့ ဘာသာရေး မေးခွန်းတွေ နင့်အဒေါ်ကိုပဲ သွားမေးလို့ နင့်ကိုမေးခိုင်းလိုက်မယ်။
Ma Nge Naing,
It's reallyagood post and I wish to share it on my facebook and pls let me do..I will put your blog link too.
February 8, 2011 at 11:34 PM Reply
Share လုပ်လို့ရပါတယ် SS။ ကျွန်မ Facebook မှာလည်း တင်ထားပါတယ်။ http://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=188353007851624 ရှိပါတယ်။
February 9, 2011 at 12:55 AM Reply
အမရေ..ဖတ်ရတာဗဟုသုတတိုးပါတယ်......ကလေးတွေကိုဆုံးမတဲ့လက်ဦးဆရာမိဘက ကလေးတွေအပေါ်နားလည်စွာ ဆုံးမနိုင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ..ညီမကတော့ ဘယ်လိုလာမလဲမပြောတတ်ဘူး...ကိုယ်ကအရမ်းစိတ်ဆတ်တော့ တကယ်လို့ သာ အမသားလေး ခုလိုပြောပုံမျိုးဆိုရင် ထထိုးမိမလားမသိဘူး...မိဘဖြစ်လာရင်တော့အကုန်ပြင်ရမယ် ကလေးတွေရှေ့မှာနေတာထိုင်တာ စားတာသောက်တာ အပြောအဆိုအပြုအမူတွေကအစပေ့ါ..အခုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေအုံးမယ် အမရေ..
February 9, 2011 at 1:22 AM Reply
တကယ်ကို သုံးသပ်ဆင်ခြင်စရာကောင်းတဲ့ပို့စ်လေးပါ။ ကျေးဇူးပဲ မငယ်နိုင်။
ပြည်ပကိုရောက်လာကြတဲ့အခါ ကိုယ်အရိုးစွဲနေခဲ့တဲ့ အကျင့်တွေထဲမှာ ပြုပြင်သင့်တာတွေ၊ သူများဆီက အတုယူ သင်ယူသင့်တာတွေကို သတိမပြုမိတဲ့ လူကြီးတွေအဖို့ ပြည်ပရဲ့ စနစ်တစ်ခုအောက်မှာ ကြီးပြင်းလာတဲ့ ကလေးတွေက နားမလည်နိုင် အထင်မကြီးနိုင် (appreciate မလုပ်နိုင်) ဖြစ်တတ်တာတွေကို တွေ့နေရပါတယ်။ သတိပြုစရာပါ။ တဖက်ကလည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုတချို့ကို ကလေးတွေ နားလည်သဘောပေါက်လာအောင် အချိန်ယူပြီး အလေးအနက်ထား ရှင်းပြနိုင်ရင် ပိုကောင်းမှာပါ။ အလုပ်တွေကိုယ်စီနဲ့ဆိုတော့လည်း မလွယ်ကြဘူးပေါ့။ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ ဆင်ခြင်တတ်ဖို့ သင်ကြားထားတဲ့ စနစ်အောက်က ကလေးတွေဟာ ပြောပြပေးရင်တော့ နားလည်နိုင်မယ် လို့ထင်မိတယ်။
မြန်မာစကား နဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ပြည်တွင်းမှာလည်း အတော်အတန်ပြေလည်တဲ့ မိသားစုတိုင်းလိုလို ကလေးတွေကို ပုဂလိကကျောင်းတွေ အင်တာနေရှင်နယ်ကျောင်းတွေမှာ ထားကြတာကို တွေ့ရတယ်။ အဲဒီအခါမှာ အင်္ဂလိပ်စာ တရုတ်စာတွေ ပိုကျွမ်းကျင်လာပေမယ့် မြန်မာမှုနဲ့ မြန်မာစာကိုတော့ အလေးထားသင်ယူခြင်း မရှိကြတော့တာကို သတိထားမိပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ နေထိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့ မရည်ရွယ်ကြတော့လို့လည်း ဖြစ်မှာပါ။ ဒီလိုဆိုတော့ အစိုးရကျောင်းမှာ တက်တဲ့ကလေးတွေကတော့ မြန်မာစာ ရေရေလည်လည် ကျွမ်းကျင်ကြမှာလား မေးရင်လည်း လက်ရှိပညာရေးစနစ်ရဲ့ မောင်းနှင်သလောက်ပဲ ဖြစ်လာမှာပါ။ နောင် ဆယ်နှစ် အနှစ်နှစ်ဆယ်မှာ ပြည်တွင်းရော ပြည်ပမှာပါ မြန်မာတွေအကြား မြန်မာစာသုံးစွဲမှုနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့တွေ အတော်ကြီးကို ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။
February 9, 2011 at 1:59 AM Reply
အမရေ ကလေးဆိုတာတော့ သူတို့နေထိုင်ကျင်လည်ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် မူတည်ပြီး သူတို့လေးတွေရဲ့ သဘာဝလေးတွေ ပြောင်းလဲလာတတ်တာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မိဘတွေ နားလည်းပေးရမယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လာပါတယ်။ မြန်မာကလေးတွေရဲ့ တိုးတက်လာမှုတစ်ခုရဲ့ ပြရုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ အမရဲ...့ဆောင်းပါးလေးကို အပေါ် ထင်မြင်ယူဆပါတယ်။နိုင်ငံခြားမှ ကလေးတွေတောင်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ မြန်မာပြည်က ကလေးအချို့တောင် ဒီလိုမျိုးလေးတွေ ရှိနေကြပါပြီ။ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်ဒေသတွေမှာ ဘယ်လိုပဲရောက်နေရောက်နေ သူတို့လေးတွေရဲ့ အနာဂတ်မှာ သူတို့ရင်ထဲမှာ ကိုယ်စာပေ၊ ကိုယ်လူမျိုး၊ ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုတွေအပေါ်အထင်မသေးတတ်ရုံတစ်ခုနဲံတင်လုံလောက်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးက ရွာဖြစ်နေပြီး multi လူမျိုးတွေ ဖြစ်လာပြီးဆိုတော့ကား ကျွန်တော်တို့ မိဘတွေကလည်း သူတို့လေးတွေရဲ့ ပြောင်းလဲလာမှုအမြင်လေးတွေကို လက်ခံနားလည်ပေးနိုင်ဖို့ပဲ လေ့ကျင်ကြရတော့မှာပေါ့။
February 9, 2011 at 2:17 AM Reply
nge naing read these articles
Don't get brainwashed
February 9, 2011 at 4:38 AM Reply
Hi Ma Nge Naing,
I have shared this post to my fb account. I used your facebook link. Thanks for the post.
February 9, 2011 at 8:00 AM Reply
မငယ်နိူင်ရေ...... အကြောင်းအရာ အတော်များများကို သဘောတူပေမယ့် တချို့အချက် အထူးသဖြင့် မြန်မာကလေးတွေ မြန်မာစကား မပြောတာကိုတော့ သဘောမတူဘူးဗျ။ ကျွန်တော် သတိထား မိသလောက် တခြားလူမျိုးတွေ တရုတ် ကလေးတွေ၊ အန္ဒိယလူမျိုး၊ လက်တင် အမေရိကက စပိန်စကားပြော ကလေးတွေဆို အင်္ဂလိပ်လိုကော၊ သူတို့ မူရင်းဘာသာ စကားကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြောဆို သုံးနှုန်း နိုင်သဗျ။ သူတို့ ဘယ်လို ထိန်းကျောင်းသလဲ ဆိုတာ လေ့လာတော့ တခုထဲပဲဗျ။ အဲဒါ အိမ်မှာ ကိုယ့်မူရင်း ဘာသာစကားကို မပြောမနေရ ပြောရတာပဲဗျ။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းဆို သူ့ကလေးက အိမ်မှာ Engလို ပြောရင် ရိုက်လဲမရိုက်ဘူး။ ဆူလဲမဆူဘူး။ အဲ.... ဒါပေမယ့် ပြန်ပြီးတော့လဲ ဘာမှမပြောဘူး။ Eng လို ဘာမှ မတတ်သူ တယောက်လို ဆိတ်ဆိတ် နေတာကို တွေ့တယ်ဗျ။ ကလေးက ကိုယ့် မူရင်း ဘာသာကို သုံးပြီး ပြောမှသာ အဖက်လုပ်ပြီး ပြန်ပြောတယ်။ လုပ်ပေးတယ်လေ။ အခုဆို ဒီကလေးက ကိုယ်ရှေ့တင် Eng, Spanish & Chinese ဘာသာစကား (၃)မျိုး ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြောနိူင်သဗျ။ Spanish က ကျောင်းမှာ minor subject အနေ့နဲ့ ယူရင်းတတ်တာဗျ။ အချိန်မရလို့ နောက်များမှပဲ ဆွေးနွေး ပါအုံးမယ်။ ဒီပြသာနာကို တွေ့ထားတွေးထားတာ ကြာပြီ။ အခြေအနေ မပေးလို့ ပျင်းလို့ ရေးချင်ရက် မရေးဖြစ်တာပါ။ အခုလို မငယ်နိူင် ရေးပေးတာ ကျေးဇူးဗျ......
February 9, 2011 at 5:55 PM Reply
Heartmuseum (February 9, 2011 8:00 AM) လိုပဲတွေးမိပာတယ်။
February 9, 2011 at 7:24 PM Reply
ပို့စ်ကိုရော ကွန်မန့်တွေရော သေသေချာချာ ဖတ်သွားပါတယ် မငယ်နိုင်ရေ...
အသိစိတ် ဖြစ်ပေါ်မှုတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း အသိစိတ်အပေါ်မှာ ခြယ်လှယ်၏။ လို့ မှတ်သား နာယူ ဖူးပါတယ်။
February 9, 2011 at 9:39 PM Reply
pls let me share ur post Ma Nge Naing ...thank you...
Law Shay says:
February 9, 2011 at 11:28 PM Reply
1. Beating kids is so so wrong. ကလေးတွေကို ရိုက်တာဟာ အင်မတန်မှ မှားယွင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်။ ဘယ်လို အနေအထားမှာမဆို မလုပ်သင့်ဘူး၊ မလုပ်ရဘူး။
2. Your son's grammar is not Singlish but not in good shape either, where do you live ? အစ်မသားရဲ့ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါဟာ စင်းဂလိပ်မဟုတ်ပေမဲ့ အမှားတွေပါနေတယ်။ အစ်မတို့ ဘယ်မှာ နေသလဲ။ ကလေး ဘယ်အရွယ်လဲ။ သိပ်ငယ်သလား။
February 10, 2011 at 12:53 AM Reply
ညီမငယ်ပြောတာတွေအားလုံးသဘောတူတယ်..ကျမသမီးတော့ သမီးရယ် အမေတို့ ဘိုလိုတတ်အောင်လို့ အိမ်မှာဘိုလိုပြန်ပြောပါလားဆိုတာတောင် မပြောဘူး ဗမာလိုဘဲပြောတယ် ...ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိမှဗမာလို ပြောတတ်တာဆိုတာကို သဘောမတူပါဘူး အဓိကက အတူနေတဲ့မိဘတွေသာ အရေးကြီးဆုံးလို...့ဘဲယူဆတယ် သူတို့ဗမာခလေးချင်းချင်းတွေ့ရင် ဘိုလိုဘဲ ပြောကြတာ ..အတူနေမိဘက ဘိုလိုပြောတာ လက်ခံရင် အဲ ခလေးက ဗမာလိုမပြောတော့ဘူး ..ဗမာလိုတတ်ထားတော့ ခလေးက ဗမာပြည်ပြန်လည်တဲ့အခါကျတော့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အဆင်ပြေလို့ မိဘတွေ ဒုက္ခမရောက်ဖူး ခလေးဂျီကျတာလည်းမခံရဘူး ခလေးလည်းပျော်တယ် ဒါတွေက ကိုယ်တွေ့ဘဲ ..
နောက်ပြီးသူတို့လေးတွေက ကြီးတာငယ်တာ ကို ဂရုမစိုက်ဘူး တရားမျှတတာဘဲ စကားထဲထည့်ပြောတယ် ..ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်နှိုင်းယှဉ်တယ်
ဗမာပြည်ကမိဘဆွေမျိုးတွေကို ဒီကနေလက်ဆောင်ဝယ်ပေးရင် ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အတွက်ဝယ်ရင်ဖြစ်ဖြစ် အခုဆို ခလေးမသိအောင် ခိုးဝယ်ရတယ် တွေ့ရင် သူလိုချင်တာတော့ဝယ်မပေးဘူး ဗမာပြည်ကျတော့ ၀ယ်ပေးတယ် လို့ ပြောတတ်လွန်းလို့ ကိုယ့်မှာလည်း ကိုယ့်အတိုင်းအတာနဲ့ကိုယ်ဆိုတော့ သူလိုချင်သမျှအကုန်ဝယ်ပေး၇ရင် လည်း မွဲရချည်ရဲ့ ..
Lu Thit says:
February 10, 2011 at 12:57 AM Reply
အိမ်စာလုပ်ဖို့ မငယ်နိုင်ပြောပုံ ဖတ်ရတာကတော့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ရိုးရာမပျက် ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ထုံးစံစဉ်လာအတိုင်း ဆုံးမနေတတ်တဲ့အဒေါ်ကြီးတွေကို သွားသတိရစေတယ်ဗျ။ ခွိခွိ။ အဲ့ဒီအဒေါ်ကြီးတွေကို ကလေးစိတ်ပညာဆိုင်ရာဆောင်းပါးလေးတွေ ဖတ်စေချင်သဗျာ။
ယဉ်ကျေးပါတယ်ဆိုတ...ဲ့ မြန်မာတွေမှာလဲ မယဉ်ကျေးဘူးလို့ယူဆစရာတွေက အများသားလား။ ဘယ်ဟာမှ ခြောက်ပစ်ကင်းမဟုတ်လေတော့ သူ့ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုတွေထဲက ကောင်းနိုးရာရာတွေ ထုတ်နုတ်၊ ကလေးကို အချိန်ပေးပြီး ဆွေးနွေးပြောဆိုရမှာပဲ။
February 10, 2011 at 12:58 AM Reply
ဟုတ်ပါ့မငယ်ရာ..ဒီကအဖြူတွေက စကားမပီတာကို ကြိုးစားနားထောင်ပေးတယ်..ပီအောင်ပြင်ပေးတယ်၊ဗမာတွေက အားနည်းချက်ကိုလှောင်တတ်တာ ခနခနတွေ့ရတယ်၊ကလေးတုန်းက လူကြီးတွေလှောင်ပြောင်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာ..ခုထိကျန်နေကျန်ခဲ့တယ်၊
February 10, 2011 at 1:00 AM Reply
မငယ် ငါပြောချင်တာက မိဘကိုပြန်ပြောတဲ့နေရာမှာရိုင်းတယ်ဆိုတာ သူ့အိုင်ဒီယာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး "May May it it nothing to be angry about. I don't like shouting and screaming don't treat me like that I am not that stupid" ဒီလိုအသုံးနုန်းမျိုးကို ဒ...ို့ဆီက ဘယ်ယဉ်ကျေးတဲ့ ၁၈ နှစ်အောက်ကလေးကမှ မပြောကြဘူး သူတို့အရှေ့လူကြီးတစ်ယောက်ယောက်က ပြောတာမျိုးတွေ့ရင်လည်း သူတို့က အဲဒီလူကိုတကယ်အထင်သေးတယ် I'm not that stupid ဆိုတဲ့စကားမျိုး "I can't shut up May May. ဆိုတာမျိုးဟာ ရှစ်နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ယောက်က အမေကိုပြန်ပြောသင့်တယ်လို့ နင်ယူဆသလား အော်စီက စာသင်ကျောင်းတွေရဲ့ပေါ်လစီကိုတော့မသိဘူး ငါဆို့ဆီမှာတော့ ဒီလိုအသုံးအနုန်းမျိုး ၁၂ နှစ်အောက် ကလေးတစ်ယောက်ပြောခဲ့သည်ရှိသော် ဆရာဆရာမတွေက သေချာပေါက် မိဘကိုရုံးခန်းခေါ်တွေ့မှာပဲ။ တချို့ကလေးများ လစ်ရင်လစ်သလို ပြောတယ် မိဘမသိအောင်ခိုးပြောတယ် ဒီလိုအပိုင်းကတော့ရှိတာပေါ့ ဒါပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ကသိပ်အထင်သေးတယ်။ တလောကတောင် မြန်မာပြည်က ငါ့ရဲ့ အွန်လိုင်းအသိတစ်ယောက် gtalk မှာသားနဲ့တွေ့ပြီး သားကိုမြန်မာစာတတ်လားဘာလား စာရိုက်ရင်းနဲ့ သားက မေမေကမသင်ပေးဘူးလို့ပြောလိုက်တာကို ဟိုကနေပြီး your mom is stupid လို့ပြန်ရိုက်လိုက်တာကို သားလေးက အမေကိုပြန်ပြောတယ် မေမေက ဒီလိုရိုင်းဆိုင်းတဲ့သူတွေနဲ့လည်း မိတ်ဆွေလုပ်တာပဲလားလို့ အမေးခံရတယ် တကယ်တော့ မောင်တိုးကို ရိုင်းတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး သူ့ရဲ့ အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ ပြန်ပြောတာတွေက လူကြီးတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေတယ် စကားက လူကြီးစကား နင်ကိုယ်တိုင်လည်းနင့်သားမှန်ဆိုတာကိုလက်ခံနေတာပဲ။ ရှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ဟာ မိဘကနေပြီး နည်းပြရှေ့ဆောင်ပဲဖြစ်သင့်တယ် မိဘကိုပြန်ပြီးရှေ့ဆောင်နည်းပြနေရတယ်ဆိုတာကို နင်လိုင်းတင်ပြီးရေးထားတယ်ဆိုကတည်းက မိဘကလိုနေတယ်လို့ ငါ့ကွန်မင်းကတော့ မမှားပါဘူး။ ကိုယ့်သားကိုယ့်တူဖြစ်တဲ့ ရှစ်နှစ်အရွယ်မောင်တိုးက သူ့အမေကိုပြန်ပြောတဲ့စကားတွေကတော့ နင့်အရေးအသားလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်လေ ကလေးပါးစပ်က ဒီအတိုင်းပဲထွက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ အခုလိုငယ်သေးတဲ့အရွယ်မှာ မိဘကိုလေးစားတတ် တန်ဖိုးထားတတ် မိဘစကားနားထောင်တတ်တဲ့အလေ့အထလေး ကလေးကိုကျပ်မှတ်စွာလုပ်ပေးဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဒီထက်ကြီးလာရင် ဘယ်လိုမှကိုမိဘကို လေးစားရမှန်းသိတော့မှာမဟုတ်ဘူး အိမ်စာလုပ်ခိုင်းတာ ထိုင်ရာက မထတာလည်းဒေါသဖြစ်စရာမဟုတ်ဘူး နောက်ဆယ်မီနှစ်အချိန်ပေးလိုက် သူရောကိုယ်ရော အဆင်ပြေသွားလိမ့် ငါလည်း ဒီနည်းလမ်းပဲသုံးတယ် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဆယ်မီနှစ်အချိန်ယူကြပြီးမှ သူမထရင် သူ့အပြစ် ဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုတော့ ခွင့်မလွတ်နဲ့ပေါ့။
February 10, 2011 at 1:01 AM Reply
Ma Nge, you misuderstood and interpret what I have written. It is one of my weakness that I can't type in Burmese. What I said here is that
"sometimes, parents need to admit that it is not the right way and apologize to them. It does not mat...ter that who makes the mistake but it does matter that who owns up the mistake"-
That means- Parents need to admit that shouting and screaming is not the right way and apoligise to your children. The first part belongs to previous sentence and aplogise to them-intreprets as aplogist to your children. It is notanegative creation as "not the right way to apologise them."
Blaming the mistake each other could not solve the problem. I see many Burmese parents whom never say that I am sorry, and I was wrong that is wrong cocept. The ohter point I bring up here is that Parents should not leave wrong general comment made by the chilldren like Burmese people are agressive- at that point of time, it isagreat advantage to explain them. Also, if the children sees that the community is not developing, you need to change the environment, analyse where that conception is coming from, there are may places where the chilldren can see how would be greatful for them to learn Burmese, how polite Burmese people are. My experience is that if you leave anyone in any mode for sometime, people are addicted to it. Like,if you leave your kids to play Games and not being controlled consistently, you are not able to control it. To do so, you have to go back and train them to change their habit. It is also the same princilpe applies to the adults too. My other point is that we should not rationalise that it is the way and there is nothing we can do about it. No, there is the way, and other communities are able to train them, we need to see and take examples, change the environment, take more times, change parents first if we want to change the children.
February 10, 2011 at 1:03 AM Reply
မှတ်ချက်တွေ အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဌေးငယ်ကို အရင် ဆွေးနွေးမယ်။ ဌေးငယ် နင်ကတော့ မြားဦးကို သားဆီကနေ သားအမိ နှစ်ယောက်စလုံးဘက်ကို လှည့်လိုက်ပြန်ပြီ။ ရှစ်နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ယောက်က အမေကိုပြန်ပြောသင့်တယ်လို့ နင်ယူဆသလား ဆိုပြီး နင်မေးထားတဲ့ သ...ားပြောတာ ရိုင်းတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ပြန်ကြည့်ရအောင် "May May it it nothing to be angry about. I don't like shouting and screaming don't treat me like that I am not that stupid" ဒါကို ဗမာလို ပြန်လိုက်မယ်။ ((မေမေ အဲဒါဒေါသထွက်လောက်စရာ ဘာမှရှိတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ သားသားကို အော်တာဆူတာသားသား မကြိုက်ဘူး သားသား ဒီလောက်လည်း မိုက်ရိုင်းနေတာ မဟုတ်ဘူး)) အဲဒါ စိတ်သူ့စိတ်ထဲမှာ ရှိတာကို စိတ်ဆိုးနေတဲ့အမေကို စိတ်ဆိုးဖို့ မလိုကြောင်း ရှင်းပြတာပဲ ရှိတယ်။ ငါကြည့်တာတော့ ဘာမှ ရိုင်းတာမပါဘူး။ I can,t shut up May May ဆိုတာကလည်း သူရှင်းပြလို့ မပြီးခင် ငါကဆုံးအောင် နားမထောင်ပဲ ပါးစပ်ပိတ်ထားလို့ ပြောနေတာကို ပိတ်လို့မရသေးဘူး (ရှင်းပြစရာ ရှိသေးတယ်) ဆိုတာ ရှစ်နှစ်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်နှစ်နှစ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကလေးတယောက်မှာ သူပြောချင်တာကို သူ့မှာ ပြောပိုင်ခွင့် ရှိတယ်။ ဒီကကျောင်းတွေမှာ မိဘကို ပြန်မပြောရဘူးလို့ ဘယ်တော့မှ မသင်ဘူး မိဘဆရာ တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ ကလေးတွေပြောတာကို အချိန်ယူနားထောင်ပေးဖို့ပဲ မိဘတွေကို ပြောတယ်။ သားက အဲလို ပြန်မပြောဘဲ ငါပြောတဲ့အတိုင်း သူနားထောင်လိုက်ရင် အဲလောက်အထိ အဖြေမှန်ကို တွေးဖို့အခွင့်အလမ်း ရှိချင်မှလည်း ရှိမယ်။ ဌေးငယ် သားပြောတဲ့စကားက ငါတို့ငယ်ငယ်ကလို အခြေအနေနဲ့ နှိုင်းရင်တော့ မိဘကို ပြန်ပြောတယ်ဆိုပြီး ရိုင်းမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အခုအခြေအနေမှာ သူရိုင်းဘူး ဒါသူ့အခွင့်အရေး ဖြစ်တယ်။ ငါ့သားကို ရိုင်းလို့ ရုံးခန်းခေါ်တွေ့ဖို့ နေနေသာသာ Parent teacher meeting တိုင်းမှာ သားဟာ အတန်းထဲမှာ အငယ်ဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ ဘယ်လို Mature ဖြစ်ကြောင်း၊ Teamwork တွေ Group Discussion တွေမှာ သူပါတဲ့ Gruou တိုင်း သူက ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူဖြစ်ကြောင်း သားမှာအားနည်းချက်ဆိုလို့ ပစ္စည်းတခုကို ချပြီးတဲ့နေရာမှာ မေ့ကျန်ခဲ့တတ်တဲ့ Careless ဖြစ်တာ တခုပဲ တွေ့ကြောင်းတွေပဲ ကြားရတယ်။ ဆက်ရန်
February 10, 2011 at 1:04 AM Reply
သားနောက်ထပ် ဆက်ပြောတဲ့ဟာတွေက မေမေတို့ဟာ ပြဿနာတခုကို ကောင်းကောင်း ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိဘူး ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်နည်း သင်တန်း သွားတက်သင့်တယ် ဆိုတာတော့ ငါ့ဆီက ဒေါသတွေ ကူးစက်ပြီး သူပြန်ပြောလိုက်လုိ့ ဗမာတွေ အားလုံးကို ထိခိုက်သွားပြီး နည်းန...ည်း ရိုင်းသလို ဖြစ်သွားတာ ဒီတခုပဲ ရှိတယ်။ အဲဒါလည်း သူ့ဒေါသက ငါ့ဆီက ကူးစက်တာ ဖြစ်လို့ ပထမမှားတဲ့သူက ငါပဲဖြစ်တယ် သူမဟုတ်ဘူး သူပြောလိုက်တဲ့ စကားကတော့ မမှားဘူး။ သူအဲလို ပြောလိုက်လို့ ငါပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအပြန်အလှန် ပြောထားတာတွေက ပို့စ်စရေးတုန်းက မပါခဲ့ဘူး ဒီနိုင်ငံမှာ ကြီးတဲ့ကလေးတယောက်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာလို ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ ဆုံးမနည်းအတိုင်း ဆုံးမဖို့ လုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ Message ကို ပေးချင်လို့ နောက်မှထည့်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်။ ဌေးငယ် - မိဘက လက်ဦးဆရာ ဆိုပေမဲ့ ကလေးဆီက ပြန်သင်ရတာတွေ အများကြီး ရှီိပါတယ်။ သူတို့ဘ၀ ငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းကထက် ပြည့်စုံတယ် စတ်ဖိစီးမှုနည်းတယ်။ သူတို့ရဲ့ အတွေးအမြင်တွေက ငါတို့ငယ်ငယ်က သူတို့အရွယ် အတွေးအမြင်တွေနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ ဥပမာ မြန်မာပြည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ ပါတယ်လို့ ငါဘယ်တုန်းကမှ မသတ်မှတ်ထားဘူး လွတ်လပ်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်တယ်ပဲ သတ်မှတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သားက မေမေ အဲဒါ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေမေမေ ဆိုပြီး သားက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဂျာမန်ဘက်ကရော အင်္ဂလိပ်ဘက်ကပါ နှစ်ဘက်စလုံးက ပါခဲ့တယ် တော်တော်ရီစရာကောင်းတဲ့ တိုင်းပြည်ပဲလို့ ပြောလိုက်လို့ ဆတ်ဆတ်တုန်အောင် နာပြီး ထငြင်းရာက နောက်ဆုံးတော့ အချက်အလက်တွေ အဖြစ်အပျက်တွေအရ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ပါခဲ့တာပါလားလို့ လက်ခံလိုက်ရတယ်။ ဒီအကြောင်း http://nge-naing.blogspot.com/2010/05/blog-post_25.html အဲဒီပို့စ်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်တယ်။ နင်ကသာ နင့်သားကို သင်ပေးသမားသက်သက် ဖြစ်ပေမဲ့ ငါနဲ့ သားကတော့ အပြန်အလှန် ပြန်သင်ရတာတွေ ရှိပါတယ်။
February 10, 2011 at 1:06 AM Reply
ကိုလူသစ် ကျွန်မ Haty Than Htwe Kyu ကို အကြောင်းပြန်ထားတဲ့အထဲမှာ သားနဲ့အပြန်အလှန် ပြောထားတဲ့အပိုဒ်ကို ပို့စ်ရေးခါစက မပါဘဲ နောက်မှ ထည့်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းမှာ ဒီနိုင်ငံမှာ ကြီးတဲ့ကလေးတွေကို ဒီလိုပုံစံနဲ့ ဆုံးမလို့မရဘူးဆိုတာ Message ပေးချင်လို့ဆိုတာ ပါပါတယ်။ ကျွန်မက အဲဒါပြီးတာနဲ့ သားကို အဲလိုတခါမှမဆုံးမတော့ဘူး။ ကိုလူသစ် သမီးလေးက ငယ်သေးတော့ ဒီလိုပုံစံ ဆုံးမစရာလည်း မလိုသေးပါဘူး။ ကြီးလာတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ် မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီလိုလေသံနဲ့ သားသမီးကို ဆုံးမနေရင်ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မသားက ကျွန်မကို ပြန်ဆုံးမသွားလို့ လိမ္မာသွားတဲ့ မိဘတယောက်အကြောင်း ရေးထားတဲ့ ကျွန်မပို့စ်ကို သတိရပါ။
ကိုနိုင်အောင် ပြန်ရှင်းပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မ သားကို တောင်းပန်တာကို မှားတယ်လို့ ပြောတယ်ထင်လို့ နားလည်မှု လွဲသွားတာ ဆောရီး။ ကိုနိုင်အောင်- ကလေးတွေ အတုယူလောက်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတခု ဖန်တီးဖို့ဆိုတာ လွယ်တော့မလွယ်ပါဘူး။ ကျွန်မ ဆစ်ဒနီမှာပဲကြည့်ဦး ဘုန်းကြီးကျောင်းကို သွားတာနဲ့ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲလို နေရကလွဲရင် ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာ ကလေးအတုယူနိုင်လောက်တဲ့ အမူအကျင့်ကောင်းတွေ ကျွန်မတို့ မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ရှားတာ အမှန်ပဲ။ ဥပမာ ပွဲတခုခုလုပ်ရင် Hall မှာပဲလုပ်လုပ် Park မှာပဲလုပ်လုပ် ကလေးတွေ ဆော့တဲ့နေရာနဲ့ အမျိုးသားတွေ ဘီယာသောက်ပြီး ရွဲနေတဲ့နေရာက တနေရာတည်း ဖြစ်နတယ်။ ပွဲ (သို့) အခမ်းအနား လုပ်နေတဲ့ ဟောထဲမှာလည်း ပြောနေတာတွေကို စိတ်မ၀င်စားလို့ ကလေးတွေက မနေချင်ဘူး။ ကျွန်မတို့ ကလေးတွေအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတခုကို ဖန်တီးပေးဖို့ မိဘတွေမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဗမာကလွဲရင် တခြားကိုရီးယားတို့ ဗီယက်နာမ်တို့ တရုတ်တို့ဟာ သူတို့ဘာသာစကားကိုပဲ ပြောတာ ကျွန်မတွေ့တယ်။ သားလည်း အခု ဗမာလို ပြန်ပြောလာတာ သူ့အတန်းထဲက ကိုးရီးယားကလေးနှစ်ယောက် ကိုးရီးယားလို ပြောနေတာကို ကြည့်ပြီး သူဗမာလို ပြန်ပြောချင်စိတ် စဖြစ်လာတယ်။ သူတို့မှာ အတုယူစရာတွေက အများကြီးရှိတယ်။ သူတို့လူမျိုးတွေမှာ သူတို့ကလေးတွေအတွက် အတုယူစရာတွေက အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့က သူတို့ဆီက နည်းနာယူသင့်တာတော့ အမှန်ပဲ။
မငယ် ရေးခဲ့သမျှတွေထဲမှာ ဒီပို့ စ်က စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးမို့ တခါတည်း ပြီးအောင် ဖတ်လိုက်တယ်။ကျနော်တို့ ဖခင်တွေ မိခင်တွေအတွက် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် မှတ်သားလိုက်နာစရာတွေ စွဲကျန်ခဲ့တာမို့ အချိန်ကုန်ခံပြီး ပြည့်စုံအောင်ရေးပြတဲ့ အတတ်ပညာကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် မငယ်။
ံHtay Thanhtwekyu says:
February 10, 2011 at 1:09 AM Reply
အော် အင်္ဂလိပ်စကားမှာ stupid တို့ shut up ဆိုတာ နင်တို့ဆီမှာကလေးတွေအတွက် တကယ်ပဲ သူတို့သုံးနေကျစကားဆိုရင်တော့ ငါကနင့်သား အမေတစ်ယောက်လုံးကို ဒီလိုပြန်ပြောတာ နည်းနည်းရိုင်းတယ်လို့ ပြောမိတာ မှားတယ်လို့ ပြန်ပြောရမှာပေါ့ မငယ် အရင်ကွန်မင်းမှာလည်း ငါ...ရေးခဲ့ပြီးပြီ အဲဒီစကားတွေကို တကယ်ပဲ လူယဉ်ကျေးတွေပြောတဲ့စကားတွေလို့ ယူဆနေသလား ကိုယ်ကျင်လည်ရာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ထင်ပါတယ် ငါ့သားကတော့ အခု ၁၁ နှစ်အထိ အဲလိုစကားမျိုးကို တခါမှမပြောဘူးသလို တစ်ယောက်ယောက်သူ့ရှေ့မှာပြောရင်လည်း bad word ပြောတယ်လို့ တကယ်ကို look down လုပ်တယ် ဒီလိုပြောတတ်တဲ့အကျင့်ရှိသူတွေကို ဒါကြောင့်မို့လို့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာလည်း တော်တော်အရေးကြီးပါတယ်။
ပေးချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စေတနာကလည်းကောင်းတယ် အရေးအသားကလည်းကောင်းတယ် ဒါပေမယ့် သားနဲ့အမေအပြန်အလှန်ပြောတာတွေပဲ လိုတာထက်နည်းနည်းပိုသွားတာ ဒီအပိုဒ်လေးမထည့်ဖြစ်ရင်တော့ တော်တော်ကောင်းတဲ့ပို့စ်တခုပါပဲ။
February 10, 2011 at 1:15 AM Reply
ဌေးငယ် အဲဒါလည်း ကာလံ ဒေသံပဲ ငါပြောပြမယ်။ တို့ တနင်္သာရီတိုင်းကို လူတွေမှာ ထမင်းငတ်ရင် ၀င်စားလို့ ပြောတာ ဆာရင်ဝင်စားပါလို့ အဓိပ္ပါယ်ရလို့ ဘာမှမထူးဆန်းပေမဲ့ မြန်မာပြည်အပေါ်ဘက်မှာ သွားပြောရင်တော့ ငတ်ပြတ်နေလို့ ပြောတဲ့အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်သွားတယ်။ မြန်...မာစကားမှာ မိုက်တယ်ဆိုတာ ကောင်းတာကို ပြောတဲ့သဘောပဲ။ ဒီကနေ့စဉ်သုံးစကားတွေမှာ Shut up သာမာန် စကားပြောရပ်တာကိုပဲ အဓိပ္ပါယ်ဆောင်တယ် Shut up man တော်လိုက်တော့လေ ဆိုတာမျိုးကို ရန်ဖြစ်မှ ပြောတာမဟုတ်ဘူး ပုံမှန်စကားစကားစမည်ပြောရင်လည်း သုံးတယ်။ ပြီးတော့ I don't care ကို အော်စီမှာ Doesn't matter, never mind, Up to you ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေအဖြစ်သုံးတယ်။
အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သားသုံးသပ်တာကို ပြောပြဦးမယ်။ သူသုံးသပ်တာက ဗြိတိသျှတွေ ကနေဒါနဲ့ အမေရိကကို စတင်အခြေချတုန်းက သာမန်လူတွေနဲ့ တည်ဆောက်ပြီူး အော်စီကိုကျတော့ အကျဉ်းသားတွေနဲ့ တည်ဆောက်လို့ အင်္ဂလိပ်လို ပြောတဲ့ First generation က အကျဉ်းသားတွေ ဖြစ်လို့ နေ့စဉ်ပြောစကားအသုံးအနှုန်းတွေရော လေယူလေသိမ်းတွေပါ ရိုင်းသလိုဖြစ်နေတယ်။ တကယ်က ရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ မြန်မာလူမျိုးတွေ နည်းနည်းဆို စိတ်တိုမြန်တာလည်း စစ်ဖြစ်တဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ကြီးပြင်းလာရလို့ အလိုမကျဖြစ်ပြီး အကျင့်ပါသွားတယ်တဲ့။
တဆက်တည်းမှာ လောရှည်ကို ပြောလိုက်မယ်။ အော်စီက စကားပြောတာကို ဂရမ်မာပုလိပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဖမ်းလို့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူး။ He don't know တို့ Thank you muchly တို့ Good on you တို့ စသည်ဖြင့် မှားပြီး ပြောတာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ နေ့စဉ်စကားပြောတာကို
February 10, 2011 at 8:16 AM Reply
MOeMaKa wants to post on its website.
Htay Thanhtwekyu says:
ကာလံဒေသကြောင့်စကားတစ်ခုဟာ အဓိပါယ်ဖွင့်တာကွာခြားတယ် သုံးနုန်းတာကွာခြားတယ်ဆိုပေမယ့် shut up ဆိုတာ နင့်အပေါက်ကိုပိတ်ထားစမ်းလို့ လူကြီးတွေက ခပ်ရိုင်းရိုင်းပြောလေ့ရှိတဲ့စကားမို့ ကလေးများနဲ့မသင့်လျှော်သလို stupid ဆိုတာကလည်းေ-ာက်ရူးလို့ ပြောတာနဲ့...အတူတူပဲ ဒီလိုအနေထားတွေမှာပဲ လူကြီးတွေကသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ကလေးကတော့ မရိုင်းဘူးပြောမှာပေါ့ မောင်တိုးကိုမေးကြည့်လိုက်ပါ ဂိန်းကစားတာကောင်းလားမကောင်းလားလို့ ကောင်းတယ်လို့ဖြေမှာပဲ မိဘကသာ ဒီအရာကောင်းတယ်မကောင်းဘူး ဆိုတာ စဉ်းစားပြီး ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားသင့်သလား ခွဲခြားရမှာသာဖြစ်တယ်မငယ် မောင်တိုးပြောတာမှန်ပါတယ် အော်စီက တကျွန်းကျတဲ့လူတွေနဲ့တိုင်းပ်ြညထောင်ထားတာရယ် မြောက်အမေရိကတိုက်ကတော့ အစိုးရကိုမကြိုက်သူများ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်များကိုမကြိုက်သူများ သူတို့တိုင်းပြည်ကနေ နယ်မြေအသစ်ရှာပြီးလာအခြေချကြတယ် ဘယ်လူလူတွေနဲ့ပဲ တည်ဆောက်ထားပါစေ ကနေဒါမှာလည်း ရိုင်းတဲ့သူတွေအများကြီးပါ။ ကနေဒါမှာအခုလက်ရှိနေတဲ့မြန်မာမိသားစုတွေရဲ့ကလေးတွေထဲမှာလည်း ကလေးတွေနဲ့ မအပ်စပ်တဲ့ လူကြီးများ နေ့စဉ်သုံးစကားများ ကို လစ်ရင်လစ်သလိုပြောကြပါတယ် တချို့မိဘတွေကလည်း ဒီကိစ္စကို ဘာမှအလေးတယူမရှိကြဘူး မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း ကလေးတွေရှေ့ စည်းမစောင့်ပြောရာကနေ ကလေးတွေသင်ယူလာတဲ့သဘောပါပဲ။ တကယ်တော့ ကနေဒါမှာ ကလေးကြည့်တဲ့ တီဗွီလိုင်းမှန်သမျှမှာ ခုနက မောင်တိုးသုံးသွားတဲ့စကားလို ဟာတွေကိုအကုန်ဆင်ဆာဖြတ်ပါတယ် ကျောင်းတွေမှာလည်း ကလေးတွေရဲ့ ပါးစပ်ကိုဆင်ဆာဖြတ်ပါတယ် အော်စီမှာလည်း ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ် အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံပဲကိုး။
February 10, 2011 at 9:45 AM Reply
Crystal နဲ့ Moemaka
အပါအ၀င် ပြန်ဖေါ်ပြချင်သူများအားလုံး၊ Forward mail က ဖြန့်လိုသူများ အားလုံး ကျွန်မဘလော့ဂ်က ပို့စ်တွေအားလုံးကို ဘယ်သူမဆို ပြန်ဖေါ်ပြနိုင် ဖြန့်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်ကကူးယူဖေါ်ပြတယ် ဆိုတာသိရအောင် နာမည်နဲ့ ဘလော့ဂ်လိပ်စာကို ထည့်ပေးပြီး ဖေါ်ပြဖို့တော့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ပြန်လည် မျှဝေဖေါ်ပြပေးတဲ့သူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
stupid ကလည်း မိုက်မဲ မိုက်ရိုင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့ shut up ကလည်း အပြောရပ်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကလွဲပြီး ဘာမှ မပိုဘူး။ ရန်ဖြစ်ပြီး ပြောရင် ရိုင်းမယ် ရိုးရိုးပြောရင် ပုံမှန်ဖြစ်မယ် ဒါပဲကွာတယ်။ ဒီမှာတော့ ဒီလိုပဲ သုံးတယ် စကားလုံးကြောင့် အဓိပ္ပါယ်မပြောင်းဘူး။
ဥပမာ လူရွှင်တော်တယောက်ကို သဘောကျရင် He is very funny whenever I watch his film, I can't shut up laughing till end of the film.
အလုပ်အင်တာဗျူးအတွေ့အကြုံကို ပြောရင် During the interview, I was so nervous. There're5interviewers and they constantly asked me all tricky questions. Oh my god! I can't shut up answering questions for 45 minutes. At the end of the interview, I got so tired, hungry and thirsty that I couldn't open my eyes and I couldn't lift my legs to get out of the room.
အဲဒီစကားတွေက Casual (ပေါ့ပေါ့ပါးပါး) ပြောတဲ့စကားတွေ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီစကားတွေကို ရိုင်းတယ်လို့ ပြောလို့ ဖြစ်မလား။ ဒီမှာကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် Casual talking လို့ ခေါ်တဲ့ နေ့စဉ်သုံးစကားတွေကို Public ကို Speech ပေးသလို တက္ကသိုလ်တွေမှာ lecture ပေးသလို ပါလီမန်မှာ အဆိုတင်သွင်းသလို Formal language နဲ့ ဘယ်သူမှ မပြောဘူး။ အပေါ်က အင်တာဗျူးအတွေ့အကြုံက တက္ကသိုလ်က ငါတို့ Tutorial class တခုမှာ Tutor ဆရာမက သူကောင်းကောင်း မပြင်ဆင်ဘဲ သွားဖြေခဲ့ဖူးတဲ့ အင်တာဗျူးတခုရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ကျောင်းသားတွေကို ပြောပြခဲ့တဲ့အထဲက ဖြစ်တယ်။
အဲဒီတော့ ငါပြောချင်တာက သားပြောတာ ကာလံဒေသံအရ ဒါဟာ အသုံးအနှုန်းအရ ဘာမှမရိုင်းဘူး ဗမာအမြင်နဲ့ ကြည့်ရင်ပဲ အမေကိုပြန်ပြောတာ တခုပဲ ရိုင်းတာရှိနိုင်တယ်။ ဒါကလည်း ဒီကအမြင်နဲ့ဆိုရင် ပြန်ပြောတာမဟုတ်ဘူး သူ့အယူအဆကို သူဖွင့်ချတာသာ ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်အပေါ်ဘက်က လူတွေအတွက် နားကြားရိုင်းတဲ့ နင့်လင် နင့်မယား ပြောတာကို တနင်္သာရီတိုင်းမှာ ဘာမှမရိုင်းတာကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
February 10, 2011 at 2:20 PM Reply
သမိုင်းနဲနဲ ပါးပါးဖတ်ကြည့်ပါဦးဗျာ။ အမ ကလေးပြောနေတဲ့ လူအချင်းချင်းနှိမ့်ချတာတို့၊ မကောင်းမြင်တာတို့၊ ကျွန်အဖြစ်သွတ်သွင်းပြီး ခိုင်းစားတာတို့ ဘယ်လူမျိုးက မလုပ်ဘူးလဲ။ ရုပ်ရှင်၊ ဝတ္ထု မကြည့်မဖတ်ဘူးလား။ အနောက်တိုင်းက ကောင်တွေကို သိပ်ယဉ်ကျေး သိမ့်မွေ့လိမ္မာ လူမျိုးရေး မခွဲ၊ မဆဲ၊ မနှိမ် တတ်ဘူးများထင်နေလားမသိဘူး။ အော်ဇီအင်္ဂလိပ်မှာ ဆဲတာမပါဘူးလား။ သူတို့လေးတွေ လိမ္မာ လာတာ ပညာ တတ်လာလို့ပါဗျာ။ အမှားအမှန်ဝေဖန် ပိုင်းခြားတတ်လာလို့ ဆိုရင် ပိုရှင်းမယ်။ နောက်ပြီး အမ ပေးထားတဲ့ ဥပမာတွေက ဗမာတွေ အချင်းချင်း ရင်းနှီးသူချင်းနောက်ပြောင်ကျီ တာတွေပါ။ နစ်နာလိုစိတ်နဲ့ လုပ်တဲ့လုပ်ရပ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ အမသားကို ရှင်းပြလိုက်ပါဗျာ။ သူတို့ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း အဲဒီလို မစဘူးလား လို့။
February 10, 2011 at 3:00 PM Reply
I would first like to thank Ma Nge Naing for her interesting post. Her effort is to be welcomed and appreciated as she has highlighted an important issue facing the Burmese families happened to be staying abroad. Naturally readers will form different opinions and theirs, including that of Ma Nge Naing herself, will be rather emotional since this issue is very close to our hearts, i.e. ‘Our language’. As we all know, language is human’s core identity and we ; on personal and practical level; identify ourselves first and foremost with the language we are born with, our native language. (Here is notaplace to write an academic paper, so I will be brief). A prime example is in our history when in 1930 the people’s patriotic fervour was awakened by the rallying cry : ‘Burmese is our language. Burmese is our literature. Respect it!’ that was shrewdly called by the Dobama Asiayone . I personally fully agree with Ma Nge Naing that we human are adaptable and we Burmese have to adapt to our current environments. I should even add that we should do our best to integrate into our respective host countries for many obvious reasons. However, we do not need to do this ,i.e. ‘Integration’ at the expense of losing our own identity , that is, if we care about it. It is because , after all, integration is the process of getting people of different races, language, religions, custom,etc to live and work together instead of separately. It does not mean abandoning one’s own identity.
Many different ethnic minorities in foreign environments have been successful in this process for many years. Yet it is rather new for us Burmese, especially those of us grown up in the closed country, who suddenly finds ourselves in foreign culture without much information of the outside world. Our self-confidence is forever challenged in this new world if we happened not to have any solid foundation in our own culture.
With many challenges, we also have had many opportunities. Researches have proved thatachild under 16 years old is fully capable of speaking2or3languages at the same time , especially girls. If Burmese kids cannot speak their parents’ language for whatever reason, it isathoughtless lost. Be able to speak their parents’ language is their natural gift and it is unwise if this gift is to be wasted. It is unwise because language is the key to culture and all cultures have many positive aspects to offer. We are all individual and any cultural and social groups cannot be generalised. Parent’s duty, if we wanted to be good parents, is to expand the horizon for our kids, to broaden their minds and to correct them of wrong views. Different custom greet each other differently. Only the very close friends called out names or nick names , i.e. kappali or fatty. Burmese generally don’t do that in formal occasions just like any other nationals. Just because Burmese don’t hug as greeting, it does not mean they are not warm or friendly. And not all Burmese find faults in other and bully them. In short, I would like to say that I fully agree with Ko Naing Aung’s very helpful and reasonable comments. Ma Nge Naing, it is after all entirely up to you how to bring up your own son or to choose what language he speaks or how many languages he is able to speak. He is not rude or nothing is wrong with him , and the problem he faces trying to speak Burmese is real like he is ridiculed by the adults. Yet if you wanted him to grown upapositive , self-confident and broadminded person ; there are ways to do. Your kid, asakid with his undesireable experiences , might have hold the view such as ‘I don’t want to speak Burmese because they are nasty people, they are bad tempered, they are not smart,etc’. But asaresponsible mother ,who is far matured than your son, would correct the poor boy’s wrong and narrow view of life. Time will tell you would not be regretted for your correction and your son would be grateful for it.
February 10, 2011 at 8:13 PM Reply
"I can't shut up" and "I'm not that Stupid" .. I have no chance to reply my parents like this. မိဘတွေက သားဦးမို့လို့ ချစ်ပါတယ်။ တဆွေလုံး တမျိုးလုံးထဲမှာ အကြီးဆုံးနဲ့ တစ်ယောက်တည်းသော ကလေးဖြစ်လို့ ၀ိုင်းချစ်ကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် မြန်မာလူမျိုးများရဲ့ အလွန်ဆိုးရွားတဲ့ အကျင့်က လူတဖက်သား ဘာလုပ်ချင်သလဲ ဘာဖြစ်ချင်သလဲ ဆိုတာ ဂရုမစိုက်ဘဲ .. ငါလူကြီး ငါသိတယ် ငါတတ်တယ် ငါပြောတာနားထောင် ငါကျွေးတာစား ငါဆင်တာဝတ် ... ပြန်မပြောနဲ့ အထွန့်မတက်နဲ့ ငါဆုံးမတာ မှားရင်တောင် ချစ်လွန်းလို့မှားတာ ဆိုတဲ့ အထိပေါ့။ ချစ်တာက သပ်သပ် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပြောဆိုခံရတာ ရိုက်နှက်ခံရတာက သပ်သပ်ပါပဲ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ Retaliation ကတော့ အိမ်ကို စွန့်ခွါတာပါပဲ။ ဘယ်တော့မှ ပြန်နေမယ်လို့လည်း စိတ်ကူးမရှိပါ။ ဆယ်တန်းဖြေပြီး သင်တန်းတွေပေါင်းစုံတက် ၁၇နှစ်လောက်မှာ ရန်ကုန်ဆင်း သင်တန်းပေါင်းစုံတက်၊ စာတော်မှ ထူးချွန်မှ အဲသလိုလုပ်ခွင့်ရမှာဆိုတော့ အိမ်မပြန်ရပြီးတာပဲ ဆိုပြီး အသေအကြေကြိုးစားလိုက်တာ ... အခုအရွယ်ရောက်သည်အထိ ဆိုတော့ အိမ်မှာ ပြန်မနေဖြစ်တော့တာ ၁၅နှစ်ကျော်ပါပြီ။
မိဘတွေကို ချစ်ပါတယ်၊ သူတို့ကို Educate လုပ်နိုင်သလောက်လုပ်ပေးပါတယ် .. ဒါပေမယ့် မြန်မာတွေက အရိုးစွဲပြီဆို သေတဲ့အထိခေါင်းမာတယ်ထင်ရဲ့ .. သိပ်တော့ မပြောင်းလဲကြပါ။ အခုထိ သူတို့ဖြစ်ချင်တာဆိုရင် တဖက်သား မကြိုက်မှန်းသိလည်း လုပ်တုန်းပြောနေကြတုန်းပါပဲ။ ဒီစာကို ရေးတဲ့ အမေမျိုး ရတဲ့ ကောင်လေးကို ကျွန်တော် အားကျမိပါတယ်။
Mg Toee (Toee Nanda) says:
February 10, 2011 at 8:46 PM Reply
I do regret being mean to my mumafew yers ago but in my head I still see Burmese adults communicate to children inanegative way. For e.g (true story) When the Burmese community doesafundraising for the monestary, i'm usually always there with my friend who is slightly big. When he goes to buy Mohinchar some adults always tease him that he is overweight and fat. And he does get upset and he does sometimes cry.
Generally, in reality, when you tease someone and you find itajoke but the victim doesn't see it in their view, this does still count as bullying. Also when you tease children who have dark skin but you find it funny and the child finds it funny, you also still have to remeber if the whole of India was watching that they be offended. You just offended 1,155,347,678 of Indian people.
Secondly, the reason why I rarely speak Burmese has2reasons. First, it's difficult without inspiration. Second, when I try to speak Burmese in the community, SOME people laugh at me. I speak again in burmese they still do, and I don't really want to hearalaugh everytime i finishasentence in Burmese.
Also I didn't mean that ALL Burmese adults are mean, anymore.
When I came back from camp (2-2-2011) I started to speak Burmese again.
February 10, 2011 at 11:57 PM Reply
ဒီပို့စ်လေးကိုဖတ်ပြီး မငယ်နိုင်ရဲ့ အတွေးအခေါ်ရော စေတနာကိုပါ ပိုလေးစားသွားပါတယ်။
February 11, 2011 at 5:30 AM Reply
to ma nge naing,
Pls go and read there
shut up and stupid are bad words especially for kids.
We can improve how to let our kids learn our culture and language ... .
Yes, it's difficult but there sure isaway. Wish you all the best :)
February 11, 2011 at 1:32 PM Reply
I don't think it is, but sometimes people get uppity when I say it. Especially if there'sakid in the room.
It can be bad if said withacertain tone and inacertain situation, but I don't think it is generally bad and people need to relax about it.
There arealot of awfully worse words and phrases out there to devote your energy to.
Not really, but little kids from the age of6to 10 think it is...
yes, because it is rude, disrespecting and plain not nice. And, none of those things are good, so I would say it isabad word. I don't allow my kids to say it.
but it hurts feelings and if u hurt some 1s feelings the worst word of all.
It's notabad word it isarude phrase bordering on insolent or IMPUDENT depending on the tone of voice.It also is comonly used to express dismay then it isa"valley girl" expression,sort of like "Talk to the hand"
nope. because if it is be queit is too. shut up just means be queit in different words.
it is not abusive , but it is rude if you use that , instead of that you can say , "okay thats enough" etccc
There are many more uncouth words than "shut up".
It's like stupid or retard. It's nota"bad word" but it's not nice to say.
TWO bad words, thank you very much.
i wouldnt call it swearing but its mean and offensive2say it2ppl
Some people think so but other people, like me, don't
Well personally I don't think its all that bad just sometimes it can sound mean. My geogrphy teacher give anyone who says "shut up"adamarit. SO I hope that helps you disifer.
no ... there are many worse words ... but saying "shut up" is still rude!
no its not but it is depend who u saying it and where u saying it.
i tell my 4-year-old son it'sabad word, have since he wasababy, because i don't say it and i don't want him to say it and that way if i absolutely need him to be quiet because he's about to tellacreepy stranger our address or something and i do say shut up he'll be so shocked he'll just do it.
"shut up" is two words. and um... i would say it is oppinion.
no. itsabad phrase! j/k its not bad. people just dont like to hear it (however they do like to say it)
"Shut up" isatwo word phrase. It is spoken in annoyance or anger by someone who does not wish to hear what you have to say.
No, not necessarily... if you areabit younger likeakid, maybe
NO WAY, ITS JUST ANOTHER WAY OF SAYING BE QUIET......... I SAY IT ALL THE TIME....
some ppl find it offensive while others dont mind. It just depends on the person ur with.
No it's not necessarilya'Bad' word but it can be tooken as offensive, as said before depends on how you are saying it, and WHO you are saying it to.
it is but people use it too much to think about it
it can depend onalot of things. I go toaprivate charter school and this year they now havealist of words which are according to the principal "not heritage academy appropriate" and it can depend on the person or the area that you live in or are in.
February 11, 2011 at 2:08 PM Reply
ဒီပို့စ်လေးကို စိတ်ဝင်စားပြီးအစအဆုံးလဲဖတ်ဖြစ်တဲ့အပြင် ကွန်းမန့်တွေကိုပါလိုက်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်. အောက်ကစာကြောင်းလေးအတွက်တော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်
"မေမေ အဲဒါ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေမေမေ ဆိုပြီး သားက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဂျာမန်ဘက်ကရော အင်္ဂလိပ်ဘက်ကပါ နှစ်ဘက်စလုံးက ပါခဲ့တယ် တော်တော်ရီစရာကောင်းတဲ့ တိုင်းပြည်ပဲ"
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမှာအသက်နဲ့လဲပြီးယူပေးခဲ့ပေမဲ့တော်တော်ရီစရာကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ပဲလို့အပြောခံလိုက်ရတာတော့ တကယ်ဝမ်းနည်းမိတယ်အစ်မရေ.တကယ်တော့ဗမာနိုင်ငံအဲ့ဒီအချိန်မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ထဲပါတယ်မပါဘူးဆိုတာထက် ဘာကြောင့်အင်္ဂလိပ်နဲ့ရောဂျပန်နဲ့ပါပေါင်းရသလဲဆိုတာအစ်မရှင်းပြလိုက်ရင်ပိုကောင်းမှာပဲဗျာ.ကျွန်တော့်အမြင်သက်သက်သာဖြစ်ပါတယ်. အမှားအယွင်းရှိခဲ့သော်ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါသည်.
February 11, 2011 at 3:19 PM Reply
ပြောချင်တာကတော့ မြန်မာသွေးနည်းလိုက်တဲ့ ကလေးပေါ့ဗျာ။ မကြာပါဘူး မြန်မာလို့ပြောရမှာ ရှက်လာလိမ့်မယ်။ end of story ပေါ့
February 11, 2011 at 5:26 PM Reply
မှတ်ချက်တွေ အားလုံးအတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်က နိုင်ငံခြားမှာ ကြီးတဲ့ကလေးတွေနဲ့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ရှိတဲ့ အပြုအမူ အပြောအဆိုတွေအကြား ကွာဟနေတဲ့အချက်နဲ့ ကလေးတွေ ဘာကြောင့်မိခင်ဘာသာစကားကို မသန်ဆိုတာ မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်း ပြန်တင်ပြပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့မှတ်ချက်တွေမှာ ကလေးကို ဘယ်လိုရှင်းပြပါ ပြောပြပါလို့ အကြံပြုကြတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မ မရှင်းပြတာမဟုတ် သိပ်ကို ရှငးပြပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ ကြီးတဲ့ ၁၁ နှစ်သားအရွယ် မြန်မာနိုင်ငံ အကြောင်းကို ကျွန်မသားလောက် သိတဲ့ကလေး သိပ်မရှိဘူးလို့ ကျွန်မပြောရဲတယ်။ ကျွန်မက ကလေးကို မရှင်းပြဘူး ထင်သူများ ပို့စ်ကို သေသေချာချာ ပြန်ဖတ်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ တချို့အချက်တွေမှာ ကလေးတွေ စကားပြောတာကို ရယ်တာ၊ သူများလူမျိုးကို နှုတ်အမူအယာအရ နှိမ်တာတွေကတော့ ကျွန်မသားပြောတာကို ဘယ်သူမှ ငြင်းမနိုင်ပါဘူး။ လူကြီးအချင်းချင်း တွေ့လို့ ၀မ်းသာအားရ ပိန်တာ၊ မဲတာ၊ ၀တာ အိုလာတာ စတဲ့အချက်တွေကို ပြောတာရင်းနှီးလို့ ပြောတာ ဖြစ်လို့ ဘယ်သူမှဘာမှမခံစားရလို့ ဒါဟာဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်ဘူးဆိုတာ ကျွန်မသားလည်း ကျွန်မရှင်းပြလို့ နားလည်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ မဲလာလိုက်တာ ကပ္ပလီ/ကုလား ကျနေတာပဲ ဆိုတာမျိုးကျတော့ ပြောသူနဲ့ အပြောခံရသူ နှစ်ဦးကြား ဘာမှမထိခိုက်ပေမဲ့ သူများလူမျိုးကို သွားထိခိုက်နေတာမျိုးကို လူသားအချင်းချင်း နှိမ်တဲ့သဘောဖြစ်နေလို့ သူများလူမျိုးကို Bully လုပ်ရာကျတယ်လို့ သားပြောတာ ငြင်းလို့မရဘူး။
ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ စကားပြောရာမှာ တခြားလူမျိုးကိုပဲ ခွဲခြားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သားကဒီတခုပဲ အမြဲကြားနေရလို့ ဒီတခုကိုပဲ ပြောတာ တကယ်တော့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ခွဲခြားတတ်တာတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။ မိန်းမကျင့် မိန်းမကြံ၊ မိန်းမလိုမိန်းမရ၊ မိန်းမလိုမိန်းမရ၊ တောပုံပေါက်နေတယ်၊ တောမှာသွားပြောစမ်း၊ အိမ်က ပုံမလာဘူး ကရင်အိမ်လိုပဲ၊ ငါးစိမ်းသည်ကျနေတာပဲ စသည်ဖြင့် အပြစ်မဟုတ်တာကို အပြစ်လိုမျိုး လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ကျားမ၊ အဆင့်အတန်း ခွဲခြားတတ်တာ အဲဒီစကားတွေအထဲမှာ ဇာတိပြနေတယ်။ သူတုိ့ကြီးပြင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဲလိုခွဲခြားမှုမရှိဘဲ ဗမာတွေကြားမှာမှ ရှိနေတဲ့ကိစ္စကို မိဘဖြစ်တဲ့ ကျွန်မတို့က ဒါကိုမှန်တယ်လို့ ပြောလို့မဖြစ်ဘူး။ မှားနေမှပဲ မဟုတ်ကြောင်း အမှန်က ဘာဖြစ်ကြောင်း ပြောလို့ရနိုင်တယ်။ သူတို့ပြောတာ မှန်နေရင် တော့ အမှန်ကို လက်ခံရမယ်။ လက်ခံသင့်တာကို လက်ခံပြီး ကျွန်တို့ရဲ့ မကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကို စွန့်ပစ်သင့်တာ စွန့်ပစ်ရမယ်။ အဲဒါမှ ကလေးတွေက လူကြီးတွေ ပြောတာကို လက်ခံနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။
February 11, 2011 at 5:45 PM Reply
၁။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မှာ ပြင်သစ် တချို့ က ဂျာမန်နဲ့ ပေါင်းပြီး ဗစ်ရှီ အစိုးရ ဖွဲ့ တယ်။ တချို့ က ဒီဂေါလ် နောက်လိုက်ပြီး မဟာမိတ်နဲ့ ပေါင်းတယ်။
၂။ အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ် နဲ့ ရုရှား ပေါင်းပြီး ဂျာမနီကိုတိုက်တယ်။ တဝက်စီ ခွဲသိမ်းလိုက်တယ်။ အနောက်ဂျာမနီက အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်တို့ နဲ့ ပေါင်းလိုက်တယ်။ အရှေ့ ဂျာမနီ က ရှရှားနဲ့ ပေါင်းလိုက်တယ်။ အုပ်စု နှစ်ခု စစ်အေးဖြစ်တယ်။
၃။ အမေရိကန်က ဂျပန်ကို အနုမြူဗုံး ကြဲချလိုက်တယ်။ အခုထိ ဂျပန်ဟာ အရှေ့ အာရှမှာ အမေရိကန်ရဲ့အခိုင်မာဆုံး မဟာမိတ် ဖြစ်နေတယ်။
February 11, 2011 at 6:05 PM Reply
February 11, 2011 at 6:11 PM Reply
Thuraine - ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီမှာက ကြုံလို့ ပြောလိုက်တာပါ။ စိတ်ဝင်စားရင် အောက်က link မှာ သွားဖတ်ပြီး ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
C-Box မှတ်ချက်များ says:
February 12, 2011 at 2:09 AM Reply
8 Feb 11, 18:39
နေဦး: ဖေ့ဘွတ်မှာ ရှယ်ထားတဲ့ အမရဲ့ မြန်မာလို ကလေးတွေ မပြောတဲ့အကြောင်းကို ဖတ်ရင်း ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီခေါင်းစဉ်က ကျွန်တော် အရမ်း အလေးထားတာမို့ပါ. အမြင် Comment ကို သက်ဆိုင်ရာပို့စ်မှာ ရေးခဲ့ပါတယ် ခင်ဗျာ။
9 Feb 11, 07:02
သန့်ဇင်: http://vezayantarusa.org/ မှာ အဖိုးတန်စာပေများ ဖတ်ရှု့နှလုံးသွင်းနိုင် ပါတယ်ခင်ဗျာ.
9 Feb 11, 06:51
သန့်ဇင်: တန်ဖိုးကြီးစာပေတွေ ဒီထက်မကဖြန့်ဝေနိုင်ပါစေ .. ကျန်းမာအောင်မြင် ပါစေ..
9 Feb 11, 20:41
admirer: နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာကလေးများရဲ. ကိုယ့်လူမျိုးပေါ်အမြင် ကိုဖေါ်ပြပေးလို့အထူးကျေးဇူးရှိပါသည်ဒါမျိုး ဆက်ပြီး ရေးပါအုံး
10 Feb 11, 10:18
U Pyin nya wa ra: မိုးမခ မှာ ဆောင်းပါးတွေ့ လို့ ဖတ်ကြည့်တော့ စာရေးသူ ရဲ့ဘလောက် လေးတွေ့လို့အတွေ့ အမြင် လေး သဘောကျ နှစ်ချိုက်ကြောင်းပါ- နောင်လဲ အတွေး အခေါ်လေးတွေ ဝေမျှနိုင်ပါစေ-
10 Feb 11, 15:53
Thin: အမရဲ့နိုင်ငံရပ်ခြားမြန်မာကလေးငယ်များနဲ့ သူတို့မြန်မာလူကြီးတွေကြား ဘာတွေခြား ဆိုတဲ့ စာကို ကြိုက်လို့ ကျမ facebook ကနေ share လုပ်လိုက်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
10 Feb 11, 17:14
su: I share from moemaka. I like it very much. Thaksalot Ma Nge.
February 12, 2011 at 3:04 AM Reply
I think some of you should shut up talking about "Shut up". I don't think it isabig deal. (I use the word shut up in friendly way. :D)
I think we should focus more on the behaviour of adult which influence on children (abroad or in Myanmar.)
I do think,most of the parents in Myanmar (may be in some other countries as well), they shift their stress, pressure and failure on to their childern. And they mistakenly believe that they are doing it for their children.
They don't listen or acknowledge what their children want. They always think that they know everything and their children don't know anything. It leaves the scars and haunting memories on the children's mind. It is like "Hey kid you don't know anything. I know everything and follow me". It decreases the level of confidence on their children. Those children will depend more on other people. There isaless chance for them to becomeagood leader or follower. They always need attention.
I have seenawoman who beats her kids everyday for never ending different reasons. And she even beats them more severely whenever she fights with her husband. I think that sort of woman are everywhere in Myanmar (again, may be in some other countries).
I think, the child has more opportunities if they speak more languages. And, yes, it is the responsibility of the parent to encourage them to speak or learn them. You can tell them or show them what the opportunities are for them if they speak more language. They will understand as they are not stupid (meaning: dull :D).
February 12, 2011 at 11:30 AM Reply
မငယ်နိုင်စာက တယ်လည်းပွဲစည်သွားသကိုး ၊ မိုးမခကတောင် ခွင့်လာတောင်းပြီး တင်သွားရတယ် ။
ကျနော်လည်း ပို့စ်တက်တက်ချင်း ကိုယ့်ဘာသာရှုပ်ပြီး လာမဖတ်ဖြစ်ဖူး ၊ ယေဘုယျတော့ အမြဲမြင်နေကျ ဆောင်းပါးတွေလိုပဲ ထင်ခဲ့မိတာ ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တွေ့အသိနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် စီကာပတ်ကုံးရေးထားတာ တွေ့လိုက်ရပြီး ကိုယ့်သဘောနဲ့လည်း နီးစပ်တာမို့ two thumbs up ပါ။ ရင်ထဲက ထွက်လာတဲ့ စကားတွေမို့ အခြားသူတွေရဲ့ စိတ်နှလုံးတွေကို လှုပ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တာလို့ ယူဆပါတယ် ။
ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်သစ် ၊ ယဉ်ကျေးမှုသစ် ၊ အနေထားသစ် ၊ ဘဝသစ်မှာ ချိန်ညှိနေကြရတုန်းပါ ။ ဒီက အဆိုးတွေကို မျက်ကွယ်ပြုလို့ မရပေမယ့် အကောင်းပိုင်းတွေက ပိုများတယ်လို့ မြင်မိသလို အတုယူစရာ ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြင်ဆင်စရာတွေက အများကြီးပါ ။
အပေါ်က အချို့ပြောကြသလို သားရဲ့စကားက နည်းနည်းရိုင်းတယ် ဆိုတာမျိုးက ဘယ်သူ ၊ ဘယ်နေရာ ၊ ဘာကြောင့် ၊ ဘယ်လိုပုံစံ (မျက်နှာအမူအယာက အစပေါ့) ထည့်တွက်ဖို့ လိုတယ်လို့ နားလည်မိပါတယ် ။ မတူတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေကို အထိအတွေ့ နည်းသူတွေအတွက်တော့ ပိုပြီး လက်ခံရခက်နိုင်ပါတယ် ။
အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်ကနေ လုံးဝမထွက်ဖူးရင် ပိုပြီးအဆိုး မြင်နိုင်ကြပါတယ် ။ ဥပမာ နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ ကလေးတွေ ဗမာလို မပြောနိုင်ရင် အမြင်စောင်းတတ်ကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာ ဆယ်နှစ်ဆယ်မိုး အင်္ဂလိပ်စာသင်ပြီး အင်္ဂလိပ်လို လုံးဝမပြောနိုင်ကြ တာမျိုးကျတော့ အများနဲ့ရောရာမို့လို့ ဘာမှကိစ္စမရှိဖူးလို့ ထင်တတ်ကြပါတယ် ။ ပြောင်းပြန် မတွေးမမြင်မိကြတာကို အပြစ်မတင်ချင်ပေမယ့် မငယ်နိုင် ရေးပြတာမျိုးက နားလည်မှုတွေ ရလာအောင် လမ်းကြောင်းပေးတာမျိုးဖြစ်လို့ ကြိုဆိုလက်ခံရမှာပါ ။
ကျနော်တို့တွေ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ လာနေကြလို့ ဆံပင်တွေ ရွှေရောင်ကို ပြောင်းမသွားနိုင်ကြပါဘူး ။ အသားတွေ ညိုရာက ဖွေးဖွေးဖြူမသွားနိုင်ကြပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် အဆိုးမြင်ပြီး ကိုယ့်လူတွေကို ကိုယ့်ဘာသာမသိပဲ စကားနဲ့ တွန်းထုတ်နေမိတဲ့ လူတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ ကြီးပြင်းလာရတဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေကြားမှာ တွဲဆက်ပေးဖို့ကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ မယူပဲရလာတဲ့ ဝတ္တရားတွေပေါ့ဗျာ ။
February 13, 2011 at 4:09 PM Reply
ကျွန်တော်ဘလော့မှာ တင်ဖို့ကူးသွားပါတယ်။ နောက်ပြီးကျွန်တော် ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ သုံးချင်ပါတယ်။ ဘလော့မှာကူးခွင့်ပေးထားတာ သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးပွဲ မှာသုံးခွင့်ပြု မပြု သိချင်ပါတယ်။
February 13, 2011 at 9:49 PM Reply
13 Feb 11, 06:50
ဘုန်းဥာဏ်: ဒကာမ မငယ်ရေ စာ လာဖတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ ကြီးတဲ့ ... ပို့စ်ကို ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးပါ။ လူတွေနှင့် ပို ထိတွေ့ဆက်ဆံလာရလို့ (ဒီခေတ်) ဘုန်းကြီးလဲ သိထားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လာလည်ပါဦးမယ်။
လာလည်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရား နောက်လည်း လာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ Label အောက်မှာ ကဏ္ဍအလိုက် ခွဲထားတာတွေကိုလည်း ရွေးဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Thu Ya Aung နဲ့ ကိုမန်းကိုကို - မှတ်ချက်တွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Shut up တို့ Stupid တို့ အသုံးကို ငြင်းနေတာကတော့ တနေရာနဲ့ တနေရာ အသုံးပြုပုံ မတူလို့ဆိုတာ ကျွန်မသဘောပေါက်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်ထဲမှာ သားကကျွန်မကို May May Shut up လို့ပြောပြီး အပြောရပ်ခိုင်းတာမဟုတ်၊ May May Stupid လို့ အပြစ်တင်ပြောဆိုခြင်းလည်း မဟုတ်၊ သူ့ဖါသာသူ ၀ါကျထဲမှာ verb တခုအနေနဲ့ ထည့်ပြောတယ်ဆိုတော့ Australia မှာတော့ မရိုင်းပါဘူုး။ ကနေဒါက သူတို့ဆီမှာ ဒီစကားလုံးတွေကို ရိုင်းတဲ့နေရာမှာပဲ သုံးလို့ တခြားနေရာမှာလည်း ဒီလိုပဲထင်ပြီး သန်းထွေးကြူက ပြောတာပါ။
ကလေးကမိဘကို အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ပြန်ပြောလို့ရမရ ဆိုတာကတော့ Child Right ကိုလေ့လာဖူးသူတိုင်း သိပါတယ်။ သားကျွန်မကို ပြောတာက ""May May it it nothing to be angry about. I don't like shouting and screaming don't treat me like that I am not that stupid" မေမေ ဘာမှလည်း ဒီလောက် စိတ်ဆိုစရာ မရှိပါဘူး၊ အော်ငေါက်တာ အောဟစ်ပြောဆိုတာ သားမကြိုက်ဘူး၊ သားကို အဲလိုမဆက်ဆံပါနဲ့ သားဒီလောက်လည်း မမိုက်ကန်းပါဘူး။ ဆိုတာပဲ ဖြစ်တယ်။ နောက်တခု ကျွန်မက ပါးစပ်ပိတ်ထားပြောလို့ သူပြန်ပြောတာက "I can't shut up May May. I don't care your အင်္ကျီချိတ်. I need to say what I have to. You Burmese adults have no idea with problem solving and the only way what you do is screaming shouting and hurting children. I hate aggressive behabiour I wonder why our Burmese adults are that aggressive. You shold go to the training to learn how to bring up children.သားပိတ်လို့မဖြစ်ဘူးမေမေ မေမေ့အင်္ကျီချိတ်ကို သားဂရုမစိုက်ဘူး၊ သားပြောစရာရှိတာကို ဆက်ပြောမှ ဖြစ်မယ်။ မေမေတို့ မြန်မာလူကြီးတွေက ပြဿနာတခုကို အေးအေးဆေးဆေး ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိဘူး မေမေတို့လုပ်တတ်တာ ကလေးတွေကို အော်မယ် ဟစ်မယ်၊ ရိုက်မယ် ဒါပဲသိတယ်။ အကြမ်းဖက် (ကိုယ်၊ နှုတ်) တာ သားမကြိုက်ဘူး။ မေမေတို့ ဗမာလူကြီးတွေ ဒီလောက် အကြမ်းဖက်တာ ဘာကြောင့်ဆိုတာ နားလည်လို့ကိုမရဘူး။ ကလေးကို ဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ သင်တန်း သွားတက်သင့်တယ်" ဒါဟာ လူကြီးတယောက်လေသံနဲ့ ကလေးတယောက်က ပြောတယ်ဆိုတာ ကျွန်မလက်ခံတယ်။ Shut up ပါနေတာက သြစကြေးလျားမှာ ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး မချေမငန်ဖြစ်နေတဲ့လေသံက ကျွန်မသိပ်ပြီး စိတ်တိုနေလို့ ကျွန်မဆီက ကူးစက်ပြီး ရိုင်းသလို ဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ ပြောတဲ့အချက်အလက်ကတော့ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့မရနိုင်ဘူး။ ကျွန်မသားကို ကျွန်မ အဲဒီအချိန်ကစပြီးနောက်ပိုင်း အဲလိုဒေါသထွက်ပြီး မဆက်ဆံတော့တဲ့နောက်ပိုင်း သူ့ဆီက မချေမငန်လေသံနဲ့ တခါမှမပြောတေ့ပါဘူး။ မြန်မာမိဘတွေရဲ့ ကလေးကို ဆုံးမတဲ့ပုံစံက Violations တွေ အများကြီးရှိနေတယ်၊ အားနည်းချက်တွေ အများကြီး ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ကျွန်မတို့ လက်ခံရမှာ ဖြစ်တယ်။
ပထီးပကော် - ဒီပို့စ်ပါ အကြောင်းအရာကို စိတ်ဝင်စားပြီး ထပ်ဆင့်တင်ပြပေးချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပထီးရဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့အချက်အလက် ဘယ်ကကိုးကားတယ်ဆိုတာ ညွန်းပြီး တင်ပြရင် ကြိုက်တဲ့ပို့စ်က ကြိုက်တဲ့အချက်အလက်ကို ယူသုံးလို့ရပါတယ်။
February 16, 2011 at 10:52 PM Reply
Our burmese language is difficult to understand.We see each other and talk that " u r become dark , fat , and so on" ............ does not mean Bully each other.Sharing how u look like now n before differences then saying that i still remember ur old image.We said like that each other when closed friends or old friends meeting times.If you translate directly the words is correct >>>> bully each other.But dont take only words, See the actions,enviroment and persons.Our language has one more difficuty is taken different meaning that dont see in others.For example , one person said that " YOU ARE THE FATTIEST GIRL IN THE CLASS." But in real , she is the most skinny girl in the class.This is highlighting the inbalance of harmony and making joke. Said that the thinnest one asafattiest.Does not mean bully to her. Just highlighting her appearance only.But they are taking words directly only and said this is bully. just share u all my feeling only.
I strogly believe that " I will built up my generation in Myanmar Language first priority ". I want to be closed and shared in same point of views with my kids.
NO MATTER RIGHT OR WRONG, I WANT TO BE OLD VERSION BURMESE ONLY.
STILL LOVING BURMA
February 16, 2011 at 10:54 PM Reply
ဒါဟာ သူ့တယောက်တည်းရဲ့ သဘောထားမဟုတ် ကလေးတော်တော်များများက ဒီလိုပဲခံစားရပြီး သူတို့မိဘတွေကို မပြောပြရဲလို့ (သို့) ပြောလို့ အကျိုးမရှိဘူး ထင်လို့သာ မပြောကြောင်း သားက ကျွန်မကို ပြောပြပါတယ်။
တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်သဘောထားကို အဲလို လွယ်လွယ်နဲ့ ဆွဲမညှိသင့်ဘူးထင်ပါတယ်။ စစ်တမ်းကောက်ပြီ အင်တာဗျူးတွေလုပ်ပြီ သုတေသနလုပ်ထားတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက် တသီတခြား အနေနဲ့ ဖော်ပြသင့်တယ်။ ကျန်တာတော့ မပြောလိုပါဘူး။
May Kyaw Shin says:
February 16, 2011 at 10:55 PM Reply
ကိုအောင် ပြောတာမှန်ပါတယ် ။ “စကားမပီရင် ရယ်တာ၊ လိုက်စပြီး ရယ်တာနဲ့ ကုလားလိုပဲ ကပ္ပလီလိုပဲလို့
ကလေးတွေကို ပြောတာတွေ- ကလေးစကားမပီလို့ ရီတာဟာ Bully လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ Just kidding ပါ ။
“နိုင်ငံခြားမှာ ကြီးပြင်းတဲ့ မြန်မာကလေးတွေ မြန်မာလို အားမသန်တာ မြန်မာအမှုအမူ နည်းတာဟာ သူတို့ဘာမှ
မမှားပါဘူး မိခင်ဘာသာစကားကို အထင်သေးလို့လည်း မဟုတ်ဘူး ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြီးတဲ့ ကလေးတွေအတွက်
ဒါဟာ ပုံမှန်သာဖြစ်ကြောင်းကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။” - ဆိုခြင်းကိုလည်း လက်ခံနိုင်စရာမရှိပါ ။-----------------
ဘာ့ကြောင့်လဲ ? ကျမရဲ့ သားအငယ်ဆုံး ဒီဗန်ကောက်ရောက်တော့ အသက် ၆ နှစ်၊ အခု ဒီမှာနေတာ ၂၄ နှစ်ဆိုပေမဲ့
ဒီနေ.တိုင်အောင် “ သူဗမာစကား”ကို ပီပီသသ ပြောနိုင်တာမို. Radio Thailand - မြန်မာဘာသာဌာနမှာ အသံလွှင့်
နေပါတယ် ။ သူပညာသင်ယူခဲ့တာက Internation College - ပါ ။ ဒါပေမဲ့ ဒီကနေ.တိုင် မြန်မာ လို ပီပီသသပြောနေ
တာပါပဲ ။ ဒီလိုပါပဲ သမီးတွေဆိုလည်း ဒီ ဗန်ကောက် ရှိုးပွဲ တက်ရတဲ့အခါ “အင်္ကျီလက်ရှည်လေးနဲ. မြန်မာထဘီကို ခြေမျက်စေ့ဖုံးအောင်” ဝတ်ပြလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီလိုချစ်စရာ့ မြင်ကွင်းလေးကိုလည်း ပရိတ်သတ်က တခဲနက် အားပေးလေ့ရှိတာတွေ.ရပါတယ် ။
သူ.အသိုင်အဝန်း - သူ.ကဏ္ဍနဲ.သူပါ ( အားလုံးတော့မဟုတ်ပါ )
February 16, 2011 at 10:57 PM Reply
စာေ၇းသူကိုတခုမေးချင်ပါတယ် ..သားပြောတဲ့စကားတွေဟာ ..မြန်မာတွေ၇ဲ့ စရိုက်ကိုစိတ်နဲ့ မတွေ့ ဖြစ်နေ..နိုင်ငံခြားယောက်နေတဲ့ ..မြန်မာတချို့စိတ်များလားလို့ ပါ...ဘာလို့ လဲဆို၇င်..ခုအချိန်မှာနိုင်ခြားေ၇ာက်နေတဲ့ မြန်မာ မိသားစုတွေဟာ အတော်များလာပါပြီ ..စာေ၇းသူပြောသလို သာ.နိုင်ငံခြားေ၇ာက်မြန်မာကလေးတွေ မြန်မာလိုမပြောချင်တဲ့အချက်ဟာ..အထက်ကစာေ၇းသူပြောသလိုဆို၇င် နောက်ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုလောက်ဆို၇င်..နိုင်ခံခြားကမြန်မာစာမသိ မြန်မာစကားမပြောတတ်တဲ့ မြန်မာ မိဘ စစ်စစ်ကမွေးထားတဲ့ မြန်တွေဖြစ်လာကြ တော့မှာပေါ့ နော်...လူကြီးချင်း..နောက်ပြောင်ကြတာကြောင့်..လူကြီးက ကလေး စကားမပီတာကို၇ီ လို့ ဥပြစ် ခါပြုပြစ် ၇လောက်တဲ့ အထိ ကျွန်တော်တို့ စာ ကျွန်တော်တို့ စကား ဟာ အောက်တန်းမကျပါဘူး..စာေ၇းသူ မိဘတွေဟာလဲ ဒီစာကိုသင် ဒီစကားကိုပြောပြီး စာေ၇းသူကို ကြီးပြင်းစေခဲ့မယ်လို့ ထင်ပါ တယ်..ကျွန်တော်တို့ စကားမှာ ..၇ိုသေမူ့ ကိုပြတဲ..ဖေဖေ သမီးလေ..မေမေသာဒလေ..ဦးဦးကျွန်လေ..ဒေါ်ဒေါ်ကျွန်မလေ..စတဲ့ ယဉ်ကျေးတဲ့..အသုံး နှုံးတွေမ၇တဲ့...အဖေလဲ အိုင်(i) ..အမေလဲ.အိုင်(.i.)အသက်အ၇ွယ်မေ၇ွး အိုင် တလုံးပြီးတဲ့ အဂ်လိပ်စကားဟာ နိုင်ငံတကာသုံးမို့ တကယ်ကောင်းကောင်း တပ်သင်ပြေ မဲ့ မြန်မာ မိဘနှစ်ပါးကမွေးတဲ့ မြန်မာစစ်စစ် ကလေးတွေ အတွက်တော့ဘယ်နိုင်ငံေ၇ာက်ေ၇ာက်...အသက်အ၇ွယ်အလိုက် ..တော်စပ်ပုံအ၇ ၇ိုသေယဉ်ကျေးစွာပြောလို့ ၇တဲ့ကျွန်တော်တို့ မြန်မာစကားဟာ ..တတ်သင့်ပါတယ်ဗျာ..စာေ၇းသူတို့ လိုအများကို အသိဗဟုသုတပေးနေတဲ့ ..သူတွေဟာ..နိုင်ငံခြားေ၇ာက်နေလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဆိုပြီး မြန်မာလိုမပြောချင်တာ မြန်မာလိုမတတ်တာ မှန်တယ်လို့ ယူဆစ၇ာဖြစ်အောင်မေ၇း သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်.. ကျေှးဇူး တင်ပါ..ဒါပေမဲ့..စာေ၇းသူ၇ယ်. ကိုယ့်ကို ကို မြန်မာစစ်စစ်လို့လက်ခံ သူ တိုင်းအတွက်ကတော့ ဘယ်ပဲေ၇ာက်ေ၇ာက်..မြန်မာလိုပြောနိုင်သင့်ပါတယ်ဗျာ...
February 16, 2011 at 10:58 PM Reply
အကောင်းဘက်ကနေဖတ်ဖတ်၊ အဆိုးဘက်ကနေဖတ်ဖတ် တင်ပြထားတဲ့ ပုံစံက မပြောင်းသွားပါဘူး။ မိဘကိုယ်တိုင်ကိုက မြန်မာလိုမပြောတဲ့ကလေးကို သူ့အလိုအတိုင်းလိုက်နေမှတော့ ဇာတ်လမ်းကရှင်းနေပြီပဲ။ ဘာပြောဖို့လိုသေးလို့လဲဗျာ။ ဒါကြောင့် ဘာမှမပြောလိုတော့ဘူးလို့ ပြောခဲ့တာပေါ့။ ဟားဟား.....ကလေးတွေဆိုတာ လူကြီးတွေဆီက အမြဲသင်ယူနေလေ့ရှိတော့ မိဘရဲ့သဘောထားအတိုင်း ဖြစ်လာမှာပဲ။ ကလေးကတော့ အထင်သေးတာ အထင်ကြီးတာတော့ ဘယ်သိအုံးမလဲ လူကြီးပဲသိမှာလေ။ ဒါဆို အဖြေကပိုရှင်းသွားတာပေါ့။ ဘယ်လိုပဲဖတ်ဖတ် ရည်ရွယ်ထားတာချင်းအတူတူပါပဲ။
February 16, 2011 at 11:00 PM Reply
အဲဒါကိုယ့်ဇတ်ကိုယ်မနိုင်တာလေ ... :P
အစတုံးကတော့ "သားသားလေးက ဘိုလိုဘဲပြောတာ" ဆိုပြီး ပီတိတွေဖြာနေခဲ့မှာ
နောက်ကျတော့ လူကြီးကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်လူမျိုးကိုယ်နဲနဲလောက်နှိပ်ကွပ်ချင်နေတာကို ကလေးကဘဲပြောသလိုလိုနဲ့ရောကြိတ်သွားရော..
Thannar Win Htun says:
February 16, 2011 at 11:01 PM Reply
ဟုတ်ပါတယ်..ဒီဆောင်းပါးက မြန်မာနဲ့ပတ်သက်ရင် အဆိုးဘက်ကိုပဲ ထောက်ပြနေသလိုပါပဲ။ လူမျိုးတိုင်း၊ဘားသာစကားတိုင်းမှာ သူ့နည်းသူ့အလျောက် အားနည်း၊ အားသာချက်ရှိကြပါတယ်။ ကိုယ့်လူမျိူးရဲ့အားသာချက်၊ကောင်းတဲ့အချက်တွေကို ကလေးတွေကို သင်ကြားပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ တစ်ခုကို စံထားရင်၊ တစ်ခုကတော့ လွဲနေမှာပါပဲ။ ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေလည်း လူယဉ်ကျေးတွေပါပဲ။
February 16, 2011 at 11:16 PM Reply
ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်နည်းလေးတစ်ခုပဲ... တင်ပြသွားပုံကောင်းပါတယ်... လူကြီးရဲ့စိတ်နဲ့ ကလေးရဲ့ခံစားချက် ဘယ်လိုမျိုးကွာခြားတတ်တယ်ဆိုတာ တင်ပြသွားတာလေးတွေ တကယ်ကြိုက်ပါတယ်... ဒါလေးဖတ်ရင်း ဆက်စပ်ပြီးတော့ online မှာ children and culture ဆိုပြီး Google ကနေရှာမိတာလေးပါ... click here http://www.google.com.sg/#hl=en&biw=1366&bih=601&q=children+and+culture&aq=0&aqi=g3&aql=&oq=children+and+cul&fp=1&cad=b )
ဒီဘလော့လေးကိုဖတ်လိုက်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းများအနေနဲ့ စာရေးသူနှင့် အမြင်တူသူ/အမြင်မတူသူ ဆိုပြီးကွဲပြားလာကြတာတွေ့ပါတယ်... စာရေးသူဟာ သူနဲ့ သူ့သားငယ်ကြားက ဆက်ဆံရေးကို အခြေပြုတင်ပြခြင်းဖြစ်သလို စာဖတ်ပြီး ဝေဖန်သူတွေဟာလည်း မိမိနဲ့ မိမိဝန်းကျင်မှ အခြေအနေများကို အခြေခံပြီးတော့ ပြန်လည်ဝေဖန်ဆွေးနွေးကြတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်... ဒါ့ကြောင့် ဤ ဘလော့လေးကို အမြင်တူသူဖြစ်စေ အမြင်မတူသူဖြစ်စေ ကလေးငယ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ယဉ်ကျေးမှု လွှမ်းမိုးမှု စတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နိုင်ငံတကာက ပြုစုထားတဲ့ စာအုပ်စာတမ်းများကို ဖတ်ရှူ့စေလိုပါတယ်... မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များအတွက် လေ့လာသုတေသနပြုမှု ရှိမရှိ မသိရသော်လည်း နိုင်ငံတကာမှာ အဆိုပါကိစ္စရပ်များအတွက် စာအုပ်စာတမ်းအမြောက်အများရှိတာကို လေ့လာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်... သူငယ်ချင်းတို့အတွက် ကျနော့ရဲ့ ရှာဖွေမိသမျှ စာအုပ်စာတမ်းတချို့ကို သူငယ်ချင်းတို့ကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်... နုနယ်တဲ့ ကလေးငယ်များနှင့်ဆက်ဆံရာမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အမူအကျင့်နဲ့ သင်ကြားပေးမှုကြောင့် မည်သို့မည်ပုံ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပုံကို စံနစ်တကျလေ့လာတင်ပြထားတဲ့ စာအုပ်စာတမ်းများဖြစ်ပြီး စိတ်ချရလောက်တဲ့ source များမှ research များဖြစ်ပြီး ရေးသားထားသူ လေ့လာတင်ပြထားသူများမှာလည်း သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင် ကျွမ်းကျင်မှုရှိသောကြောင့် အထက်ပါ ဘလော့အပေါ်မှာ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့အမြင်များကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်...
For Your Information >>
CULTURAL PROCESSES IN CHILD DEVELOPMENT - ဒီနေရာမှာ < http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=99101738>
REPORT> The influence of culture on early child development ဒီနေရာမှာ < http://usflibraries.typepad.com/fmhiloop/2009/01/report-the-influence-of-culture-on-early-child-development.html >
Cultural Influence on Child Development - ဒီနေရာမှာ < http://ctf4kids.org/2009/01/cultural-influence-on-child-development/ >
February 18, 2011 at 9:42 PM Reply
အပေါ်မှာ စင်္ကာပူမြန်မာ Link နဲ့ ထည့်ထားတဲ့ မှတ်ချက်အားလုံးက ကျွန်မကိုယ်တိုင် အဲဒီက ကူးလာပြီး ထည့်ထားတာ ဖြစ်တယ်။ Traffic live က Link တခုထဲကို လိုက်သွားတော့ စင်္ကာပူရောက် မြန်မာများ စာမျက်နှာကို တွေ့ရပြီး ကျွန်မပို့စ်ကို Facebook မှာတွေ့လို့ ဆိုပြီး ပြန်ဖေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ မှတ်ချက် သုံးဆယ်ကျော်ကိုတွေ့ရပြီး အခုကူးလာတဲ့ လေးငါးခုကလွဲရင် ကျန်တဲ့မှတ်ချက်တွေက ကျွန်မပို့စ်ကို ထေက်ခံထားတဲ့ ဘက်ကရေးထားတာတွေ့လို့ ဘာမှ ပြန်ရှင်းပြစရာ မလိုတဲ့အတွက် ထားလိုက်ပါတယ်။ လုံးဝ (သို့) တစိတ်တဒေသ ဆန့်ကျင်ဘက် အမြင်အနေနဲ့ ပေးထားတဲ့ မှတ်ချက်တွေကိုတော့ ဘလော့ဂ်မှ စာဖတ်သူမျာလည်း လေ့လာနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ကူးယူလာခြင်း ဖြစ်တယ်။
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ကျွန်မဟာ မြန်မာလူမျိုးတွေကို အထင်သေးပြီး နိုင်ငံခြားမှာ ဘ၀မေ့နေသူလို့ ထင်ပြီး မှတ်ချက်ပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ကျွန်မအပါအ၀င် တချို့ မြန်မာလူကြီးတွေရဲ့ အပြုအမူမှာ လူမျိုး၊ ဘာသာ အသားအရောင် လိင် ခွဲခြားမှုနဲ့ ဒေါသထွက်လွယ်ပြီး ကလေးရှေ့မှာ ပေါက်ကွဲမှုတွေ ရှိနေတတ်တာတွေဟာ လူကြီးတွေကို ကလေးတွေက အထင်သေးစေပြီး ကလေးတွေနဲ့ လူကြီးတွေကြားမှာ ကွဲလွဲနေတဲ့အချက်တွေ ကို ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်အောင် ထောက်ပြခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်း ကျွန်မသားနဲ့ စကားပြောရမှ ကျွန်မတို့ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို သတိထားမိတာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အားနည်းချက်ကို ထောက်ပြတယ် ဆိုမှတော့ အားသာချက်တွေက ဒီပို့စ်ထဲမှာ မပါနိုင်ပါဘူး။ ဒီအားနည်းချက်ကို အားနည်းချက်အဖြစ် အမှန်အတိုင်း လက်ခံဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ကလေးတွေကို ကျွန်မတို့ ဘာသာစကား ယဉ်ကျေးမှု ထိန်းသိမ်းစေချင်ရင် ကျွန်မတို့ ကလေးတွေနဲ့ အပြန်အလှန် နားလည်မှု ရှိဖို့ တကယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင် မကြုံဖူးရင် ဒီလိုအခက်အခဲမျိုးကို လုံးဝ ခံစားနားလည်ပေးလို့ မတတ်တာတွေ၊ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ နိုင်ငံမှာ ကြီးတဲ့ မြန်မာကလေး ရာခိုင်နှုန်းအများစု မြန်မာစကားမပြောတဲ့ ပြဿနာကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒါကို အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြီးတဲ့ကလေးတွေရဲ့ မိဘတွေ ကောင်းကောင်း သိပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့ လူကြီးတွေကြားမှာ ကွာဟနေတာကို ပြန်လည်ဆန်းစစ် ၀ိုင်းဝန်း အဖြေရှာစေချင်လို့ တင်ပြထားတဲ့ပို့စ် ဖြစ်ပါတယ်။ စင်္ကာပူ မြန်မာစာမျက်နှာမှ ကူးလာတဲ့ မှတ်ချက် တခုချင်းစီကို နောက်မှ ပို့စ်တခုလုပ်ပြီး အကြောင်းပြန်ဖုိ့ လိုရင် အကြောင်းပြန်မယ်လို့ ကျွန်မစဉ်းစားထားပါတယ်။ ကျွန်မပို့စ်ကို ပြန်ဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုရော မိမိအမြင်ကို မြင်တဲ့အတိုင်း မှတ်ချက် ပေးသွားသူတွေကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
February 19, 2011 at 1:43 PM Reply
/ˈstupɪd, ˈstyu‐/ Show Spelled [stoo-pid, styoo‐] Show IPA adjective, -er, -est, noun
Slang . excellent; terrific.
"Shut up" isaslang phrase withameaning similar to "be quiet"',
February 19, 2011 at 6:14 PM Reply
ဒီခလေး ဒီလိုမြင်တာ ဒီစကားတွေပြောတာ မိဘ အနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမှားအရင်မြင်ပြီး ပြင်ကြည့်လိုက်ပါ
သူနေထိုင်ကြီးပြင်းနေရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် က ဘယ်လိုဆိုတာထင်ဟပ်ပြီး ဒီစကားတွေထွက်လာတာပါ
တစ်ခွန်းထဲပြောရရင် လက်ဦးဆရာ မည်ထိုက်စွာ မပီသတဲ့ မိဘတွေ ကိုပဲ စိတ်ပျက်မိပါတယ်
ကိုယ်ငယ်ငယ်က သိပ်မပြည့်မစုံကြီးပြင်းခဲ့ရပုံရတော့ သားရဲ့ပတ်ဝန်းကျင် ပြောစကားစတာတွေကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က တရားလွန်အထင်ကြီးနေပုံလဲရပါတယ် ခက်ပါ့
ပညာသားပါပါ ကိုင်တွယ်ရမယ် ဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်ပါ
သူများတွေက လူယဉ်ကျေးပီသအောင် ချီးမွမ်းသလိုနဲ့ထောက်ပြနေတာတွေကိုလဲ မြင်ပုံမပေါ်..
ခင်ဗျား အမေ တစ်ယောက်တာဝန်ကျေအောင် ထင်ဗျားကိုယ်တိုင်ရဲ့အမြင်ကို စ ပြောင်းပါ..ဗမာဆိုတာ ဘယ်လိုဆိုတာ အရင်သိအောင်ကြိုးစားပါ။ လေ့လာပါ။
message အမှားတေ အထင်အမှားတေ မပေးမိအောင်သတိထားပါ ခင်ဗျားသားတင်မက တခြားမြန်မာလူငယ်တွေရှေ့မှာ ..
February 19, 2011 at 6:48 PM Reply
မြန်မာဟာမြန်မာပါပဲ...မြန်မာမိဘနှစ်ဦးစလုံးက ပေါက် ဖွားလာတဲ့ကလေးတစ်ယောက်က မြန်မာစကားမပြော တတ်ဘူး(သို့ )မပြောချင်ဘူးဆိုတာကတော့ နည်းနည်း များလွန်မလားပဲ...အဲဒီကလေးကရော ဗမာမဟုတ်ဘူး လား ... အနီးကပ်အုပ်ထိန်းသူဖြစ်တဲ့အမေကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်သားအဲဒီလိုအမြင်တွေဖြစ်နေတာကို ပြောင်းပေးဖို့ တာဝန်မရှိဘူးလား ...မြန်မာတွေပြောနေကြတဲ့စကား ပုံလေးတစ်ခုရှိပါတယ်...(သားသမီးမကောင်း မိဘခေါင်း)တဲ့ ...ကလေးက ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်စကားကို အကောင်းမထင်တာက ကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တော့မဟုတ်ဘူး ... အဲဒီလိုဖြစ်နေတာကိုပြင်ပေးဖို့ အတွက်မိဘမှာ တာဝန်အပြည့်ရှိတာပေါ့...မပြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ အဲဒီမိဘကိုယ်တိုင် မြန်မာမပီသသလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
(ကလေးက ငယ်ပါသေးတယ်... ပြန်ပြင်ပေးဖို့ အချိန်အများကြီးရှိပါသေးတယ်... ပြန်ပြင်ပေးလိုက်ပါလို့ အကြံပြုပါရစေ)
February 19, 2011 at 8:08 PM Reply
Comment by ko aung 1 hour ago
Please let me discuss about this article.Partially idea of this article is correct and the rest are not right. So can happen the people to accept it. Slowly can change from unacceptable things to acceptable. Very dangerous Article.Everyone have to carefully think about this article.I have found main facts from this article is as follow;
1.English speaking kids from overseas are more smarter than adults bec of their education system.( bec she ( parent ) found out that she should follow her kid idea and thought )
2.Kids have open mindset to communicate with others and their thought are more reasonable than our old burmese adults. ( bec Burmese adults bully everyones but kids have no such things at all )
3.The kids less speaking burmese language is not really big issue and let them decide " want or dont want ".
4.Most of Burmese adults are funny, no open mindset and bully others.
For my personel point of view, all of above facts are unacceptable.
February 19, 2011 at 8:59 PM Reply
အထက်ပါ မှတ်ချက် သုံးခုအနက် ko aung မှတ်ချက်တခုက စင်္ကာပူမြန်မာ ဆိုက်က ကျွန်မ ကူးယူလာပြီး ထည့်ထားတာ ဖြစ်တယ်။ သုံးယောက်စလုံးကို ကျွန်မ အကြံပြုချက်တာက ပို့စ်ရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို သဘောပေါက်အောင် တခေါက်ပြန်ဖတ်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
* Anonymous (February 19, 2011 6:14 PM) - ကျွန်မရေးထားတဲ့ပို့စ်ကို အဆင့်အတန်းရှိရှိ ရေးထားပါတယ်။ အဆင့်အတန်းမရှိ ရေးလာတဲ့ မှတ်ချက်တွေကို ကျွန်မ ခေါင်းထဲကို မထည့်တတ်သလို တော်ရုံနဲ့လည်း ပြန်ဆွေးနွေးလေ့ မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် အဆင့်အတန်းရှိရှိ မှတ်ချက်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
* ဇော်ဇော် စိုးရိမ်မှုနဲ့ အကြံပြုမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဇော်ဇော်ထင်သလို (((ကလေးက ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်စကားကို အကောင်းမထင်တာက မကောင်းဘူး))) ဆိုတာ မဟုတ်ဘူး။ သူဘာကြောင့် မြန်မာလို မပြောဖြစ်လဲဆိုတာ ကျွန်မသားကိုယ်တိုင် ရေးထားတဲ့မှတ်ချက် Mg Toee Nanda (မောင်တိုးနန္ဒ) နာမည်နဲ့ အပေါ်မှာ ရှိပါတယ် ပြန်ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်။ မိဘကလည်း ဖိဖိစီးစီး အချိန်ပေးနိုင်မှ ကလေးကလည်း လိုလိုလားလား ရှိမှဖြစ်တယ်လို့ ပို့စ်ထဲမှာလည်း ကျွန်မ ပြောထားပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရောက် ကလေးတွေ မြန်မာလို မပြောတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မ ခေါင်းထဲမှာ အတွေးအမြဲ ရှိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ လေးငါးနှစ် ကာလအတွင်း ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ကျောင်းတက်နေရပြီး ကိုယ့် Assignment နဲ့ကိုယ် အလုပ်များနေလို့ သားအတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခဲ့ဘဲ သားကို မြန်မာစာ ဖိဖိစီးစီး မသင်ပေးနိုင်ခဲ့တာနဲ့ ကြုံရပါတယ်။ အခု သားအတွက် ကျွန်မ အရင်ကထက်အချိန် ပိုပေးနိုင်နေပါပြီ။ အရင်က အတွေးသာ ရှိခဲ့ပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော့ ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့ သူများကို မထောက်ပြချင်လို့ ဒီအကြောင်း ဘလော့ဂ်မှာ မရေးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ အခု ကျွန်မကိုယ်တိုင် ကျွန်မသားအတွက် အချိန် ပိုပေးလာနိုင်တဲ့ ချိန်မှာ တခြား မြန်မာ မိဘတွေကိုလည်း တပ်လှန့်ပြီး ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တို့ကိုလည်း ထောက်ပြရင်း ဒီပို့စ်ကို တင်ဖြစ်ပါတယ်။ သားမြန်မာလို မပြောတာကလွဲရင် ကျန်တဲ့ ကျွန်မအပါအ၀င် ဗမာလူကြီးတွေမှာ သူထောက်ပြတဲ့ အပြုအမူတွေက အားနည်းချက်တွေဆိုတာ ကျွန်မကိုယ်တိုင် လက်ခံပါတယ်။ ဒါကို ပြချင်လို့ ပို့စ်စရေးချိန်မှာ မပါတဲ့ သူနဲ့ ကျွန်မ စကားပြောထားတာတွေကို နောက်မှ ထပ်ဖြည့်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ ကိုယ့်အားနည်းချက်ကို ကလေးပဲထောက်ပြ ထောက်ပြ လူကြီးပဲ ထောက်ပြထောက်ပြ မှန်နေရင် လက်ခံရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဇော်ဇော်ရဲ့ စေတနာနဲ့ အကြံပြုမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
* ko aung - You don't get my point because all of your above mentioned points as main fact in the article are wrong. Please try to read article again.
February 20, 2011 at 3:02 AM Reply
Comment by aye kyaw on February 14, 2011 at 9:42pm စာေ၇းသူကိုတခုမေးချင်ပါတယ် ..သားပြောတဲ့စကားတွေဟာ ..မြန်မာတွေ၇ဲ့ စရိုက်ကိုစိတ်နဲ့ မတွေ့ ဖြစ်နေ..နိုင်ငံခြားယောက်နေတဲ့ ..မြန်မာတချို့စိတ်များလားလို့ ပါ...ဘာလို့ လဲဆို၇င်..ခုအချိန်မှာနိုင်ခြားေ၇ာက်နေတဲ့ မြန်မာ မိသားစုတွေဟာ အတော်များလာပါပြီ ..စာေ၇းသူပြောသလို သာ.နိုင်ငံခြားေ၇ာက်မြန်မာကလေးတွေ မြန်မာလိုမပြောချင်တဲ့အချက်ဟာ..အထက်ကစာေ၇းသူပြောသလိုဆို၇င် နောက်ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုလောက်ဆို၇င်..နိုင်ခံခြားကမြန်မာစာမသိ မြန်မာစကားမပြောတတ်တဲ့ မြန်မာ မိဘ စစ်စစ်ကမွေးထားတဲ့ မြန်တွေဖြစ်လာကြ တော့မှာပေါ့ နော်...လူကြီးချင်း..နောက်ပြောင်ကြတာကြောင့်..လူကြီးက ကလေး စကားမပီတာကို၇ီ လို့ ဥပြစ် ခါပြုပြစ် ၇လောက်တဲ့ အထိ ကျွန်တော်တို့ စာ ကျွန်တော်တို့ စကား ဟာ အောက်တန်းမကျပါဘူး..စာေ၇းသူ မိဘတွေဟာလဲ ဒီစာကိုသင် ဒီစကားကိုပြောပြီး စာေ၇းသူကို ကြီးပြင်းစေခဲ့မယ်လို့ ထင်ပါ တယ်..ကျွန်တော်တို့ စကားမှာ ..၇ိုသေမူ့ ကိုပြတဲ..ဖေဖေ သမီးလေ..မေမေသာဒလေ..ဦးဦးကျွန်လေ..ဒေါ်ဒေါ်ကျွန်မလေ..စတဲ့ ယဉ်ကျေးတဲ့..အသုံး နှုံးတွေမ၇တဲ့...အဖေလဲ အိုင်(i) ..အမေလဲ.အိုင်(.i.)အသက်အ၇ွယ်မေ၇ွး အိုင် တလုံးပြီးတဲ့ အဂ်လိပ်စကားဟာ နိုင်ငံတကာသုံးမို့ တကယ်ကောင်းကောင်း တပ်သင်ပြေ မဲ့ မြန်မာ မိဘနှစ်ပါးကမွေးတဲ့ မြန်မာစစ်စစ် ကလေးတွေ အတွက်တော့ဘယ်နိုင်ငံေ၇ာက်ေ၇ာက်...အသက်အ၇ွယ်အလိုက် ..တော်စပ်ပုံအ၇ ၇ိုသေယဉ်ကျေးစွာပြောလို့ ၇တဲ့ကျွန်တော်တို့ မြန်မာစကားဟာ ..တတ်သင့်ပါတယ်ဗျာ..စာေ၇းသူတို့ လိုအများကို အသိဗဟုသုတပေးနေတဲ့ ..သူတွေဟာ..နိုင်ငံခြားေ၇ာက်နေလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဆိုပြီး မြန်မာလိုမပြောချင်တာ မြန်မာလိုမတတ်တာ မှန်တယ်လို့ ယူဆစ၇ာဖြစ်အောင်မေ၇း သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်.. ကျေှးဇူး တင်ပါ..ဒါပေမဲ့..စာေ၇းသူ၇ယ်. ကိုယ့်ကို ကို မြန်မာစစ်စစ်လို့လက်ခံ သူ တိုင်းအတွက်ကတော့ ဘယ်ပဲေ၇ာက်ေ၇ာက်..မြန်မာလိုပြောနိုင်သင့်ပါတယ်ဗျာ...
February 20, 2011 at 3:03 AM Reply
Comment by Mr Moon on February 14, 2011 at 11:11pm
February 20, 2011 at 3:04 AM Reply
Comment by တိတိ on February 15, 2011 at 9:03pm
REPORT> The influence of culture on early child development
February 20, 2011 at 3:37 AM Reply
Comment အပိုင်း (၁)
မင်္ဂလာပါ မငယ်နိုင်ရေ …
ဆိုရေှးရှိက ဆိုကြရအောင်ဗျ ။ နော ။ ကျွန်တော် ဒီပို့စ်ကို Fwd မေးလ်ကနေရလို့ ဖတ်မိပါတယ် ။ စိတ်ထဲ သိပ်မကျေလည်လို့ ဆိုဒ် ကိုလိုက်ဖတ်မိတော့လည်း အောက်က ဘေးတီးပေးတဲ့ မှတ်ချက် တချို့က စိတ်မကောင်းစရာပါ ။အဆိပ်ပင်ကို ရေလောင်းနေကြတာကို လက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်တော့တာမို့ ၀င်ရေးတာပါ။ ဒီစာကို Fwd လုပ်တဲ့လူတွေကလည်း အဆိပ်ပင်မှန်း မသိပဲ မငယ်နိုင်ကပဲ နိုင်ငံခြားမှာမွေးတဲ့ ကလေး လူငယ်ထိန်းသိမ်းရေး အတွက် နည်းပေးလမ်းညွှန် ကောင်းတွေ ရေးနေတယ်လို့ ထင်ပီးဖြန့်ပုံပါပဲ ။ အခုလည်း ဒီပို့စ်မှာ အောက်ကနေ ကောင်းလှချည်ရဲ့လို့ ဖတ်သူတချို့နဲ့ ရေးသူကိုယ်တိုင် ကွန်မန့်ထဲ ပြန်အော်ထားနေတာ တွေ့ရတော့ အတော် စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ ။ နောက်ပြီး မိုးမခက (ကို) မောင်ရစ် (ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်မျိုးချစ် ရဲ့မြေး) ကလည်း ဒါကို တောင်းသွားတော့ (ဘာရည်ရွယ်ချက်လဲ အတိအကျမသိ) မငယ်နိုင်ခမျာ ငါကွ ဖြစ်နေရရှာတာပေါ့ ။
မငယ်နိုင် ရွှေရတုမှတ်တမ်း (ဘကျောက်) ဆီမှာကွန်မန့်ပေးကတည်းက အတွေးတွေပုံမှန်မဟုတ် ဘူးလို့ ကျွန်တော်က ထင်နေတာဗျ ။ကိုကြီးကျောက်က သူငယ်ငယ်က သူများတွေ မြက်စားရတယ် ဆိုတာကို ကလေးအတွေးနဲ့ တွေးထင်မိတာတွေကို ခုလူကြီးဖြစ်လာတော့ သူ filed ဆင်းတဲ့အခါ ကြုံရပုံ ရယ်စရာရေးတာကို မငယ်နိုင်က အဲဒါကိုယုံတဲ့ ကိုကျောက်ကို အတော်တုံးတာပဲ ဆိုပြီး ပြောခဲ့တာလေ ။ အဲဒီကတည်းက ကျွန်တော်က မငယ်နိုင်စကားအသုံးအနှုန်း အတော်ရိုင်း တာကို သတိထားမိတာဗျ ။
အဓိက ပြဿနာက မငယ်နိုင် ကိုယ်တိုင်ပဲဗျ ။ ကြည့်ရတာ မငယ်နိုင် လက်ရှိနေရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ဗမာတွေက သိပ်အထင်ကြီးစရာ ရှိပုံမရဘူးနော် ။ ဒါမှမဟုတ် မငယ်နိုင်ကိုယ်တိုင်ပဲ အနှိမ်ခံ ဗမာတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့လို့ (khine ဆိုတဲ့တစ်ယောက်ပြောသလို) ကလေးကို ဗန်းပြပြီး ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ် အထင်မကြီးဘူးဆိုတာကိုယ်ပြောချင်တာ ပြောနေတာလား မသိဘူး ။ အမှန်က ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်က အထင်ကြီးမခံရတဲ့ ဗမာဖြစ်နေရော့သလား။
ကိုယ်မပိုင်တဲ့ နေရာကနေ ကိုယ်မကျွမ်းကျင်တာကို ဆရာကြီးလုပ်ပီး မရေးပါနဲ့ဗျာ ။ မငယ်နိုင် ပို့စ်တချို့မှာ သားကို ထုတ်ချီးမွမ်းထားလွန်းးးးးးးတာ တွေ့ရတယ် ။ ခေတ်က တိုးတက်လို့ ကလေးတွေ တိုးတက်နေတာ မဆန်းဘူးဗျ ။ ရေဒီယိုခေတ်နဲ့ အင်တာနက်ခေတ်မတူဘူးဗျ ။ မငယ်နိုင် ငယ်ငယ်က ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘ၀နဲ့ ယှဉ်ပြီး မငယ်နိုင်သားကို ပါရမီရှင်လေးလို ထင် ။ ခုရောက်နေတဲ့နေရာကိုလဲ အတော် အဟုတ် ထင်နေပုံပဲ ။ အမှန်က ကလေးကို ဦးမဆောင်နိုင်တာက ကလေးတော်လို့ မဟုတ်ဘူးဗျ မိဘကိုယ်၌က ညံ့နေတာ ။ဒီခေတ်ကလေးတွေကို ဦးဆောင်နိုင်ဘို့ မိဘတွေ မြန်မာလူကြီးတွေကိုယ်တိုင်က ခေတ်နဲ့အညီအမီလိုက်ဘို့ ဆင်ခြင်ကြိုးစားကြဘို့ စေ့ဆော်တဲ့စာမျိုး ဆိုရင်တော့ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။ နောက်ပီး ၁၀နှစ်အောက်တွေ ကွန်ပျုတာ ပရိုဂရမ် ရေးနေကြတဲ့ ဒီခေတ်မှာ မငယ်နိုင်သားက ခုခေတ် ကလေးတွေထဲမှာဆို အသွက်လေးလို့ ပြောလို့ရတာပဲ ရှိပါတယ် ။ တော်လွန်းနေတဲ့ ကလေးမဟုတ်ပါဘူး ။ ဒီအရွယ် ကလေးက ပြောသမျှကို ငါမှားတယ် ဆိုပြီး နောင်တရနေရ တာ တော့ ….အင်း… သနားမိပါသေးတယ်ဗျာ ။ ကလေးတွေ ဗမာစကားမပီကလာ ပြောနေတာကို ဗမာလူကြီးတွေက ရီကြတယ် ဆိုရာမှာ .ကျွန်တော့် အမြင်တော့ ချစ်စနိုး ရီကြတယ် ဆိုတာပဲ…။ ဒါကို ကလေးလုပ်တဲ့သူက ဟားးးး တယ်လို့ ထင်နေတာကို ချစ်စနိုးကျီစယ်တတ်လေ့ရှိတဲ့ မြန်မာ့ဓလေ့ကို မရှင်းပြတတ်တာ အံ့သြမိပါတယ် ။ မြန်မာ့သင်္ကြန်လို ကျီစယ်ကြတဲ့အခါတွေ ကျီးမနိုးပွဲလိုဓလေ့တွေဟာ ရိုင်းနေရှာရော့မယ် ။
February 20, 2011 at 3:39 AM Reply
Comment အပိုင်း (၂)
ဗမာတွေက အရမ်းယဉ်ကျေးပါတယ် ၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မေတ္တာရှေ့ထားပြီး ဆက်ဆံတတ်ပါတယ် ။ သည်းခံစိတ် ၊ ရောင့်ရဲစိတ် သိပ်ရှိပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် ဗမာတွေ စတဲ့နောက်တဲ့ စကားတချို့ကို မေတ္တာခံမထားတဲ့ သည်းခံစိတ်မရှိတဲ့ လူမျိုးတွေအတွက် ရိုင်းနေတတ်ပါတယ် ။ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲရှိလွန်းလို့ သာ စတာ နောက်တာပါဗျာ ။ မငယ်နိုင်က ကလေးကို လွှတ်အထင်ကြီးတော့ ကလေးလုပ်သမျှ ပြောသမျှ မှန်တယ်ထင်နေတာ ။ ခက်တာက မငယ်နိုင်ကိုယ်တိုင်လည်း ကလေးပြောတာတွေ မသိတော့ ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်နေမပေါ့ ။ ဗမာတွေ မှမဟုတ်ပါဘူး ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတိုင်းမှာ နိုင်ငံတိုင်းက Migrant ပေါင်းစုံရှိပါတယ် ။
တရုတ် ၊ ကုလား ၊ ကိုရီးယား ၊ ဂျပန် အစုံဗျာ ဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက် ဘယ်နိုင်ငံမှာ မွေးမွေး ကိုယ့်မိခင်ဘာသာစကားတတ်တယ်။ တတ်အောင် train ကြတယ်ဗျ။ ကိုယ်စီ အသိစိတ်ဓါတ်ရှိကြရင် ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဗျာ ။ အခု မငယ်နိုင့်ကလေး ဗမာစကား မတတ်တာ မပြောချင်တာ မိဘညံ့လို့ ။ အဝေးကြီးမပြောဘူးဗျာ ။လတ်တလောဥပမာ တစ်ခုပေးမယ်။ ဘာသာစကားမပြောနဲ့ ဘာသာရေးတောင် ရအောင်လုပ်တာ ။ ဘယ်သူလဲ ။ အမေစုဗျား ။ ကြည့်ပါဗျ ။ အရွယ်ရောက်နေတဲ့ သား (ကိုထိန်လင်း) ကို ဆယ်စုနှစ်ချီပြီး ခွဲထားရတာတောင် မြန်မာပြည်လာတဲ့ခဏ ပုဆိုးစည်းပြီး ဘုရားတက်တာ မြင်မယ်ထင်တယ်ဗျာ ။ ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မလိုဘူးဗျ ။ ဒါတောင် ခင်ပွန်းမစ္စတာမိုက်ကယ်က လူမျိုးခြားဗျာ ။ မငယ်နိုင်က သားလုပ်သူကို အမေစုလောက် (မနှိုင်းချင်ပေမယ့်) ကြိုးစားရပါ့မလား ။ ဟိုမှာ ဘာသာရေးရော အ၀တ်အစားပါ သင်ထားတာဗျား ။ သူ့သားနှစ်ယောက်လုံး သင်္ကန်းစည်းခဲ့တယ် ။ နောက်ပြီး အမေစုကိုကော ဒေါ်ခင်ကြည် ဘယ်လိုထိန်းခဲ့သလဲ ။
ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် အမေစုနဲ့ ဦးသန့် နာမည်ပြောလိုက်တာနဲ့ ဗမာဆိုတာ ဘာ ဆိုတာ သိကြပါတယ် .. ။ ဗမာမညံ့ဘူးဆိုတာ ပြောလို့ရယ် မကုန်ပါဘူးဗျာ ။ တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ လမ်းဘေးအလုပ်သမားကို ကြည့်ပြီးတော့ ဘယ် လူမျိုးခြားကမှ အထင်ကြီးမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုယ့်လူမျိုးကို ထိခိုက်မဲ့အနေအပြောမျိုးကို ဆင်ခြင်ကြရမှာပေါ့ဗျာ။ မငယ်နိုင် ပတ်ဝန်းကျင်မှာရော ဂုဏ်ယူလောက်စရာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဗမာမရှိဘူးလားဗျ ။ ကိုယ့်ဗမာမို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး ။ လူမျိုးတိုင်း နိုင်ငံတိုင်း ဂုဏ်ယူစရာ ရှိကြပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဗမာဆိုတာက သာမန်ဂုဏ်ယူရတဲ့ နိုင်ငံအဆင့်ထဲမှာ မပါပါဘူးဗျာ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗမာမိဘနှစ်ပါး က မွေးတဲ့ ဗမာကလေးက ဗမာလူမျိုးကို အထင်သေးစကားပြောတာကို လက်ခံတာ ၊ကြေလည်အောင် မရှင်းပြ မသင်ပြနိုင်တာ ၊ ဂုဏ်ယူတတ်အောင် မသင်ပေးနိုင်တာက မငယ်နိုင်ကိုယ်တိုင် ဗမာကို အထင်သေးနေလို့ဆိုတာပါပဲ ။
ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းတာတွေ ၊ ဘုရားနဲ့ တစ်ဂိုဏ်းတည်းဆိုပြီး ဆရာတွေအပေါ် ရိုသေတာ ၊ ဆရာကန်တော့ပွဲလုပ်တာ နဲ့တင် နိုင်ငံစုံ လူမျိုးစုံတက်နေကြတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေမှာ ဗမာဆိုပြီး လေးစားခံနေရတာ ဒီလောက် ယဉ်ကျေးတာရှိဦးမလားဗျ ။ အဖြူတွေလုပ်တဲ့ မျက်နှာဖုံးစွပ် ယဉ်ကျေးမှုမျိုးမှ ယဉ်ကျေးတယ် ခေါ်သလားတော့ မသိပါဘူးဗျာ ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထေရ၀ါဒ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ (အဲလိုပဲပြောလိုက်တော့မယ်) နိုင်ငံဗျာ ။ ကမ္ဘာ့မှတ်ဥာဏ် အကောင်းဆုံး မှတ်တမ်းဝင် ဆရာတော်ကြီး ရှိတဲ့ တိုင်းပြည် လူမျိုး ။ ၁၉၈၈ မတိုင်ခင် ဗမာပြည်ရောက်ဖူးတဲ့ လူမျိုးခြားတိုင်း ဗမာပြည်ကို တခုတ်တရ ချစ်ကြောင်းထုတ်ပြောကြတယ် ။တသသဖြစ်ကျန်နေရတဲ့ ချစ်စရာလူမျိုးပါဗျ။
February 20, 2011 at 3:40 AM Reply
Comment အပိုင်း (၃) နိဂုံး
နောက်ဆုံးပိတ်ပြောချင်တာက အရမ်းယဉ်ကျေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ယဉ်ကျေးမှု ကျွန်တော်တို့စာပေမှာ သားသမီးကို ဘယ်မိဘကမှ နင်လို့မသုံးပါဘူး ။ ကျွန်တော်တို့မှာဝေါဟာရ သိပ်ကြွယ်ပါတယ်ဗျာ ။ စကားလုံးလည်း မကြွယ် ၊ သမိုင်းလည်း မသိ ၊ ယဉ်ကျေးမှုလည်း နည်း ၊ စာပေဗဟုသုတလည်းနည်း တဲ့အမေက သားလုပ်သူပြောတာ ပြန်နားထောင်နေရတာ မဆန်းပါဘူး ။ သူများတွေလိုတော့ အမုန်း မခံရဲလို့ လေပြေ ကလေးနဲ့ မပြောနိုင်ဘူးဗျ ။ ဒါက အဆိပ်ပင်ကိုး ။ ဘလော့ဂ် မှာဆိုပြီး အဆိပ်တွေ မရေးပါနဲ့ ။ ထောက်ခံတဲ့လူကိုပဲ ပြုံးပြပြီး ထောက်ပြတဲ့သူကိုတော့ အပေါ်ယံ မတုံ့ပြန်ပါနဲ့ဗျာ ။ အမှန်က မငယ်နိုင်စာကို သေချာမဖတ်တဲ့လူက ကောင်းတယ်ပြောသွားတာဗျ ။ သေချာဖတ်တဲ့လူတိုင်းက အရမ်းစိတ်ထိခိုက်ရတယ် ဗျ ။ ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ် ဒါလောက်မှ ဂုဏ်မယူတတ်တဲ့လူတွေရှိနေတာ စိတ်မကောင်းစရာပဲ
ဇာတိသွေး ဇာတိမာန်ကို မငယ်နိုင်ကိုယ်တိုင် လေးလေးနက်နက်ထားပါ ။ ဆရာမ ဂျူးရေးတဲ့ စာရေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာ ရှာဖတ်ပါဗျာ ။ စာရေးဆရာမှ မဟုတ်ပါဘူး ဘလော့ဂါလည်း ကိုယ့်စာမှာ ကိုယ် တာဝန်ရှိပါတယ် ။ ၂၀၀၉ က စင်္ကာပူစာပေဟောပြောပွဲက ဆရာနေ၀င်းမြင့် ဟောခဲ့တာလေးကို ကိုယ်တိုင်လည်း နားထောင်ပြီး ကလေးကိုလည်း ရှင်းပြပါ ။ လူဆိုတာတော့ မှားတတ်ပါတယ် ။ ကိုယ်ညံ့လို့ ကိုယ့်ကလေးတော့ မညံ့စေနဲ့ပေါ့ဗျာ ။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဟုတ်လှပီထင်နေရင်တော့ ဆရာဖေ တေးထပ်လေးပဲ ညည်းနေချင်တော့တယ်ဗျာ ..
မြန်မာတွေ စည်းကမ်းဖောက်လို့ 
ကုလားမြင် သူ့ အမေရိုးတော့မလို
မိုက်မနော် ပြုမဟေးရယ်နဲ့ 
သူ့ ပထွေးတော့ ထွက်၍မဟောင်။
စာဇင်တောင် ဦးချလို့ 
ပလူးကြ ပြေးကြို့ ခါခါ
February 20, 2011 at 9:59 AM Reply
မစ္စတာ ဖိုးသစ် (ကိုဖိုးသစ်) - မှတ်ချက်တွေ အရှည်ကြီး သုံးခုတောင် လာရေးပြီး ထောက်ပြပေးသွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မိုးမခက အယ်ဒီတာက ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ရဲ့မြေးဆိုတာ ရှင်ပြောမှ သိရတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမြင်မတူတာကို တင်ပြတာကို ကြိုဆိုပေမဲ့ ရှင်ပြောတဲ့ အကြောင်းအရာတွေအရ ကျွန်မပို့စ်ကို နားမလည်ဘူးဆိုတာ သိသာနေပါတယ်။ တင်ပြထားတာကလည်း ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး မဟုတ် ပုဆိန်ပေါက်၊ ပေါက်တူးပေါက် ဖြစ်နေတော့ ထောက်ပြတဲ့ အချက်တွေက မှန်နေရင်တောင်မှ တဘက်သားကို လက်ခံနိုင်အောင် ပြောတတ်တဲ့ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှု မရှိတဲ့အတွက် အဲဒါလည်း မြန်မာလူမျိုး အတော်များများရဲ့ အားနည်းချက်ထဲမှာ ပါတဲ့ အချက်တခုအဖြစ် ပြန်ထောက်ပြပါရစေ။
အပေါ်မှာ Mr moon နဲ့ aye kyaw နဲ့ မှတ်ချက်နှစ်ခုလည်း ကိုဖိုးသစ်ပဲ လာထည့်ထားတယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒီတော့ ကိုဖိုးသစ်က ပို့စ်ကို သေသေချာချာ မဖတ်ခဲ့သလို ကျွန်မက စာဖတ်သူတွေကို ပြန်တုံ့ပြန်ထားတဲ့ မှတ်ချက်တွေကိုလည်း မဖတ်ခဲ့တာ သေချာတယ်။ အဲဒီမှတ်ချက်နှစ်ခုက ရှင်လာမထည့်ခင်က စင်္ကာပူမြန်မာဆိုက်က ကျွန်မပြန်ကူးလာတဲ့အထဲမှာ ပါထားပြီးသား အပေါ်မှာ ပြန်ကြည့်ပါ။ ဒီတော့ ကိုဖိုးသစ်က တဘက်ရဲ့ ပြန်ရှင်းပြမှုကို နားလည်အောင် မကြိုးစားဘဲ တဘက်သတ် မိမိပြောချင်တာကို ပြောဖို့ပဲ သိတယ်ဆိုတာ သက်သေပြနေပါတယ်။
ကျွန်မ ပို့စ်က အဆိပ်ဖြစ်နေတယ် ထင်လို့ အမြင်မတော်လို့ စေတနာနဲ့ ၀င်ရေးတယ် ဆိုရင် ဒီလို ရန်လိုတဲ့လေသံနဲ့ ရေးလို့ တဘက်သားကို ဘယ်တော့မှ နားဝင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ နောက်ထပ် စာရေးရင် ဆင်ခြင်လို့ရအောင် ကျွန်မ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ ရှင်ကသာ ကျွန်မပို့စ်ကို အဆိပ်လို့ ပြောတယ်၊ ထားလိုက်တော့ ဒါက ရှင်စာကို သေသေချာချာမဖတ်လို့ ထင်နေတဲ့ ရှင့်အထင်ကိုး။ ((((ဘေးတီးပေးတဲ့ မှတ်ချက် တချို့က စိတ်မကောင်းစရာပါ))) လို့ ဒီပို့စ်ကို ထောက်ခံသူတွေကို ပြောထားတယ်။ တချို့မဟုတ်ဘူး အများစုပါ။ အခုဒီမှာ မှတ်ချက် ၈၀ ကျော်ထဲမှာ နားလည်မှု လွဲနေတာက ရှင့်မှတ်ချက် အပါအ၀င် ၁၀ ခုမပြည့်ဘူး စင်္ကာပူမြန်မာမှာ ပြန်ဖေါ်ပြထားတဲ့ နေရာမှာလည်း မှတ်ချက် သုံးဆယ်ကျော်မှာ သဘောမတူတဲ့ မှတ်ချက်က အခုဒီမှာ ကူးယူပြီး ထည့်ထားတဲ့ Mr Moon, aye kyaw, khaine, ko aung တို့ရဲ့ မှတ်ချက် ၅ ခုပဲ ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ ရှင်က ကျွန်မကိုသာမက အများစုကြီးကိုပါ စော်ကားသလို ဖြစ်နေတယ်။ အများစုကြီး ဘာကြောင့် ဒီပို့စ်ကို ထောက်ခံဆတယ် ဆိုတာ ပြန်လေ့လာပါ။ ကျွန်မ အနေနဲ့ စာဖတ်သူ အကုန်လုံး နားလည်အောင် မရေးနိုင်တာကလည်း ကျွန်မက စာရေးဆရာတယောက် မဟုတ်၊ ကျွန်မဘ၀ ဖြတ်သန်းမှုကိုသာ မျှဝေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး စာမျက်နှာသာ ဖြစ်လို့ အားနည်းချက်တွေ အများကြီး ရှိနေမှာ ဖြစ်တယ်။ အားနည်းချက်ကို ထောက်ပြတဲ့သူတိုင်းကို ကြိုဆိုပေမဲ့ ရှင်တို့လေသံက အားနည်းချက်ကို ထောက်ပြတဲ့ လေသံမဟုတ် မိမိစိတ်ထွက်ပေါက်အဖြစ် တဘက်သတ် ပုဆိန်ပေါက်၊ ပေါက်တူးပေါက် စော်ကားရေးသားတာသာ ဖြစ်လို့ ကျွန်မနားထဲ မ၀င်ဘူး။ အများစုကြီးက ဒီပို့စ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို သိတယ် အနည်းစုက လက်မခံဘူးဆိုတတော့ ရှင်တို့ရဲ့ အမြင်ကို အနည်းစု ဆိုပြီး လစ်လျူမရှုဘူး အသိအမှတ်တော့ ပြုပါတယ်။ ပို့စ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို နားလည်အောင် ပြန်ဖတ်ဖို့တော့ တိုက်တွန်းတယ်။ ရှင်ထောက်ပြတဲ့ ကောင်းကွက်ဆိုတာတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပတ်သက်တာပဲ ရှိတယ်။ ကျွန်မပို့စ်ထဲမှာ မြန်မာတွေမှာ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်တာကို ကျွန်မသား အတုယူတယ်လို့ ပြောတာပါတယ်။ သူတို့ကျောင်းမှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း ဘာသာရေး အတန်းရှိသလို အိမ်မှာလည်း အမြဲပြောပြနေလို့ ဘာသာရေးဗဟုသုတ မနည်းဘူး။ အခု ဒီပို့စ်မှာ လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ အမူအကျင့်တချို့ကိုပဲ ပြောထားပါတယ်။ ကျွန်မသားကလည်း ဗမာလို မပြောဖြစ်တာ လည်း ရှင်ထင်သလို မဟုတ်ဘူး ဘာကြောင့်ဆိုတာ အပေါ်မှာ မောင်တိုးနန္ဒ အမည်နဲ့ မှတ်ချက်တခု ရှိတယ် ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။ နောက်အချိန်ရမှ ရှင့်မှတ်ချက်မှာ လွဲနေတာတချို့ကို ပြန်ထောက်ပြဖို့ ဆက်ဦးမယ်။ အခုတော့ မအားသေးဘူး။
February 20, 2011 at 6:11 PM Reply
ကျွန်တော့်မှာလဲ အချိန်တိုင်းဟာ တန်ဘိုးရှိနေတာပါ.. နဲနဲ မှအချိန်မပိုပါဘူး..
မငယ်နိုင်မှာ open mind set ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်၊ မှန်တဲ့ဘက်ကို မြင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်
ခုက ကျွန်တော်ဟာ message အမှားပေးနေတာ ကို လက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင် မနေသင့်လို့ ၀င်ပြောတာပါ ko Aung ပြောသလို unacceptable ကို acceptable ဖြစ်သယောင် ယောင် ထောက်ခံနေကြသယောင်ယောင် ထင်နေကြရင် မှားတော့မှာမို့ပါ။ သေချာစစ်တမ်းကောက်ထားတဲ့ result မဟုတ်လို့ ခင်ဗျား ကွန်မန့်တွေတင်ကြည့်ယုံနဲ့ လူတိုင်းထောက်ခံနေတာထင်နေရင်တော့ လွဲနေပြီ။ ပြီး ဒီအမြင်တွေအပြောတွေဟာလည်း မငယ်နိုင်တစ်ဦးတည်းနဲ့ မငယ်နိုင်သားငယ်တစ်ဦးတည်းရဲ့ အတွေး အမြင် အယူအဆတွေကို သာ ထင်ဟပ်တာပါ ပြည်ပရောက် ကလေးအများစု နဲ့ မိဘတွေသဘောထားကို ထင်ဟပ်တယ်လို့ တလွဲကောက်ချက်မဆွဲကြစေလိုပါ။ အင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။
နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေကျောင်းတွေ လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ seminar တွေ workshop တွေ presentation တွေမှာ comment ပေးတဲ့ အခါ ဘယ်လိုပေးလေ့ရှိသလဲဆိုတာ တချက်လောက်ပြောပြမယ်၊ ဆွေးနွေးသူရဲ့ စကားထဲမှာ ကောင်းတာ မှန်တာ အားသာချက်လေးတွေကို ပထမ ဆုံးယဉ်ကျေးသမှုနဲ့ အရင် ကောင်းတာလေး နဲနဲ စ ချီးမွမ်းလိုက်ရတယ်ဗျ ။ etiquette ပေါ့ဗျာ ပြီးတော့မှ ပြန်လည်ထောက်ပြဆွေးနွေးချင်တဲ့ ဟာကွက်ညံ့ကွက်မှားကွက်တွေကို ယဉ်ကျေးစွာ ဆွေးနွေး ထောက်ပြကြလေ့ရှိတယ်ဗျ
အပေါ်က မှတ်ချက်တွေမှာ မငယ်နိုင်ကို အဲလို ယဉ်ကျေးသမှုနဲ့ လူကြီးလူကောင်း ဆန်ဆန်ထောက်ပြနေကြတာကို မျက်စေ့စုံမှိတ်ပြီး ခင်ဗျားရေးတာထောက်ခံတယ်လို့ ထင်နေတာကိုး။ ကျွန်တော်က မငယ်နိုင်ဟာ ဒီလိုပြောနေရင် သဘောမပေါက်တတ်မှန်းသိလို့ ဒဲ့ပြောရတာပဲဗျို့
မငယ်နိုင်ကို ဘယ်သူတွေက ထောက်ခံနေသလဲလို့ မှတ်ချက်တွေကို သေချာပြန်ဖတ်ကြည့်သင့်တာက မငယ်နိုင်ကိုယ်တိုင်ပါ။ယဉ်ကျေးစွာထောက်ပြနေကြတာတွေကို မြင်လိုက်ပါ။
ခုကကျွန်တော် ပြောတဲ့ အကြောင်းအရာကို ပြန်မဆွေးနွေးပဲ ကျွန်တော့လေသံကိုချည်း ပစ်မှတ်ထားပြောနေတော့တာကိုး..
ခင်ဗျားအားတာမအားတာ ပြင်တာ မပြင်တာ ခင်ဗျားအပိုင်းပါ
February 20, 2011 at 7:32 PM Reply
“ဒါလေးသွားဖတ်လိုက်ပါဦး” - ဟို .. ဟို .. အချိန်မရှိလို့ပါဗျာ ။
“အမှန်ကို မြင်နိုင်ပါစေ” - ဟုတ်ကဲ့ သမ္မာဒိဋ္ဌိ ကြီးများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
“ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်” - ပေးသောဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေဗျား ။
“ခင်ဗျား ညံ့တယ် ၊ ခင်ဗျား အသုံးမကျဖူး ၊ ခင်ဗျား ပြင်သင့်တယ် ၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တင်ပြပုံတင်ပြနည်းကတော့ ဒီလိုဒီလို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ ပုံစံတကျလေး လုပ်စမ်းပါ” - အင်း .. ဟို ... အဲ .. ဟဝှာလေ ... ပြောရမှာ အားနာလိုက်တာဗျာ ။ နောင်များမှပါပဲနော ။
February 20, 2011 at 9:04 PM Reply
ကျုပ်တို့ဗမာတွေထဲမှာ အထူးသဖြင့် မျိုးချစ်တယ်ဆိုသူ၊ ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာဆိုတာကို ထည်လဲသုံးတတ်သူ၊ ဘာသာတရားကို သိပ်အလေးထားတယ်လို့ ဆိုသူတွေဟာ အရေးရယ်အကြောင်းရယ်ဆို သူတို့ချည်းပဲ ကိုယ့်အပွေးကိုယ်လှန်ပြ၊ ဇာတိမန်နင်းကန်ကြွပြကြသူတွေချည်းဖြစ်နေတာ အတော်ဆိုးတယ်။ တကယ့် hypocrites တွေပဲ။
အဲ..ပို့စ်နဲ့သိပ်မဆိုင်ပေမယ့် international conference တွေ symposium တွေမှာ ဝေဖန်ထောက်ပြတာ ဘယ်လိုဆိုတာ မြင်လိုက်မိလို့ပြောရအုံးမယ်။ အဲလို event တွေမှာ အချိန်က အကန့်အသတ်နဲ့ presentation time: 20mins, Q & A time: 10mins စသည်ဖြင့်သာ ပေးလေ့ရှိတာ၊ audience ဆိုတာကလဲ အကုန်လုံးက သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်ရဲ့ specialist တွေချည်းပဲ။ ဘယ်သူမှ အချိန်အကုန်ခံ ပြီးခြေဆင်းတွေဘာတွေလုပ်မနေဘူး၊ short to the point ပဲ။ လိုရင်းကိုသာ တိုက်ရိုက်မေးတာချည်းပဲ။ အလွန်ဆုံး စကားခံရင် thank you for your talk, it's really interesting,and let me ask you this and that... blah blah ဒါပဲဗျ။ :D
February 21, 2011 at 4:38 AM Reply
အစ်မငယ်နိုင်ရေ... ဘလော့ကိုတော့ ဆုံးအောင်ဖတ်ပါတယ်... အောက်က comment တွေကတော့ များလွန်းလို့ ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း မဖတ်နိုင်လို့ ရပ်လိုက်ရတယ်ခင်ဗျာ... မိုင်ဆင်းလို့ အနော်တို့ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ မြန်မာစင်ကာပူဆိုရှယ်ဆိုဒ်ထဲကပါ... အနော့ရဲ့ comment ကို အစ်မကူးထည့်ထားတာတွေ့ပေမဲ့ လင့်တွေပြုတ်နေလို့ ပြန်လာဖြည့်ပေးတာပါခင်ဗျ... အနော့ရဲ့ review ကိုမဖော်ထုတ်ခင်မှာ ဒီနေရာမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အယူအဆကို တင်ပြနေသူအားလုံး (ဆိုလိုတာက အစ်မငယ်နိုင်နဲ့ အမြင်တူသူရော အမြင်မတူသူပါ) အနော့ရဲ့ comment လေးမှာပါတဲ့ research တွေ... စာတွေကို သေချာဖတ်စေချင်ပါတယ်... မိမိရဲ့အမြင်ကိုထုတ်ဖော်ကြတဲ့အခါ စိတ်ချရတဲ့ ဖော်ပြချက်တွေကို ကိုးကားစေလိုပါတယ်... နောက်ဆုံးနဲ့ အရေးအကြီးဆုံးပြောချင်တာကတော့ စိတ်စေတနာကို ဦးစားပေးပြီးပြောကြပါဗျာ... ဘယ်သူမဆို (အစ်မငယ်နိုင်နဲ့ အမြင်တူသူရော အမြင်မတူသူပါ) လူတစ်ယောက်ကိုအပြစ်မြင်တာ အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအားနည်းချက်ရှာပြောတာ ဖြစ်နိုင်သလို လူတစ်ယောက်ကိုချစ်ခင်တာ အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအားသာချက်ရှာပြောတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်... ဒါပေမဲ့ လူနဲ့လူ အချင်းချင်း စေတနာနဲ့ စကားပြောချိုသာကြပါစေ...
Comment by တိတိ on February 15, 2011 at 10:27am
ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်နည်းလေးတစ်ခုပဲ... တင်ပြသွားပုံကောင်းပါတယ်... လူကြီးရဲ့စိတ်နဲ့ ကလေးရဲ့ခံစားချက် ဘယ်လိုမျိုးကွာခြားတတ်တယ်ဆိုတာ တင်ပြသွားတာလေးတွေ တကယ်ကြိုက်ပါတယ်... ဒါလေးဖတ်ရင်း ဆက်စပ်ပြီးတော့ online မှာ children and culture ဆိုပြီး Google ကနေရှာမိတာလေးပါ... click the following link
CULTURAL PROCESSES IN CHILD DEVELOPMENT >> http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=99101738
REPORT> The influence of culture on early child development >> http://usflibraries.typepad.com/fmhiloop/2009/01/report-the-influence-of-culture-on-early-child-development.html
Environmental Influences On Child Development >> http://www.pacwcbt.pitt.edu/Curriculum/911-4%20FP%20and%20Child%20Development/Handouts-911-4%20Foster%20Parenting%20and%20Child%20Development/HO%204%20Environmental%20Influences.pdf
Cultural Influence on Child Development >> http://ctf4kids.org/2009/01/cultural-influence-on-child-development/
February 21, 2011 at 6:09 AM Reply
ကွန့်မန့်တွေလည်း မူးဖြစ်တယ် အဲလေ ဖတ်ဖြစ်တယ်
အတွေးတွေ ပင်လယ်ဝေတဲ့ပို့စ်လေးလို့ မှတ်လိုက်တယ်
ဒီနေ့ပို့စ်ရဲ့ အဓိကပြောချင်တဲ့အချက်ကလေးကို မြင်သလောက် ရှယ်ယာကြည့်မယ် ။
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ကြီးပြင်းရတဲ့ မြန်မာကလေးတွေဟာ မြန်မာစကားကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင် မပြောတတ်တာ ၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို မကျွမ်းဝင်တာ အမျိုးမချစ် လို့မဟုတ်ဖူး ။ အပြစ် မဟုတ်ဖူး ။ ကာလဒေသ၊ပရောဂ အခက်အခဲများကြောင့်လို့ ပြောပြချင်တာပါ ။
အကျိုးအကြောင်းလေးတွေနဲ့ တင်ပြထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ငြင်းပယ်ဖို့မလွယ်သလို ၊ အလွယ်တကူခေါင်း ငြိမ့်ရခက်တဲ့ အဆိုတစ်ခုပဲ အမရဲ့ ။
မိခင်ဘာသာစကား ၊ မိခင်ယဉ်ကျေးမှုကို ဝေးကွာတဲ့ လူတစ်ယောက်က မိခင်တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို ဘယ်လောက်ချစ်တတ်မှာလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်တယ် အမရေ ..
တံငါနားနီး တံငါ အဖြစ်ပဲ နေစေလိုက်မလား . ပတ္တမြားမှန် နွံမနစ်လို့ နှလုံးသွင်းမလား ..
ရေကြည်ရာ မြက်နုရာမို့သာ လို့သဘောပိုက်မလားဆိုတာကတော့ ကာယကံရှင် သဘော အတိုင်းသာ ဖြစ်ပါတယ် ။
February 21, 2011 at 11:00 AM Reply
အပေါ်မှာ “တိတိ” ပြောတဲ့ အချက်အလက်တွေအပေါ် အခြေခံဖို့ အကြံပေးတာဟာ သင့်တော်တဲ့အချက်ပါ ။
“စေတနာ” ရဲ့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး “အားလုံးတော့ သဘောမတူနိုင်ဘူး” လို့ ပြောပြတာလည်း မမှားဖူးလို့ ထင်ပါတယ် ။
မြင်မိတဲ့အချက်ကလေးတစ်ချို့ စီချကြည့်ချင်ပါတယ် ။
- မြန်မာပြည်က ကလေးတွေ အင်္ဂလိပ်စာ တစ်သက်လုံးနီးပါး သင်လာကြရတာ လူကြီးဘဝမှာ အင်္ဂလိပ်လို ပြောနိုင်ကြသလား ။
- တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေထဲက မြို့မှာမွေး ၊ မြို့မှာကြီးပြီး မြို့ကျောင်း (ဗမာလိုသင် ၊ ပြော) မှာနေသူနဲ့ လူမျိုးတူပြီး ဗမာပညာရေး၊ ဗမာစကားပြောပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဝေးနေသူကြားမှာ ဘယ်လိုကွာသလဲဆိုတာ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ဖူးကြသလား ။
- အထူးသဖြင့် အဆိုးဖက် မြင်မိသူတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ ကလေးရဖူးသလား ။ ရဖူးတယ်ဆိုရင် ဘယ်နိုင်ငံမှာလည်း ။ အရှေ့တောင်အာရှမှာ ငွေရှိရင် အိမ်ဖေါ်ခေါ်လို့ရပေမယ့် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေ အများစုမှာ မရတာနဲ့ အခြားမတူတဲ့ လူနေမှုစနစ်တွေရှိတာကို သတိထားမိသလား ။
အချုပ်ပြောချင်တာက အခက်အခဲနဲ့ ခံစားမှုတွေဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ကြုံမှ မလွယ်မှန်း သိနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပါ ။ အပျက်မြင်သူတွေကို လုံးဝမှားတယ်လို့ မပြောပါဘူး ။ လူတိုင်းမှာ အတွေး အသိ အတွေ့အကြုံ အကန့်အသတ်ရှိကြတာကြောင့် ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း လွဲချော်နေနိုင်တာပါပဲ ။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ နှစ် ၂၀ ကျော် နေခဲ့ပေမယ့် ကနေ့အထိ အသစ်တွေထပ်သင် ထပ်သိလာရတာတွေက ဒီလိုစကားမျိုးတွေ ပြောဖြစ်အောင် တွန်းပို့ခဲ့တာပါ ။ အချိန်ယူပြီး တွေးကြပါဗျာ ။
February 21, 2011 at 2:21 PM Reply
မကေ ရေးခဲ့ဘူးတဲ့ ဒီစာလေးကို ဖတ်ကြည့်ကြစေချင်ပါတယ် အော်ဇီနေ မိဘ တစ်ဦဲးရဲ့ လေးစားဖွယ် ပျိုးထောင်ပုံလေးကို တင်ပြထားတာပါ အဲ့မှာပဲ ကိုအောင်သာငယ် ကိုယောဟန်တို့ပို့စ် လင့်ကလေးတွေပါပါတယ်..
February 21, 2011 at 9:45 PM Reply
နိုင်ငံခြားမှာမွေးဖွားကြီးပြင်းရတဲ့ ကလေးတွေ မြန်မာစကားပြောဖို့ရာ အခက်အခဲများစွာ ရှိတဲ့အကြောင်း ၊ မြန်မာစကားပြော မကျွမ်းကျင်တာ ၊ မြန်မာမှု မြန်မာ့ဟန် အားနည်းတာ ဟာ အမျိုးမချစ်တာ မဟုတ်ဖူးဆိုတဲ့ ခံစားချက်
ကလေးငယ်တွေကို အတင်းကြီးဇွတ်ပုံသွင်းလို့ မဖြစ်နိုင်တာမို့ အတင်းအကြပ်ဇွတ်ပုံ မသွင်းစေချင်တာ နဲ့ ကလေးတွေမြန်မာစကားပြောဖို့ ၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာ တွေတတ်သိနားလည်စေဖို့ရာမှာ အခက်အခဲ ၊ အတားအဆီးတွေ ဖြစ်စေတဲ့ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာလူကြီးတွေရဲ့ အမူအကျင့်တွေကို တတ်နိုင်သလောက် ဖျောက်ပေးစေချင်တဲ့ စေတနာ
ကလေးတွေကို ဆုံးမတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော့်အမြင်ကို ပြောရရင်
ကလေးကိုဆုံးမမယ်ဆို ကလေးရဲ့စိတ်ခံစားမှုကို နားလည်တတ်ဖို့ လိုပါတယ် ။ ကလေးရဲ့ စိတ်ကိုနားလည်ပြီးတော့ ကလေးဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်သင့်ကို ချိန်ဆပြီး ဆုံးမရမှာပါပဲ ။
ငါတို့ကကောင်းဖို့ ဆုံးမတာဆိုပြီးတော့ ဟိုဟာလည်းမလုပ်ရ ဒီဟာလည်းမလုပ်ရ အမြဲပဲ တင်းကျပ်လွန်းရင်တော့ ကလေးအတွက်အရမ်းပင်ပန်းပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုမိဘတွေက ကလေးရှေ့ရေးနောက်ရေးလုံးဝမကြည့်ပဲ လွှတ်ထားတတ်တဲ့မိဘတွေထက်တော့ သာပါ တယ် ။ ကလေးကိုဆုံးမဖို့ရာ နားလည်ပေးတတ်မှု ၊ရင်နှီးနွေးထွေးမှု ၊ ကြောက်ရွံ့မှု တို့ ၊ အပြန်အလှန်လေးစားမှု စသည် မျိုးစုံဖန်တီးထားသင့်တယ် ထင်တာပါပဲပဲ ။ အပြန်အလှန် လေးစားမှုတို့၊ကြောက်ရွံ့မှုတို့ကို ထပ်ရှင်းရင် စာရှည်မှာမို့ မရေးတော့ဖူး ။ (ကြိုတော့ ပြော ထားမယ်နော် .. အနော် လူပျို  ) ။ ကလေးနဲ့ မိဘ ရင်းနှီးနွေးထွေးမှု၊ နားလည်မှု အခံရှိရင် တစ်ခါတစ်လေ အကြောက်တရား နဲ့ဆုံးမတဲ့နေရာမှာလည်း ကလေးအတွက် စိတ်ထဲ သိပ် အနာတရ မဖြစ်နိုင်ဖူးပေါ့ ။
အမပြောတဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာလူကြီးတွေရဲ့ အမူအကျင့်တစ်ချို့ကလည်း ဆင်ခြင် ပေးနိုင်ရင် ကောင်းမှာပဲ လို့မြင်မိပါတယ် ။
ဒါကောင်းတဲ့ရှုထောင့်က မြင်ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီပို့စ်ရဲ့ ခေါင်းစဉ်ရယ် နိဂုံးသတ်ပေးတဲ့ နောက်ဆုံးစာပိုဒ်ရယ်ကို ဆက်စပ်လိုက်ရင်
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ မွေးတဲ့မြန်မာကလေးတွေဟာ ဘဝအခြေအနေ ၊ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအရ မြန်မာမှု မြန်မာစကား အားနည်းတာဟာ ပုံမှန်သာဖြစ်တယ် ။ ဒီကလေးတွေ အတွက် မြန်မာမှု ၊မြန်မာစကားဟာ မဖြစ်မနေ (must) ကျွမ်းကျင်စရာမလို ဆိုတဲ့အသိ(message) ကို ပေးသလိုဖြစ်နေတယ် ။ အမကို အသန်းအသန်ငြင်းကြတာ ဒီ message ကြောင့်ဖြစ်မယ် ထင်တယ် ။
အမစာကို အစအဆုံးဖတ်ရင် အမနည်း အမဟန်နဲ့ကလေးကို ကိုယ့်ဘာသာ၊ကိုယ့်ယဉ်ကျေး မှု ၊ ကိုယ့်ဘာသာစကားတွေကို အမနည်းအမဟန်နဲ့ သွန်သင်ဆုံးမတာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ် ။
နောက်အမသားကလည်း ကိုယ့်ဘာသာ ၊ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု ၊ ကိုယ့်ဘာသာစကားကို ထိန်းသိမ်း ရမယ်ဆိုတဲ့ အသိရှိနေတာကို တွေ့မြင်နေရတာပဲ ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဆိုရင် အမသားပဲ ဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံရပ်ခြားမှာမွေးတဲ့ ဘယ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာစကားမပြောတတ်တာ အခြေအနေအကြောင်းကြောင့်မို့ အထင်သေးစရာ ၊တိုက်ခိုက် စရာအကြောင်းမရှိဖူး ။ အားလုံးနားလည်တတ်ကြပါလိမ့်မယ် ။ မြန်မာစကားတတ် ၊ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အကျွမ်းတဝင်ရှိပါလျှက် အမျိုးမချစ်တဲ့လူတွေလည်း ရှိတာပဲလေ ။
အမျိုးသားရေးဖက်က ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အမျိုး ၊ကိုယ့်ဘာသာ ၊ကိုယ့်သာနာကို ချစ်တတ်ဖို့ ကိုယ့်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အကျွမ်းတဝင်ရှိမှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။ အခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိတာမှန်ပေမယ့် သွေးက စကားပြောတတ်တာ မှန်ပေမယ့်
မြန်မာဟာ မြန်မာစကားမပြောတတ်ပဲ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေကို နားမလည် ပဲ ကိုယ့်အမျိုး ၊ကိုယ့်ဘာသာ ၊ကိုယ့်သာသနာ့ကို ချစ်ဖို့ တစ်ဖြည်းဖြည်း ခက်ခဲသွားပါလိမ့် မယ် ။ ဒူးလောက်တင်မှ ရင်လောက်ကျတယ်လို့လည်း ဆိုထားတယ်မဟုတ်လား ။
ဒါကြောင့် မြန်မာဟာ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် မြန်မာစကား ၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ကျွမ်းကျင် ကျွမ်းဝင်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားနေရမယ်ဆိုတဲ့ message လေးပါ ထည့်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းမယ့် ပိုစ့်လေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါကြောင်း အမရေ ။
စဉ်းစားမိသလောက် ဝင်ရှယ်ယာကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
February 21, 2011 at 11:26 PM Reply
ဒီပို့စ်ကို စိတ်ဝင်စားပြီး နောက်ထပ် မှတ်ချက်လာပေးခဲ့သူများဖြစ်တဲ့ ကိုကျော်ထင်၊ တိတိ၊ စေတနာ၊ ကိုရွှေမန်း၊ မီးမီးချောတို့ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တိတိ မှတ်ချက်ထဲက Link တွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စင်္ကာပူမြန်မာဆိုက်က ကျွန်မကူးလာတဲ့ မှတ်ချက်တွေမှာ ပေးထားတဲ့ Link ကို လိုချင်လို့ တိတိမှတ်ချက် တခုကလွဲရင် ကျန်တာက ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို ဆန့်ကျင်ထားတယ်ဆိုတာ သိအောင်ကူးလာတဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ မှတ်ချက်တွေသာ ဖြစ်တယ်။
ကျွန်မ ပြန်ပြီး Review လုပ်လိုက်လို့ တွေ့ရတာကတော့ သဘောထား မတိုက်ဆိုင်တဲ့ အချက်က ဒီလောက် မဟုတ်ပေမဲ့ ဒီပို့စ်မှာ ကျွန်မ ဆိုလိုချက်ကို နားမလည်တဲ့ ပြဿနာက ပိုများနေတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒီပို့စ်ကို လက်မခံသူ အများစုနဲ့ ကျွန်မ အဓိကသဘောထား မတိုက်ဆိုင်တာ ကျွန်မက ကလေးကို စကားပြောတာ အပါအ၀င် သူမလုပ်ချင်တာတခုကို ဘာကိုမှ အတင်းအကြပ် မလုပ်လိုဘူး။ ပြီးတော့ မြန်မာလူကြီးတွေရဲ့ အပြုအမူ အပြောအဆို တချို့ကို အားနည်းချက်အဖြစ် မြင်တယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေက မြန်မာကလေး မြန်မာစကား ပြောကိုပြောရမယ်၊ ဆိုတဲ့ သဘောထားကြောင့် လုပ်ကိုလုပ်ရမယ် ဆိုတာနဲ့ ကျွန်မပြောတဲ့ အားနည်းချက်ဆိုတာတွေကို အားနည်းချက်အဖြစ် လက်မခံနိုင်ဘူး။ ဒါပဲကွဲတာ တွေ့တယ်။ ကျွန်မသဘောထားကို သဘောမတူရင် ဘာကြောင့်သဘောမတူ ဘယ်လိုဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆွေးနွေးရင် ရတဲ့ကိစ္စကို အဲလို မဟုတ်ဘဲ သံသရာ အဆက်ဆက်က ပြဿနာရှိလာတဲ့ ရန်သူကို ရန်မူတဲ့ လေသံနဲ့ မဆိုင်တာတွေကို ထင်ရာလျှောက်ပြော လျှောက်စွတ်စွဲနေတာကို ပြန်ဖြေရှင်းနေရတာနဲ့ ရှုပ်နေတာဖြစ်တယ်။
စေတနာရဲ့ မေးခွန်းကို အစ်မဖြေမယ်
(((မိခင်ဘာသာစကား ၊ မိခင်ယဉ်ကျေးမှုကို ဝေးကွာတဲ့ လူတစ်ယောက်က မိခင်တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို ဘယ်လောက်ချစ်တတ်မှာလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်တယ် အမရေ ..)))
၈၈ က အစ်မတို့ တောတွင်းရောက်တော့ အစ်မတို့ကို လာတွေ့ပြီး ဆေးဝါး၊ အစားအစာ အ၀တ်အစားတွေ လာအကူအညီပေးကြတဲ့ မြန်မာစစ်စစ်တွေထက် ၄၈ နဲ့ ၆၂ ထွက်သွားတဲ့ တချို့ဆို ဗမာလိုလုံးဝ ပြောမတတ်တဲ့ Anglo-Burmese တွေက ပိုများပါတယ်။ မိခင်တိုင်းပြည်နဲ့ ဝေးကွာနေသူဖြစ်စေ တိုင်းပြည်ထဲမှာ ရှိနေသူဖြစ်စေ၊ မိခင်ဘာသာစကားပြောသူဖြစ်စေ၊ မပြောသူဖြစ်စေ တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လောက် ချစ်တယ်ဆိုတာ တဦးချင်း တယောက်ချင်းစီအပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာလိုပြောတဲ့ မြန်မာကမှ မြန်မာကိုပိုချစ်တယ် ယူဆရင်တော့ လုံးဝမှားပါတယ်။ ပြောတာ၊ စားတာ၊ ၀တ်ဆင်တာ၊ အနုပညာ ရသခံစားတာတွေဟာ တဦးချင်းစီရဲ့ ပိုမိုအဆင်ပြေ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်တဲ့ အကြိုက်နဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။ မြန်မာဖြစ်လို့ မြန်မာနဲ့ ပတ်သက်တာကိုပဲ လိုက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ မကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် လုံးဝမတရားပါဘူး။
((((တံငါနားနီး တံငါ အဖြစ်ပဲ နေစေလိုက်မလား . ပတ္တမြားမှန် နွံမနစ်လို့ နှလုံးသွင်းမလား ..
ရေကြည်ရာ မြက်နုရာမို့သာ လို့သဘောပိုက်မလားဆိုတာကတော့ ကာယကံရှင် သဘော အတိုင်းသာ ဖြစ်ပါတယ် ။))))
ကာယကံရှင်ရဲ့ သဘောအတိုင်းဆိုတာ အဲဒါကတော့ အမှန်ပဲ စေတနာ။ မြန်မာလူမျိုးတိုင်း မြန်မာလိုပြောသင့်တယ်ဆိုတာကိုပဲ အစ်မလက်ခံနိုင်တယ်။ မြန်မာလူမျိုးတိုင်း မြန်မာလို ပြောကို ပြောရမယ် ဆိုတာကတော့ အဲလိုခံယူသူနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ပြောသင့်တယ် ပြောမှဖြစ်မယ် ဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ကိုလ်တဦးချင်းစီနဲ့သာ ဆိုင်ပြီး သူ့စိတ်တိုင်းကျ ဆုံးဖြတ်ကြတာ ဖြစ်တယ်။ မိဘက အတင်းသွားဆုံးဖြတ်လို့ မရဘူး။ မိမိသားသမီး အနာဂတ် (လူမှုရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ ပညာရေး၊ ဘ၀လူနေမှုပုံစံ စသည့်..) အရေးကို မိမိဖြစ်စေချင်တာကို မိဘက လမ်းကြောင်းပေးလို့ပဲ ရပါတယ်။ အတင်းလုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး။ လုပ်လို့လည်း မရပါဘူး။ အတင်းလုပ်လို့ ကောင်းကျိုး ဖြစ်လာဖို့မရှိဘူး ဆိုးကျိုးကိုပဲ ဦးတည်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် နားလည်မှု ရအောင် အရင်လုပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ နားလည်မှု ရှိသွားရင်တောင်မှ အမဲသားမစားသူ တယောက်ကို စားကိုစားမှရမယ်လို့ အတင်း ကျွေးလို့လည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီအတိုင်းပဲ မှတ်ယူသင့်တယ်။
February 21, 2011 at 11:48 PM Reply
စေတနာရဲ့ ဒုတိယမှတ်ချက်ကို အခုမှ တွေ့တယ်။ စေတနာ Summary လုပ်ထားတာ ကွက်တိပဲ။ ကျောင်းသားဆိုရင် Literature Review Assignments တွေမှာ တော်တော်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရှိမှာပဲနော့်။ စေတနာ ပြောတဲ့အချက်တွေကို လက်ခံပါတယ်။ အစ်မစွဲကိုင်ထားတာ ဘာမဆို အတင်းလုပ်လို့ ကောင်းကျိုးမဖြစ်ဘူး ဆိုတာပဲ။
((((အမျိုးသားရေးဖက်က ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အမျိုး ၊ကိုယ့်ဘာသာ ၊ကိုယ့်သာနာကို ချစ်တတ်ဖို့ ကိုယ့်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အကျွမ်းတဝင်ရှိမှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။ အခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိတာမှန်ပေမယ့် သွေးက စကားပြောတတ်တာ မှန်ပေမယ့်
မြန်မာဟာ မြန်မာစကားမပြောတတ်ပဲ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေကို နားမလည် ပဲ ကိုယ့်အမျိုး ၊ကိုယ့်ဘာသာ ၊ကိုယ့်သာသနာ့ကို ချစ်ဖို့ တစ်ဖြည်းဖြည်း ခက်ခဲသွားပါလိမ့် မယ် ။ ဒူးလောက်တင်မှ ရင်လောက်ကျတယ်လို့လည်း ဆိုထားတယ်မဟုတ်လား ။)))) စေတနာ ပြောထားတာကို လက်ခံတယ် ဒါပေမဲ့ တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လောက်ချစ်တယ် ဆိုတာက အပေါ်မှာ ဆွေးနွေးထားသလိုပဲ တဦးချင်းတယောက်ချင်းစီနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။
((((ဒါကြောင့် မြန်မာဟာ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် မြန်မာစကား ၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ကျွမ်းကျင် ကျွမ်းဝင်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားနေရမယ်ဆိုတဲ့ message လေးပါ ထည့်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းမယ့် ပိုစ့်လေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါကြောင်း အမရေ ။))))
ဒီလိုအပိုဒ်လေး ပါသင့်ပါတယ်ဆိုတာ လက်ခံတယ်။ တချို့ဒါကို လုပ်ပေးဖို့ လုံးဝလစ်လျူရှုတဲ့ မိဘတွေအတွက် ဒီအပိုဒ်လေးက သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မိဘတွေမှာ လုပ်ပေးဖို့ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာ အစ်မပို့စ်ထဲမှာ ပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာ စေတနာတို့ ထင်သလို မလွယ်ဘူး တချို့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ မိဘတွေ ရှိသလို တချို့က လုပ်ပေးလျက်နဲ့ သားသမီးက ဆန္ဒမရှိလို့ လက်လျှော့ရတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါကြောင့် အစ်မပို့စ်ထဲမှာ သားသမီးကလည်း ဆန္ဒရှိမှ မိဘကလည်း အချိန်ပေးနိုင်မှဆိုတာ မြင်တွေ့ကြားသိနေရတဲ့ အတွေ့အကြုံအရ ရေးထားတာ ဖြစ်တယ်။ ခန့်မှန်းပြီး ထင်တာကို ရေးထားတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီပို့စ်ဟာ အတွေ့အကြုံကို အခြေခံပြီး ရေးတဲ့ပို့စ် ဖြစ်တယ်။ "ကြိုးစားနေရမယ်" ဆိုတာက မဖြစ်မနေ လုပ်ရမယ်လို့ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်တဲ့အတွက် ဒါက ကိုယ်ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး၊ ကာယကံရှင်တွေနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်၊ အကုန်လုံးက မဖြစ်မနေ လိုက်လုပ်ကြမှာလည်း မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သိလို့ ကြိုးစားသင့်တယ်ဆိုတာပဲ အစ်မ ပြောလို့ရနိုင်တယ်။
စေတနာ့ မှတ်ချက်နဲ့ အကြံပြုမှုအတွက် ကြေးဇူးတင်ပါတယ်။
February 22, 2011 at 12:31 AM Reply
မီးမီးချစ် လာထည့်ပေးတဲ့ မကေပို့စ်က Link အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မိဘကလည်း အဲလောက်အထိ လုပ်ပေးပြီး ကလေးကလည်း လိုလားနေလို့ရတာ၊ ဒါတောင်မှ မကေပြောသလိုပဲ နည်းနည်းကြီးလာရင် မသေချာသေးဘူး။ မကေ ပေးထားတဲ့ Link က ကိုအောင်သာငယ်နဲ့ ဆရာယောဟန်အောင် ပို့စ်နှစ်ခုစလုံးကို အစ်မဖတ်ဖူးတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကျတော့ ကိုစိုးအောင်လို လုပ်ပေးဖို့ အခြေအနေ မပေးဘူး တွေ့လား၊ တကယ်တော့ ကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်မှ အခက်အခဲကို သိတယ်ဆိုတာ အမှန်ပဲ။
ကိုရွှေမန်း ပြောလို့ သတိရသွားတယ်။ ဗမာကြားထဲမှာ ကြီးတဲ့တိုင်းရင်းသားကလေးတွေ သူတို့ဘာသာစကားထက် ဗမာလိုပိုသန်သွားတာ အနီးကပ်ဆုံး ဥပမာပဲ။ အထူးသဖြင့် ကျွန်မတော်လှန်ရေးထဲမှာတွေ့ရတဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသက ကရင်တွေဆိုရင် ဗမာလိုပဲ ပြောနေတာ တွေ့လို့ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ အချင်းချင်း ဗမာလိုပြောနေကြတာလဲ ကျွန်မတို့ကို အားနာလို့လား ပြောသာပြောပါရတယ်လို့ တွေ့ခါစက ပြောဖူးတယ်။ အဲဒီတော့ မဟုတ်ဘူးတဲ့ ငါတို့မြစ်ဝကျွန်းပေါ်က မြို့ပေါ်မှာ ကျောင်းတက်တဲ့ ကရင်အတော်များများက အချင်းချင်းတွေ့ရင် ကရင်လိုပဲ ပြောကြတယ်တဲ့ ရှင်းပြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကရင်တွေက တော်လှန်ရေးမှာ တခြားကရင်လို ပြောတဲ့ကရင်တွေလိုပဲ အနစ်နာခံပြီး ကရင့်တော်လှန်ရေးအတွက် လုပ်နေတဲ့သူတွေချည်းပဲ သူတို့ကို ကရင်ကိုမချစ်ဘူး ဗမာလိုကို အထင်ကြီးလို့ပြောနေတယ်ဆိုပြီး သဘောထားလို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
တရုတ်တွေ၊ ကုလားတွေကကော ဘာဖြစ်လို့ လွယ်လဲဆိုတာလည်း အကြောင်းရှိတယ်။ တရုတ်တွေကုလားတွေက ကွန်မြူနီတီကြီးတော့ ကျောင်းတွေမှာရော ရပ်ကွက်ထဲမှာပါ သူတို့အတွက် သီးသန့်စီစဉ်ထားပေးတာ ရှိပါတယ်။ သားသားတို့ ကျောင်းမှာ ကြာသပတေးနေ့တိုင်း Community Language Class ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ တရုတ်၊ အာရပ်၊ တူရဂီ၊ ကျွန်းသား စတဲ့ ဒီကျောင်းမှာ ရှိတဲ့ ကျောင်းသားဦးရေအနက် အတန်းတိုင်းမှာ Class တခုစာ လုံလောက်တဲ့ လူဦးရေ ရှိရင် Community Language Class တခု လုပ်ပေးပါတယ်။ ဗမာက အားလုံးမှ နှစ်ယေက်ပဲ ရှိတော့ Burmese Community Class ဆိုတာ မရှိဘူး။ ဗမာအပါအ၀င် ရုရှားတို့၊ ဂရိတို့ ပိုလန်တို့လို လူဦးရေ မလုံလောက်တဲ့ နိုင်ငံက ကျောင်းသားတွေက English Community Class မှာ တက်ရပါတယ်။ တရုတ်တွေ ကုလားတွေ သာတာ အဲဒီအခွင့်အရေးတွေကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။
February 22, 2011 at 9:25 PM Reply
As our Burmese saying goes, the initial teachers in our lives are our mother and father. Parents just can't blame the environment and society for their kids being americanized. I do seealot of Burmese parents here being so insanely proud of their kids not being able to speak Burmese. That is not the same for other nationalities. Believe me. First of all no one forces them to name their children American names. It is understandable that people born in US will feel like America is their home but I do think parents still playabig role in their language abilities. I was born in Burma and I have never used English to communicate with people until I was in my early 30s but I can now speak English fluently and watch English movies. My point is Burmese kids (probably they (kids and parents) might be ashamed of being labeled as Burmese) should be able to use Burmese in order to communicate with their parents or grand parents or other Burmese people. If you go toaBurmese gathering in US, people would love to use English instead of Burmese but they are still havingavery heavy Burmese accent. I was just wondering how come they can't speak Burmese anymore even though their Burmese accent is still there. If you talk to some Burmese here, they would use Burmese but you have to put up withalot of "Okay", "Yeah", "no". I think we have Burmese words for those usage. The other day I happened to read about the actress Natalie Portman. She said she really loves US but her heart is in Jerusalem. http://en.wikipedia.org/wiki/Natalie_Portman
I take my hat off to those people who still love and cherish their true origins. Just my two cents. Thank you.
February 22, 2011 at 10:20 PM Reply
Anonymous - မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မ သဘာဝတရားကို နည်းနည်း ထပ်ပြောပြချင်တယ်။ ဆေးပညာအရ ဖြစ်စေ သဘာဝတရားအရ ဖြစ်စေ၊ သတ္တ၀ါတိုင်းမှာ မျိုးရိုးဗီဇက လွမ်းမိုးတာ ၂၀% ပဲရှိပြီး ပတ်ဝန်းကျင်က လွမ်းမိုးတာ ၈၀% ရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကလေးတွေမှာ ကျွန်မတို့ဆီက ရတဲ့အမူအကျင့်က ပုံမှန်သဘာဝအတိုင်းဆိုရင် ၂၀% ပဲ ရှိပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားကလည်း ပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုကို အလေးထားတဲ့အနေနဲ့ လူမိုက်ကိုသျှောင် သူတော်ကောင်းနဲ့ ပေါင်းဖက်ဖို့ မင်္ဂလာသုဒ်မှာ အတိအလင်း ဟောထားပါတယ်။ ဘာသာတရား သိပ်ကိုင်းရှိုင်းလှတဲ့ ဗိမ္မိသာရမင်းကြီးရဲ့သား အဇာတသတ်ဟာ အဖသတ်တဲ့အထိ မိုက်ခဲ့တာဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ဖြစ်တယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဒုတိယတန်း ပုံပြင်ထဲက ခိုးသူတွေဆီရောက်သွားတဲ့ ကျေးနဲ့ ရသေ့ကျောင်းကို ရောက်သွားတဲ့ ကျေးညီနောင်နှစ်ဦး ခြားနားသွားတာဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် လွမ်းမိုးမှုကို Anonymous ဘယ်လိုမှ ငြင်းလို့မရဘူး။ ရှမ်းပြည်နယ်တို့ ကယားပြည်နယ်တို့မှာ ကြီးတဲ့ အောက်ပြည်အောက်ရွာက မိဘနှစ်ပါးက မွေးလာတဲ့ ကလေးတယောက်ဟာ သူ့မိသူ့ဖတွေကြိုက်တဲ့ ငပိတို့ ပုဇွန်၊ ကင်းမွန်တို့ထက် ရှမ်းပဲပုပ်၊ တို့ဖူး ခေါပုပ်တို့ကို ပိုကြိုက်တာ သဘာဝ ဖြစ်တယ်။ ဗမာကြားမှာ ကြီးတဲ့ တခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးတွေဟာ ဗမာလိုကို သူတို့မိခင် ဘာသာစကားထက် ပိုသန်တာ သဘာဝဖြစ်တယ်။ ကျွန်မတို့ ကလေးတွေမှာ ပုံမှန်သဘာဝအားဖြင့် ကျွန်မတို့ဆီက အမူအကျင့် ၂၀% ပဲရှိရာကနေ ဟိုဘက် ၈၀% ကအမူအကျင့်တွေကို ကိုယ့်ဘက်ပြန်ပါအောင် မိဘကိုယ်တိုင်က ဖိဖိစီးစီး လုပ်မှ ကလေးကလည်း လက်ခံမှ ဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင် လွှမ်းမိုးမှု ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကလေးရော လူကြီးရော ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ မိမိသန်ရာကို ပြုမူပြောဆို သုံးစွဲတာ အပြစ်တခုအဖြစ် မမှတ်ယူသင့်ဘူး။ Anonymous က ဗမာဆိုပေမဲ့ ဗမာသံစဉ်သီချင်းကို မကြိုက်ဘဲ ခေတ်ပေါ်တေးဂီတကို ကြိုက်ရင်ကြိုက်နိုင်တယ်။ မိမိနှစ်သက်သဘောကျတာကို နားထောင်တာ အသုံးပြုတာဟာ အပြစ်မဟုတ်ဘူး။ ထိုနည်းအတူ ဘာသာစကား အသုံးပြုခြင်း အစားအစာ စားသုံးခြင်းတွေမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ Anonymous ပြောတဲ့ ဗမာတွေလိုမျိုး မရှိဘူးလို့တော့ ကျွန်မ မဆိုလိုဘူး ရှိရင်လည်း သူတို့ရဲ့ ရွေးချယ်မှုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကလေး ဗမာလိုပြောမတတ်တာကို ဂုဏ်ယူတဲ့ မိဘရှိတယ်ဆိုတာတော့ ကျွန်မ လုံးဝမယုံဘူး။ အဲဒါတော့ Anonymous မှာ ကလေးမရှိလို့ ပြောတဲ့စကားပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်ကလေးကို ကိုယ့်ဘာသာစကားမဆိုထားနဲ့ တခြားဘာသာစကားတခုခု ပိုတတ်ရင်တောင် ပိုပြီးအသုံးဝင်တယ်ဆိုတာ သိပြီး ဘာသာစကား တခုထက် ပိုတတ်တာကို ဂုဏ်ယူလေ့ ရှိပါတယ်။ လူတိုင်းက မိမိဘ၀ပုံစံကို မိမိစိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ကြတဲ့နေရာမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်တင်စရာ မရှိဘူးလို့ ကျွန်မထင်တယ်။
March 10, 2011 at 2:12 AM Reply
To those people who think that the adults are always right, children have no right to talk back, children should not talk with maturity, children knows nothing and adults know best for the children.... (read Htay Than Htwe Kyu and followers...)
What make u think they are wrong when the Burmese Junta say that u r not worthy of democracy and u should be ruled by army only? What make u think they are wrong they say they know better than you and u know nothing about your daily life? What make you think they are wrong when they says they are above all and you should not be criticizing them?
The fact of the matter is that you grew up inaclosed society which choose to destroy itself by breeding the authoritarian government. Your society have instilled barbaric mentality into your useless brain. Your values and norms are against the prevailing norms and values inafree society. You, by chance or by luck, cameafree society but you think those values and norms their society has based upon are so wrong.
You are so old so can't be taught anymore. Your children who grow up in the free society learn those democratic values which you think is against your Burmese culture.
March 10, 2011 at 2:17 PM Reply
Uh, Anonymous, you're right but usingabit of minced words would helpalot. No offence but you won't be able to change these people outright. However, giving them some options to choose from may lead toabetter outcome.
March 11, 2011 at 12:23 AM Reply
ဒါကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေ ကိုယ့်ဘာသာစကားကို သင်ကြားခွင့်ပြုဖို့ တောင်းကြတာပေါ့ဗျာ။ တိုင်းရင်းသားတွေကို ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေး တဒင်္ဂလောက် ဝင်သွားရင်ကို စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရာမှာ အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့်ပါပဲ။
April 26, 2011 at 5:01 PM Reply
'' သံမဏိမြင့်မိုရ် ''
အမေဆိုတာ-အရာရာကို အခါခါလည်းခွင့် လွှတ်တယ် ၊
အမေဆိုတာ-သမုဒ္ဒရာကို ပြာကျအောင်လည်းမီရှို့နိင်တယ် ၊
ကျောင်းအုပ်ကြီးလည်း ဖြစ်နိင်တယ် ။
May 25, 2011 at 8:58 AM Reply
24 May 11, 12:58 PM
မောင်မေတ္တာ: အမိဘာသာ စကားကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ဆိုတာ လူတိုင်းရဲ့ တာဝန်ပါလို့၊
May 28, 2011 at 9:28 PM Reply
ကလေးစကားကို အတည်ယူစရာ မလိုဘူး ထင်သူ၊ ကလေးက အမေကို ပြန်ပြောတယ် ထင်သူအားလုံးအတွက် forward mail က စာလေးနှစ်ပိုဒ်ပါ
((((တစ်နေ့မှာ အရှင်သာရိပုတ္တရာ မထေရ်ဟာ အမှတ်တမဲ့ သင်္ကန်းကိုင် တော်မူတဲ့ခါ သင်္ကန်းအစွန်းအနားက မညီမညာ ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါကို ရှင်သာမဏေဖြစ်စ ၇-နှစ်အရွယ် ကိုရင်ငယ်ကလေးတစ်ပါးက မြင်တွေ့သွားရာ "အရှင်ဘုရား သင်္ကန်းကို ညီညီညာညာ ၀တ်ရုံသင့်ပါတယ်ဘုရား" လို့ လက်အုပ်ချီပြီး လျှောက်ထားပါတယ်။ အဲဒီအခါ အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်က မိမိသင်္ကန်း မညီမညာတာကို သင့်တော်တဲ့နေရာမှာ ကောင်းမွန်စွာ ပြင်ဝတ်ပြီး ကိုရင်ထံ ပြန်လာကာ "ဒီလောက်ဆို သင့်တော်ပါပြီလား"လို့ ဆရာအရာမှာထားပြီး တလေး တစား တုံ့ပြန်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်ရပ်ကလေးကို အခြေခံကာ နောင်တစ်ချိန်မှာ အရှင်သာရိပုတ္တရာ မထေရ်မြတ်က "ဒီနေ့မှာပဲ သာမဏေ ဖြစ်စ ၇-နှစ်အရွယ် ကိုရင်ငယ်ကလေးက ဆိုဆုံးမလာသည့်ဖြစ်စေ သူတော်ကောင်း တွေရဲ့ ဆိုဆုံးမမှုမှန်သမျှကို ဦးထိပ်တင်ပြီး ခံယူပါတယ်။ ကိုယ့်အမှားကို ထောက်ပြပြီး ဆုံးမသွန်သင်တတ်သူဆရာကို ရွှေအိုးကို လက်ညှိုးထိုး ညွှန်ပြ ပေးသူလို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားပြီး ဆည်းကပ်ပါတယ်"လို့ ဥဒါန်းကျူးရင့်ကာ မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ နှလုံးသားဆိုတာ ၀ါးရုံပင်မြင့်မြင့် ကြီးတွေလိုပဲ အထက်ကို ပိုမြင့်မားလေ အောက်ကို ပိုမိုညွတ်ကိုင်းလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို နှလုံးသားမျိုး ရှိတော်မူခဲ့လို့လည်း အရှင်သာရိပုတ္တရာ မထေရ် မြတ်ကြီးဟာ ရှင်ပဏ္ဍိတ၊ ရှင်သုခ၊ ရှင်တိဿ စတဲ့ ၇-နှစ်အရွယ် သားတပည့် ရဟန္တာ ကိုရင်ငယ်လေးတွေရဲ့ အင်မတန် ချစ်ခင်မြတ်နိုး အားကိုးထိုက်တဲ့ ဥပဇ္ဈယ် ဆရာ ဖခင်ကြီးတစ်ဦး ဖြစ်တော်မူခဲ့တာပါ။))))
June 11, 2011 at 9:47 AM Reply
The kids should visit ghettoes
to see that there is reverse
race discrimination too practised
by people of colour to whites.
I think kids dismiss those Burmese parents' comments because children
despise their parents. In schools,
they teach good liberal and ideal values but that does not mean that
rich and upper middle class parents
will teach samne value in dinner
July 31, 2011 at 7:24 PM Reply
စင်ကာပူမှာ တရုတ်ခလေးတွေ တရုတ်လိုပြောတက်တယ် ကုလားလေးတွေလဲကုလားလိုပြောတက်တယ်
မလေးတွေလဲ မလေးလို ပြောတက်တယ်
ဗမာ ခလေးကြမှ မပြောတက်ဖူးဆိုတာကတော
January 17, 2012 at 1:40 AM Reply
သိပ်ကောင်းတဲ့ ဗဟုသုတတခုပါ။ မငယ်သားလိုဘဲ ကျမကိုယ်တိုင်မကြိုက်ခဲ့ တဲ့ ဗမာလူမျိုးရဲ့ ဓလေ့တွေရှိ
ခဲ့ ဘူးပါတယ်။ ဒါတောင်ကိုယ်က ကိုယ့်ပြည်မှာကြီးပြင်း
ရတာ ဒါပေမဲ့ မနှစ်သက်တာတော့အမှန်ဘဲ။ ကဲ့ ရဲ့ တတ်လွန်းတယ်လို့ လဲမြင်မိတာပါ။ ကုလားလူမျိုးနဲ့ တရုပ်လူမျိုးတွေကျတော့သူတို့ သားသမီးတွေကိုဘယ်တိုင်းပြည်မှာမွေးမွေး သူတို့ စကားကိုတော့ပြောတတ်အောင်လုပ်နိုင်တာကိုတော့ချီးကျူးမိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာမွေးတဲ့ ကြီးပြင်းရတဲ့ ခလေးတွေအားလုံး အမေစုကိုအားကျတဲ့ခလေးလေးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
I totally disagree with this post.Parents are responsible for this.